Ngụgharị Amaechina Nke G. I. Nwaozuzu
Ezebube, Chinedu Chidiebere Ngalaba Lingwistiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa ndị Ọzọ Mahadum Naịjirịa, Nsụka chinedu.ezebube@unn.edu.ng 07030565592/08171253789
Ọrụ nchọcha a mere ngụgharị ejije Amaechina nke G. I. Nwaozuzu dere. Ebumnuche ya bụ ịgbagha echemeche nke ụfọdụ ndị ọgụụ nakwa ekwumekwu ọkọakụkọ n’ejije Amaechina na ama Amaechina chiri. Ọrụ nchọcha a mere nke a site n’iji atụtụ Dikọnstrọnshọn nke Jacques Derrida chepụtara. O ji usoro ‘agụm-ugbo-abụọ’ ma mee ngụgharị ya bụ ejije. Site na nchọpụta nchọcha, a hụtara na n’agbanyeghị na Ibekwe tụwara Udumma ime, nwa ahụ Udumma dị ime ya bụ nke Amaechina ma ọ bụrụ na a tụlee ya site n’ịgbakwasị ụkwụ n’ihe omenaala ndị nabatara. Site n’inyocha usoro omenaala alụmalụ ndị Igbo, ekwumekwu Ibekwe nakwa akparamagwa na ekwumekwu Udumma, a gbaghara echiche na ‘ama Amaechina chiri’ n’ejije Amaechina.
Ọkankụzi Gabriella Ihuarugo Nwaozuzu edeela ọtụtụ agụmagụ. Akaraka ya n’ebe ide agụmagụ nọ pụtawakara ihe n’ejije na abụ. Ejije ndị o derela gụnyere Ome Ihe Jide Ọfọ (1991), Ajọ Obi (1998), Nke M Ji Ka (2005), Eruru (2009) na Amaechina (2014). Naanị otu akwụkwọ abụ nke naanị ya dere a kpọrọ Akị na Ụkwa (2015) ka o nwere, n’agbanyeghị na o nwegasịrị abụ n’ụyọkọ abụ Igbo nke ndị odeabụ ndị ọzọ chịkọbara. Nwaozuzu site n’agụmagụ nka ya ndị a na-ezipụta nsirihụụwa ndị Igbo, mgbanwe batarala n’obodo, ihe obodo nabatara nakwa nke ha na-agbarụrụ ihu. Iji kwado nke a, Nwadike (1992) kọwara agụmagụ dịka ọrụ nka nke sitere n’echiche ma bụrụ nke e si na ya egosipụta ma na-ahụ ndụ. Nke a pụtara na agụmagụ dị ka enyo, nke e jị ele ndụ na obibi ya.
Dịka agụmagụ na-enyocha ndụ, ọ na-arụtụ aka n’omenaala site n’izipụta usoro ndị si ebi ndụ ha. Agụmagụ na-emejupụta ihe ndị a site n’iji asụsụ rụọ ọrụ n’ụzọ nka. E kewara agụmagụ ụzọ atọ gbara ọkpụrụkpụ – iduuazị, ejije na abụ. Ọrụ nchọcha a gbadoro ụkwụ n’ejije. Ejije, dịka Ikeokwu (2000) siri kọwaa, bụ emereme nke (onye) ndị mmee na-ejije agwa ma ọ bụ akparamagwa (onye) ndị ọzọ n’ihu ndị nkiri bụ ndị akaebe n’elu nkwago ma ọ bụ obom. Ejije nwere ike ịdị n’ụdị ndepụta, n’agbanyeghị na ụdị kacha mkpa e mebere ejije bụ maka mmepụta/ngosi.
Ọrụ nchọcha gbadoro ụkwụ na ngụgharị ejije Amaechina iji nye nkọwami gbasara echiche ndị dị na ya bụ ejije. Agụmagụ, dịka ọrụ nka, nwere ike inwe karịa otu nghọta. Nke a so n’otu ihe mere ntụle/nnyocha agụmagụ ji dị mkpa n’ihi na ọ na-enye aka eduba ndị ọgụụ n’ịmata ihe miri emi gbasara agụmagụ. Ọzọ, onye ntụle agụmagụ ga-agba mbọ lekwasị agụmagụ ọ na-atụle anya nke ọma iji chọpụta ụzọ dị iche iche ya bụ agụmagụ siri metụta ndị mmadụ, omenaala na usoro ebimndụ. Ọ dị mkpa ịrụtụ aka na ntụle agụmagụ nwere ike ibute arụmarụ ụka. Arụmarụ ụka a abụghị nke imegide ya bụ agụmagụ kpọmkwem, kama, ọ bụ isite n’echiche ụfọdụ ma ọ bụ asụsụ agụmagụ rụtụ aka ihe ndị ọzọ zoro ezo gbasara agụmagụ. Site na ya bụ arụmarụ ụka, e nwere ike inye nkọwa ma ọ bụ nchọpụta ma ihe ndị ahụ zoro ezo, ma ha a na-akwado ma ọ bụ emegide echiche odee ya bụ agụmagụ. N’ala Igbo, ọ bụrụ na mmadụ nwụọ n’amụtaghị nwa, a na-ahụta ya dịka ihe egwu. Abasili (2004) rụtụrụ aka na nke a ga-eme ka ama onye ahụ chie, ma bụrụ nke ma ndị dị ndụ, ma ndị nwụrụ anwụ ga-echefu. Nke gosiri na ndị Igbo bụ agbụrụ na-ejighi ‘ama’ ha egwu egwu. Dịka o si metụta ejije Amaechina nke G. I Nwaozuzu, ọrụ nchọcha a chọrọ ịmata n’eziokwu, ma ama isi agwa nọ n’ejije echiri ka ọ bụ na o chighị.
Nkenke akụkọ gbasara ejije Amaechina
Amaechina bụ ejije Igbo nke a tọrọ ntọala ya n’oge agha. Chike na Egondụ mụtara naanị otu nwa – Amaechina. Egondụ achọghị ka otu nwa nwoke sonye na ya bụ agha. Nke a mere o ji kwanye ya ịlụ nwaanyị ngwa ngwa. N’ihi ihe oge wetara, Egondụ chọkwara ka Amaechina na nwunye ya bụ Udumma mụnye ya nwa; mana nke a abụghị ihe Amaechina chọrọ. Amaechina, na nke ya, chọrọ ịga agha. Ọ bụrụ na ọ lọta agha, o nwezie ike ịmụba ụmụ. Site na mgba okpuru nke enyi Amaechina bụ Ibekwe gbara ya, Amaechina mechara gaa agha n’agbanyeghị mbọ niile Egondụ gbara. Chikwe, bụ nna Amaechina bụ ofeke mmadụ nke naanị ịṅụ mmanya bụ ihe ọ maara nke ọma. Chikwe na Egondụ mechara nwụọ n’oge agha. Ka agha biri, Ibekwe gobiri ndị ga-atọrọ Amaechina ma gbuo ya ka ha na-alọta agha n’ihi mmasị o (Ibekwe) nwere n’ebe nwunye Amaechina nọ.
Ka Ibekwe lọtara, ọ gwara Udumma na ọha obodo na ndị iro gburu Amaechina n’ụzọ ka ha na-alọta. O ji ohere ahụ kpọrọ nwunye Amaechina. Ka Chukwu si chọọ ya, ndị tọọrọ Amaechina egbughị ya, kama ha hapụrụ ya ma gwa ya onye kpara nkata ka e gbuo ya. Ka Amaechina lọtara, ọ chọpụtara na Udumma dị ime tinyere na ya na Ibekwe bizi. Nke a mere ka Amaechina gbuo Ibekwe ma gbukwaa onwe ya.
Amaechina dịka ejije Igbo bụ akwụkwọ e ji akụziri ụmụ akwụkwọ na-eme Igbo agụmagụ Igbo na Ngalaba Lingwistiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa ndị Ọzọ, Mahadum Naịjirịa, Nsụka nakwa ụfọdụ ụlọ akwụkwọ dị elu na Naịjirịa. E ji ya bụ ejije kụziere ụmụ akwụkwọ ndị nọ n’afọ nke anọ, agba 2016/17 ‘Ejije Ọlọrọọhụrụ Igbo’ nakwa ndị nke afọ atọ, agba 2017/2018 ‘Mkpọlite Ejije Igbo’ na Nsụka. Na mkparịta ụka ọchọcha na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ndị a gbasara ejije Amaechina, ha na-ahụta ya na ebe ọ bụ na Ibekwe napụrụ Amaechina nwunye ya, ama ahụ nke Egondụ gbara mbọ ka ọ ghara ichi echiela.
Ọzọ kwa, Nwaozuzu dịka onye odee, ji nka ‘ọkọakụkọ’ rụọ ọrụ mgbaama n’ejije ya. Ọkọakụkọ n’ejije Amaechina na-enye ndubata n’omume ma ọ bụ emume nke ọ bụla. Ihe ọkọakụkọ kwuru na ngwụcha ya bụ ejije bụ nsogbu nke ọrụ nchọcha a na-eleba anya. Ọ sịrị:
Amaechina! Egondụ lụtaara otu mkpụrụanya ya ji isi ụgwọ nwaanyị n’oge, ka ama ya ghara ichi. Ewo! Egondụ amaghị na osisi ga-adako adako, e gbugọdị ya n’ọdọ achara, ọ ga-adakorịrị. Amaechiela, ụzọ aghọọla ọhịa. Ihe agha mere …(107)
Site n’ekwumekwu ọkọakụkọ dị n’elu, ọ pụtara n’eziokwu, ama Amaechina echiela. Mana, site n’iji usoro dikọnstrọnshọn, ọrụ nchọcha a gbaghara echemeche na ama Amaechina echiela. Na nchịkọta, ebumnuche nchọcha a bụ ime ngụgharị ejije Amaechina ma gbaghaa echemeche nke ụfọdụ ndị ọgụụ na ọkọakụkọ nwere na ama chiri na ya bụ ejije.
Ngụgharị dị oke mkpa n’agụmagụ n’ihi na ọ na-enye aka agba echiche dị omimi nke ndị ọgụụ nkịtị nwere ike, ha agaghị enwe ike achọpụta n’agụmagụ. Site na ngụgharị, ọchọcha nwere ike ịkwalite echemeche e nwere gbasara agụmagụ, ime mgbagha gbasara ụfọdụ echemeche, agwa ma ọ bụ akparamagwa dị n’agụmagụ ma ọ bụkwanụ ịkatọ echemeche e nwere n’ebe agụmagụ dị. Nke a kwadoro echemeche na agụmagụ ọ bụla enweghị otu nghọta n’ihi na nhụrụụwa, usoro echiche na nghọta ndị ọgụụ nwere ike ịdịwaga iche n’onwe ha. Nke a mere o ji dị mkpa ime ntụlegharị agụmagụ/ọrụ nchọcha ndị e merela dị ka o si metụta ngụgharị. Ọ ga-enye aka izipụta ohere ọrụ nchọcha chọrọ imechi.
Ikeokwu (2009) mere ngụgharị Isi Akwụ Dara n’Ala nke Tony Ubesie iji chọpụta etu jenda si arụ ọrụ n’agụmagụ. Iji mejupụta ebumnuche nchọcha ya, o ji atụtụ dikọnstrọnshọnizm nke Jacques Derrida mee ngụgharị iduuazị ahụ iji nye agwa Chike na Ada ohere ịzara ọnụ ha. Ikeokwu (2009) na ngụgharị, katọrọ ọtụtụ akpọmọnụ a na-enye agwa bụ Ada n’ihi ụdịrị agwa ọ kpara n’oge agha. Ọ rụtụrụ aka na n’agbanyeghị na ihe Ada mere adịghị mma n’anya mmadụ na Chukwu, ọ dị mkpa ịchọpụta na ọ bụrụ na Chike, dị ka di Ada mere ihe a tụrụ anya n’aka ya dị ka nna ezinaụlọ n’oge agha ahụ, Ada agaghị akpa agwa ọjọọ ndị ahụ ọ kpara. Ikeokwu (2009) ji nke a kwado echemeche ya na abụm nwoke ma ọ bụ nwaanyị bụ nke ihe oge wetara na ọnọdụ na-akụrụ nkwa. Ọ kọwara na nkwanye ugwu na nsọpụrụ Chike nwetara n’aka Ada tupu agha amalite bụ maka na o (Chike) mere omume ka nwoke. Oge agha malitere, ekweghị aga agha na enweghị ike inyeju ezinaụlọ afọ dị ka nna ezinaụlọ mere ka Chike ghọọ nwaanyị e kechiri n’ahụ nwoke. Ikeokwu (2009:22) rụtụrụ aka na Ubesie, dịka onye odee, sitere na kọọnkọfe ya, chefuo onwe ya. O kwuru na “o chefuru na ọ bụ ya kpụrụ ma kee agwa Chike na Ada, tinyekwa omume, echiche na okwu n’ime ha. Ya mere, ihe ọ chọrọ ka anyị ghọta ka ọ gbara mbọ ime ka anyị ghọta, ma cheekwa echiche ka o si eche. Kama, ya na ndị ntụle na nnyocha ụfọdụ chefuru na agụmagụ ọ bụla nwere ngụgharị ma ọ bụ nghọtagharị, dịka anyị mere na nchọcha a.” Na nchịkọta, Ikeokwu n’ọrụ nchọcha ya, na-akọwa na ikpe amachaghị Ada, kama, n’ụfọdụ ụzọ, ya bụ ikpe makwara Chike.
Ikwubuzo na Eze (2014) mere ngụgharị ejije ọdachi anọ nke Goddy Onyekaọnwụ dere iji gbagha echemeche ndị ọchọcha ụfọdụ na agwa ukwu ndị nọ n’ejije Nwata Rie Awọ, Eriri Mara Ngwugwu, Ụwa Ntọọ na Ọkụ Ghara Ite bụcha odogwu ọdachi. Ha gbaghakwara echemeche na agwa ukwu ndị ahụ gbasoro usoro ọdachi nke Aristotle. Iji kwado nke a, Ikwubuzo na Eze (2014) mere nkọwa na mkpọwa onye e nwere ike ịkpọ ‘odogwu,’ ‘ọdachi,’ nakwa ‘odogwu ọdachi’ n’ejije. Ha kọwara na ọ bụrụ na a tụlee onye Aristotle rụtụrụ aka dịka odogwu ọdachi, a ga-aghọta na ọ bụ mmadụ dị ka mmadụ nkịtị, nke ihe mberede/ọdachi dakwasịrị ya abụghị maka na ọ bụ agwa uhie, kama maka obere mpachọ o nwere n’agwa ya. Ọ kọwara na ọ bụ ọdịda onye dị etu a na-eweta mmetụta n’obi, ebere nakwa ụjọ n’ebe ndị ọgụụ nọ. Ha jikwa ohere ahụ zipụta ndịiche dị n’etiti ọdachi Aristotle na nke Shakespeare. Na nchọpụta ha, ha chọpụtara na agwa dị ka Awọrọ, na Nwata Rie Awọ ekwesịghị ka a kpọọ ya odogwu ọdachi dịka ụfọdụ ndị ọchọcha na-eme. Nke a bụ n’ihi na ụfọdụ akparamagwa Awọrọ n’ejije ahụ; dịka ịbụ mkpi na-agbara ọha ehi, itinye ọgwụ na nri nke ya, nakwa irefu nwa ya nwaanyị ma mechaa lụrụ ya n’amaghị ama abụghị ihe e ji ama odogwu. Ikwubuzo na Eze (2014) kọwara na Awọrọ bụ naanị agwa uhie nke nhịahụ/nsogbu ya bụ nke sitere n’aka ya. Ha kwuru na ịkpọ Awọrọ odogwu ọdachi maka ọnọdụ ya dịka ọka mgba obodo erijughị afọ. Ha katọrọ echemeche na ọnwụ Awọrọ n’ejije ahụ na-eweta mmetụta obi ụjọ n’ihi na Awọrọ, dịka agwa kpara agwa ọjọọ natara ntaramaahụhụ ruuru ya. Ikwubuzo na Eze (2014) n’ọrụ nchọcha ha rụtụrụ aka na agwa ukwu dị ka Awọrọ, Ebubedike na Orieji Okwundu n’ejije Onyekaọnwụ abụghị odogwu ọdachi, kama, ha bụ agwa ọdachi nkịtị ma ọ bụ agwa agwa uhie. Nke a bụ n’ihi na ọdịda agwa ndị ahụ esiteghị na mpachọ dị n’agwa ha, kama o sitere n’agwa ọjọọ e ji mara ha n’ejije ndị ahụ.
Ọrụ Ikeokwu (2009) na nke Ikwubuzo na Eze (2014) gbadochara ụkwụ na ngụgharị agụmagụ Igbo. Ebe nke Ikeokwu (2009) gbadoro ụkwụ n’iduuazị, nke Ikwubuzo na Eze (2014) gbadoro ụkwụ n’ejije Onyekaonwu. Myiri dị n’etiti nchọcha ndị a atụlegharịrị na nke a na-eme ugbu a bụ na ha niile lebara anya na ngụgharị agụmagụ Igbo. Ebe nke Ikeokwu (2009) nyochara iduuazị iji zipụta na ikpe mara ma Chike ma Ada n’Isi Akwa Dara n’Ala, nke Ikwubuzo na Eze (2014) nyochara ejije ma gbakwasị ụkwụ na mgbagha odogwu ọdachi n’ejije anọ nke Goddy Onyekaọnwụ, ọrụ nchọcha a na-eleba anya n’ejije Amaechina iji gbaghaa echemeche na ama Amaechina chiri.
Atụtụ njiarụọrụ nchọcha a bụ atụtụ Dikọnstrọnshọn, nke sitere n’echemeche Jacques Derrida. E wezuga Jacques Derrida, ndị ọzọ a maara n’atụtụ a gụnyere Roland Barthes, Jacques Lacan na Michel Foucault. Atụtụ dikọnstrọnshon sitere na poststrọkchọralizm. Nke a mere oge ụfọdụ, e nwere ike iji dikọnstrọnshọn nọchite anya poststrọkchọralizm (Goring, Hawthorn & Mitchell, 2011 na Dobie, 2012). Dịka Li na Cheng (2011) siri kọwaa, atụtụ dikọnstrọnshọn na-eme ngụmi agụmagụ iji gosipụta na agụmagụ enweghị otu nkọwa/nghọta. Echemeche a megidere atụmatụ ndị Strọkchọralizm, ndị kwenyere na agụmagụ nwere otu nkọwa/nghọta. Ọ dịkwa mkpa ịrụtụ aka na nghọta agaghị adị ire ma e wezuga ọnọdụ.
Ọrụ nchọcha a gbasoro usoro Derrida, nke ọ kpọrọ ‘agụm-ugbo-abụọ’ (Dobie, 2012). Nke a pụtara na ọgụụ ga-ebu ụzọ gụọ agụmagụ n’usoro ọdịnaala/nkịtị iji wepụta nghọta izugbe onye ọ bụla gụrụ agụmagụ ahụ na mbụ ga-enwe. Nke a bụ ọgụgụ nke mbụ. N’ọgụgụ nke abụọ, ọgụụ ga-agba mbọ ịgbagha nghọta sitere n’ọgụgụ nke mbụ iji zipụta na ọgụgụ nke mbụ, n’ụzọ dị aṅaa, ghagidere onwe ya. Ọgụgụ agụmagụ n’ụzọ nkịtị na-agba mbọ iwepụta nghọta maka agụmagụ mana ọgụgụ agụmagụ n’ụzọ dikọnstrọnshọn metụtara ajụmajụjụ, nke na-achọ igosipụta na ihe agụmagụ na-ekwu dị iche n’ihe ọ na-akọwa. Dikọnstrọnshọn metụtara ngụgharị agụmagụ iji degharịa ya ma gbaghaa echemeche nghọta nkịtị agụmagụ nwere. Nchọcha a ga-eme ọgụgụ Amaechina nke G. I. Nwaozuzu site n’igbaso usoro agụm-ugbo-abụọ nke Derrida iji gbaghaa echemeche na ama chiri n’ejije Amaechina.
Nnyocha agụmagụ n’uju
N’ebe a, ọchọcha ga-arụtụ aka n’ihe ndị ọ hụtara mere ngụgharị Amaechina ji dị mkpa site n’iji usoro agụm-ugbo-abụọ nke Jacques Derrida wee rụọ ọrụ. Ihe ndị a bụ ihe ndị ọ hụtara gbaghara echemeche nke mbụ e nwere na ama echiela.
Usoro omenaala alụmalụ ndị Igbo
Ndị Igbo bụ ndị ejighị alụmalụ egwu egwu. Ha na-akpọ ya mkpa. Ekwealor (1998) kọwara alụmalụ dịka njikọta nwoke na nwaanyị dịka di na nwunye ka o siri dị n’omenaala, nke ga-eme ka ụmụaka a ga-enweta na njikọta ahụ bụrụ nke obodo nabatara. Otu n’ime ihe dịkarịsịrị mkpa ndị mmadụ ji aba n’alụmalụ bụ ọmụmụ. O nweghị ihe e nwere ike iji tụnyere ọmụmụ n’ala Igbo. Nke a kpatara na ọ na-echu onye Igbo ọ bụla ụra ma ọ bụrụ na nke a esiere ya ike imepụta. Ndị Igbo na-ezipụta nke a n’uju site n’ụdịrị aha ha na-agụ ụmụ ha. Ọmụmaatụ gụnyere aha dị ka Nwakaego, Nwabụwa, Gịnịkanwa, Nwaamaka na Madụka. Ndị Igbo site n’aha ndị a na-ezipụta nkwenye ha nwere n’ebe nwa dị. Ọ dị mkpa ịrụtụ aka na ndị Igbo nwere nkwenye dịgasị iche iche gbasara nwa.
Ekwealor (1998:22) rụtụrụ aka na otu n’ime nkwenye ndị Igbo gbasara nwa bụ na nwa abụghị ihe otu onye nwe. Ọzọ, ndị Igbo kwenyekwara na nwa, tụmadị nwa nwoke, na-eme ka ama ghara ichi. N’Amaechina, Egondụ gbara nnukwu mbọ ịhụ na nwa ya nwoke bụ Amaechina lụrụ nwaanyị n’oge. Amaechina rụtụrụ aka na nke a oge ọ sịrị nne ya:
Agwara m gị ka i chetụ n’ihi na ọ dịghị onye ma ebe agwọ anyasị a bụ agha dowere isi. M ka na-ekwu, i bugalarịị mmanya ịkụ aka, sị m na agha gahụ ebi. Ugbu a, gịnị mere? (16-17).
Nke a pụtara n’eziokwu, na ọ bụ Egondụ kwanyere nwa ya ịlụ nwaanyị n’oge n’ihi agha iji hụ na ama di ya agaghị echi. Ọ pụtakwara na a lụrụ Udumma nke ọma, n’usoro omenaala. N’agbanyeghị mbọ niile Egondụ gbara, ekwumekwu ya nye Amaechina n’omume nke mbụ, ngosi nke abụọ mechara bịa na mmezu. Ọ sịrị ya:
… Amaechina mụnye m nwa. Onye arachaghị ọnụ n’ụgụrụ na-eche ka ụgụrụ kwụsị ka ọ rachaa ọnụ ya, ụgụrụ nwekwara ike rachaala ya ọnụ ahụ (17)
Okwu a dị n’elu bụ nke jupụtara na mbụrụ. Odee Nwaozuzu ji mbụrụ ‘ụgụrụ’ nọchie anya ‘agha’ na ‘Ibekwe’ n’ihi na ka agha biri, Ibekwe, site n’ụzọ aghụghọ, ghọọrọ ụgụrụ ma rachaara Amaechina ọnụ ya (Udumma). N’agbanyeghị na Ibekwe tụwara Udumma ime, ọ dị mkpa ịrụtụ aka na e nweghị ebe a hụtara na Ibekwe mere ihe n’isi Udumma dị ka Amaechina siri mee. Ọ bụrụ na a gbaghaa ya na Ibekwe lụgharịrị Udumma, ajụjụ ga-abụzi, ‘kedu onye Ibekwe nyeghachiri isi akụ nwaanyị Amaechina mere n’isi Udumma oge ọ lụrụ ya dị ka nwunye n’usoro omenaala?’ Omenaala Igbo kwenyere na ọ bụrụ na mmadụ achọọ ịlụghara nwaanyị mmadụ lụburula, ọ ga-agba mbọ kwụghachi di nwaanyị nke mbụ, isi akụ nwaanyị o mere n’isi nwaanyị ahụ iji mee ka nwaanyị ahụ ọ chọrọ ịlụ bụrụ onye na-enweghị ihe ga-egbochi ya ịlụ di. Ọ bụrụ na e mee nke a, ọha obodo ga-anabata nwoke ahụ ịlụrụ ya bụ nwaanyị gaa n’ihu ebe ọ bụ na e gbubiela ụdọ mmekọrịta dị n’etiti nwaanyị ahụ na di mbụ lụrụ ya. Chikwe na Egondụ, bụ nne na nna Amaechina nwụchara n’oge agha, nke mere na ọ ga-ahịa ahụ inweta ndị ga-anataghachi isi akụ nwaanyị Udumma n’ọnọdụ Amaechina.
Ekwumekwu Ibekwe n’Amaechina
Iji kwado ihe e kwuburula n’elu, ekwumekwu ụfọdụ Ibekwe kwuru n’ejije Amaechina zipụtara na ama Amaechina echibeghị. Oge Ibekwe lọtara agha ma kwuo na ndị iro egbuola Amaechina, nke a wutere Udumma nke ukwu. Oge ọ jụrụ Ibekwe ihe di ya kwuru tupu ọ nwụọ. Ibekwe sịrị ya:
Ị makwa na, ebe ahụ m zoro, ka ha na-ebepụ ya isi, ihe ọ na-ebe bụ “Ibekwe, ebe ọ bụla i zoro, chetakwa leziere m Udumma anya ma ị laruo na ndụ. Ibe ahapụkwana Udumma (93)
Ekwumekwu Ibekwe a dị n’elu pụtara na Amaechina rịọrọ ya ka o lekọtara ya nwunye ya. Nke a nwere ike ịpụta ilekọta ya ka ama ya (Amaechina) ghara ichi. N’otu aka ahụ, Ibekwe gwakwara Udumma ‘abụ m Amaechina, Amaechina bụ m’ (93) nakwa ‘Ama anwụọla ma Ama ka dị ndu.’ Ọ bụrụ na e were ya na Ibekwe kuchiri Udumma dịka nwunye, ọ gaghị adaba n’ihi na Ibekwe na Amaechina abụghị nwanne. Ekwealor (1998:47) kọwara nkuchi nwaanyị dịka:
Nke a pụtara nwanne nwere ike iweghara nwunye nwanne ya nwụrụ anwụ. Otu aka ahụ kwa, nwa nwere ike iweghara nwunye nna ya ma nna ya nwụọ. Tupu e mee nke a, a na-aga be nna nwaanyị ahụ meekwa omenaala ụfọdụ. Alụmdi na nwunye dị otu a ga-eme ka ụmụ a mụtara ka e kuchichara nwaanyị ahụ dịịrị nwoke ahụ kuchiri ya.
Iji kwado nke a, Igbo (2012) kọwara na ọ bụrụ na e kuchie nwaanyị ma ghara ime omenaala metụtara nlụgharị (ịtụgharị nkwụ na mmụọ), nwoke ọ bụla lụrụ nwaanyị ahụ ga-abụ di-akwụ-ụgwọ. Nke a pụtara na nwa/ụmụ ọ bụla sitere na mmekọrịta ahụ ga-abụ nke nwoke nwụrụ anwụ. Igbo (2012) kwuru na a naghị eji nwoke mụtara nwa/ụmụ ndị ahụ akpọrọ ihe n’omenaala Igbo, kama ọ bụ nwoke nke dịka omenaala si chọọ, mere ihe n’isi ya bụ nwaanyị ma nwụọ ka a na-ewere dịka nna nwa/ụmụ dị ahụ. Ibekwe, iji ghọrịa Udumma, gwara ya na Amaechina rịọrọ ya ka o lekọta ma kasie ya obi. N’omume nke isii, ngosi nke abụọ, ọ gwara Udumma, ‘ọ kwa m gwara gị ihe Amaechina kwuru oge ọ na-anwụ. Nyenụ m ohere ka m mejupụta ya, ka obi dị yam ma n’ala mmụọ’ (93).
Akparamagwa na ekwumekwu Udumma n’Amaechina
Akparamagwa na ekwumekwu Udumma n’Amaechina zipụtara n’ebe ọ dị ukwu na o kwenyere na di ya, Amaechina ka dị ndụ. Otu n’ime ụzọ nke a si pụta ihe bụ na n’agbanyeghị ihe niile Ibekwe gwara Udumma, o nweghị mgbe o si na be Amaechina pụọ. Ọ gwara Ibekwe:
Ị mara n’eziokwu na enyi gị nwoke sị gị letewe m anya, ị bịawanụ be ya. Achọghị m ịhapụ be di m, ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ (95).
Udumma n’ebe a zipụtara obisike o nwere. N’otu aka ahụ, ọ rụtụrụ aka na ọ chọghị ịhapụ be di ya. Nke a gosiri na Udumma weere Amaechina n’ebe ọ dị ukwu, ka di ya n’agbanyeghị na ‘ọ nwụọla’. N’oge niile Ibekwe na Udumma nọrọ, o nweghị mgbe o jighị akpọtụ Amaechina. Nke a mere ka o wute Ibekwe n’ebe ọ dị ukwuu n’ihi na o chere na izu ọjọọ ọ gbara megide Amaechina ga-eme ka Udumma chefuo ya (Amaechina). Mkparịta ụka dapụtara n’etiti Ibekwe na Udumma n’omume nke isii, ngosi nke anọ ga-enyere anyị aka ịghọta nke a nke ọma:
Ibekwe: (Na-emetụ Udumma aka n’imi) Mma m, ọ-ọ gịnị mere oge niile mụ na gị nọrọ, ị na-akọ naanị maka Amaechina, Amaechina. Agwala m gị chefuo Amaechina, ọ nwụọla.
Udumma:Ibe, kedu ka m ga-esi chefuo di m? Ọ – kwa ị …
Ibekwe: Ị bịakwa. Onye bụ di gị? Amaechina anwụọla. Kedu ka obere nwa dịka gị ga-esi bido n’afọ iri abụọ na otu ị dị kwawa di? Ọ bụ na ị nabataghị m? M meere gị elu, mere gị ala, ihu anaghị adị gị mma. Ama m na…
Udumma: Ibe, ọ bụghị na m na-ewesara gị iwe. ka Chi m m na- ewere iwe.
Ibekwe: Ọ dị mma (kpọlite Udumma n’oche, kuru ya) Lee anya site taa gawa, achọrọ m ka ị hapụ ịkpọ Amaechina oge niile. Ị na…
Udumma: Ibe, nke ahụ gakwa ahịa ahụ – o. Kedu ka m ga-esi echefu ịkpọ ya? Ọ bụghị ya lụtara m? Ị ma na m hụrụ …
Ibekwe: (Mee Udumma aka n’ọnụ) shii ama m, ma ọ nwụọlanụ. Lee m anya, ahụrụ m gị n’anya karịa etu Amaechina siri hụ gị. Nabata ịhụnanya m (101-102)
Otu n’ime ihe ndị e nwere ike ịchọpụta n’ekwumekwu a dị n’elu bụ na Udumma ahụtaghị Ibekwe dịka di ya. Ọzọ kwa, tupu ngosi a, Udumma adịrịla Ibekwe ime, mana Ibekwe, dịka e si gosipụta ya ebe a ka na-arịọ Udumma ka ọ nabata ya. Nke a pụtara na dịka o si metụta uche-ime-mmụọ Udumma, Amaechina bụ di ya. Ajụjụ ikpeazụ ọ jụrụ Ibekwe nyekwaara aka ịkwado echemeche ndị e zipụtarala n’elu. Ọ jụrụ ya – Ọ bụghị ya (Amaechina) lụtara m? (102). Nke a gosiri na dịka o si metụta omenaala Igbo, Ibekwe abụghị di Udumma n’agbanyeghị na ọ tụwara ya ime. Ibekwe n’onwe ya ghọtara nke a n’ihi o ji aka ya kwuo na ya onwe ya bụ manejimenti (102).
Ka Amaechina si n’aka ndị iro Ibekwe gobiri ka ha gbuo ya lọta, ihe ọ hụrụ gbagwojuru ya anya n’ihi na Udumma dịịrị Ibekwe ime. Na ngosi ahụ, Udumma gara n’ihu ịkpọ Amaechina ‘di ya.’ Oge Amaechina jiri obi mgbawa na ọnụma gbuo Ibekwe nakwa onwe ya, Udumma dadoro Amaechina ma na-akwagharị ya (106). Nke a gosipụtara mmetụta obi o nwere n’ebe di ya nọ.
Site n’ihe ndị e nyochara, ọ dị mkpa ịrụtụ aka na, n’agbanyeghị na Ibekwe tụwara Udumma ime, onye nwe nwa ahụ ọ dị ime ya n’usoro omenaala ndị Igbo bụ Amaechina. Ejije Amaechina bụ ejije Igbo, nke a tọrọ ntọala ya n’ala Igbo. O kwere nghọta na Udumma nyere Ibekwe onwe ya n’ihi asị ọ sịrị na Amaechina anwụọla ma gwa ya ka o lekọta ya (Udumma) anya. Ebe ọ bụ na Ibekwe akwụghachighị isi akụ nwaanyị Udumma, e nwere ike ịsị na nwa ahụ Udumma dịịrị ya ime ya bụ nke ya? Ọ bụrụ na e kwenyere nke a, ị mara na ọ bụ ịhapụ omenaala Igbo, mewe omeneelu. Dịka o si metụta Tamar na Judah (Jenesis 38) n’akwụkwọ nsọ, Abasili (2011) mere ka a mara na, n’agbanyeghị na Judah tụwara Tamar ime ka ọ mụọ ejima nwoke abụọ, ụmụ ejima ndị ahụ bụ nke di ya (Tamar) mbụ bụ Er. N’ihi nke a, ejima ndị ahụ abụghị ụmụ a jụrụ ajụ.
Ọ dịkwa mkpa ịrụtụ aka na Udumma anwụghị na ya bụ ejije. Nke a gosiri na ọ ga-amụ nwa ahụ ọ dị ime ya. Ọ bụrụ na ọ mụọ nwoke, ya bụ nwa nwoke ga-anọchi anya ama Amaechina. Ọ mụkwaanụ nwaanyị, e nwere ike ịhachi ya iji hụ na ama Amaechina echighị.
Abasili, A. I. (2004). Resolving the dilemmas of life: Way out when there seems to be no help and hope. Enugu: Snaap.
Abasili, A. I. (2011). Seeing Tamar through the prism of an African woman: A contextual reading of Genesis 38. Old Testament Essays, 24(3), 555-573.
Dobie, A. B. (2012). Theory into practice: An introduction to literary criticism (3rd edition). Louisana: Wadsworth Cengage Learning.
Ekwealor, C. C. (1998). Omenala na ewumewu ndị Igbo. Onitsha: Palma Publishing & Links Ltd.
Goring, P., Hawthorn, J. & Mitchell, D. (2011). Studying literature (2nd edition). London: Bloomsbury Publishing Plc.
Igbo, P. C. (2012). Elements of Igbo culture and tradition. Onitsha: Elite Publishers.
Ikeokwu, E. S. (2000). The traditional Igbo drama and theatre: Issues and concepts. Jakadiya: A Journal of Researches in African Languages and Literature, 2(2), 80-93.
Ikeokwu, E. S. (2009). Akara ikom na akara inyom: Ngụgharị Isi Akwụ Dara n’Ala. Jọnal Mmụta Igbo, 4(1), 15-23.
Ikwubuzo, I. & Eze, E. (2014). Revisiting the question of tragic protagonist in Onyekaọnwụ’s plays. N’ime N. Nnyigide, R. Ezeuko, N. Nwokoye & J. Eyisi (Odz.), The eagle of Igbo literature: A festschrift in honour of Prof. G. O. Onyekaọnwụ (Etigbuchaa eziokwu) (ihu 9-25). Nimo: Rex Charles & Patrick Publications.
Li, X & Cheng, S. (2011). The analysis of translators from the perspective of deconstruction. Asian Social Science, 7(5), 258-262.
Nwadike, I. U. (1992). Ntọala agụmagụ. Nigeria: Ifunanya Publishers.
Nwaozuzu, G. I. (2014). Amaechina. Nsukka: University of Nigeria Press Ltd.
Abụ Igbo Na Mmepe Ala Naijiria. Nnyocha Abụ Akọ na Uche nke Echebina dere.
Oluchi Nebolisa na Blessing Onwubie Ngalaba Asụsụ Igbo. Alvan Ikoku Federal College of Education, Owerri, Imo State.
Abụ Igbo bụ ọrụ nka nke e tinyere n’asụsụ di ọgọ, hazie n’usoro pụrụ iche, bịa nwee echiche miri emi, ma na-emetuta n’ahụ na n’obi .Echiche na mmetutaobi nke abụ nwere, nwere ike ịbụ mmetutaobi iji gosipụta ọnodụ mmegbu, nchekwa, ịdịnaotu, ndidi na mmepe. Dịka ngwaọrụ kachasị dị mkpa, abụ na-ejikọta mmadụ niile ọnụ ma mee ka e nwee ezi nchekwa, ịdịnaotu na mmepe n’obodo. Nke a bụ ka odee maọbụ ọkpọabụ siri jiri asụsụ wee rụọ ọrụ. Nchọcha a lebara anya n’ihe abụ pụtara, ụdịdị abụ, uru abụ bara, asụsụ ọkpọabu na ka abụ si akwalite idinotu, nchekwa na mmepe nke ala Naịjịrịa.Nchọpụta gosiri na e nwere ọnọdu ọjọọ dị iche iche a na-ahụ n’ala Naịjịrịa dịka igbu ọchụ maọbụ ịkwafụ ọbara, mkpọrita asị nke ndị otu ekpemekpe dị iche iche na enweghị ezi nchekwa. Nchọcha achịkọtakwara na site n’abụ na ọnọdụ ọjọọ ndị a, a na-ahụ n’ala Naijiria ga-ebelata, ma mekwaa ka e nwee udo, ndidi, obi mgbaghara, ịdịnaotu na mmepe. N’ikpeazụ, onyenchọcha tuzikwara aka, ka ndị otu ekpemekpe dị iche iche n’ala Naịjịrịa, jiri abụ na-enye nkuzi n’ụlọ ekpemekpe ha. Nke a ga-eme ka ndị mmadụ chegharịa ma bịakọta ọnụ dịka ụmunne, n’agbanyeghi asụsụ onye, wee tụọ alo ka ihe ga-esi kawaye mma n’ala Naijịrịa.
Agụmagụ Igbo malitere mgbe ndị Igbo malitere. Na mbido, o bụ n’ọnụ nkiti ka a na-agu ya. N’ime ya e nwere abu, akuko na ejije. ndị Igbo na-esite n’agụmagụ ha n-egosipụta usor ebimndu ha nakwa ka ha siri huta uwa. Ha na-egosipụta ngalaba agụmagụ a, n’ anodu dị iche iche ha na-ano na ndu ha.
Ka e wee nwee udo, agamanihu, ịdịnaotu na mmepe n’ala Naijiria. Agụmagụ bụ ezigbote ngwaọrụ a ge-eji nweta ihe ndị a. nke a bụ n’ihi ha agụmagụ, na-enye aka n’ime ka mmadụ kwuwapụ okwu n;oha na-emeghi ihere ọbula iji gosipụta echiche bụ nke nwere ike ịbụ iwe, mmegbu, enwegh nchekwa dzg.
N’ala Naịjirịa, e nwere ọtụtụ obodo n’ime ya bụ nke mejupụtara ala Naịjirịa. Obdo ndị ahụ rụru narị anọ n’ọnụ ọgụgụ (400). N’ihi na e nwere ọtụtụ obodo mejupụtara Naịjirịa ime ka obi mmadụ nile buru otu ọ kachasị n;ihe gbasara ndọrọ ọchịchị biara sie ike n’ihi na obodo ọbụla na-achọ ala Naịjirịa. Ọ bụ n’ebe a ka agụmagụ batara iji jikọta mmadụ nile ọnu, na mee ka ndị mmadụ ghọta na n’agbanyeghi obodo maobu asụsụ onye na-asu, na ọ bụ anyi nile so mejupụta ala Naijira.
Akinlabi na ndị otu ya (2016:103) kwuru n’ihe e jiri webata ọmụmụ agumagụ ogo, agụm akwukwọ dị iche iche bu ka ọ wee nye aka n’ ijikọta mmadụ niile ọnụ iji weta udo, ịdịnaotu, nchekwa na mmepe ka ala Naijiria. Nke a pụtara na agụmagụ na’akwalite udo na ịdịnaotu nke Naịjirịa ma mekwa ka ndị mmadụ ghara ịdị na-achọzị naanị nke onwe ha karịa ịchọ etu ọhanaeze ga-esi nwee agamnihu. Agụmagụ ga-emekwa ka ndị mmadụ belata aka n’ibukọrọ akụnaụba nke ọhanaeze nwe na aha kama ndị mmadụ ga-amalitezi chọọ ihe ha ga-emere ọhanaeze ka e nwee agamnihu n’ala Naịjirịa.
Agụmagụ nwere ngalaba atọ; abụ, akụkọ na ejije. Nwara (1989:) kwuru na “ọmụma abụ ge-enye aka mee ka e enwee udo na ịdịnaotu n’ala Naịjirịa n’ihi na onye ọbụla ga-ewere onye Naịjirịa ibe ya dịka nwanne ya. Ala Naịjirịa bụ mba ọ na-amasị mgbe niile, ka agbụrụ nile di na ya dịkọọ n’otu, ma na nkewa na ikpa oke na-eme ka ebumnobi a ghara ịmịta mkpụrụ.
Nchọcha a, na-atụ alo ka ndị isi ọchịchị ala Naịjirịa n and otu ekpeme kpe dị iche iche jiri abụ na-enye nkuzi ha dị iche iche. Nke a ga-eme ka ndị mmadụ obi mgbahara, udo, nchekwa na ịdịnaotu. ọ bụrụ na ọnọdụ dị otu a adị, nke a ga-ebute mmepe dị elu n’ala Naịjirịa. Abụ Igbo dị ụzọ abụọ; ha bụ abụ ọnụ na abụ ederede. Abụ ọnụ bụ ndị ahụ a na-akọ n’ọnụ nkịtị.
Chukuezi (1988:4) kwuru na abụ ọnụ bụ ụdị abụ nwere ike na-akọ maka ndụ ebiri ebi, emume dị iche iche ndị mmadụ na-eme na egosi etu ndị mmadụ siri nabata maọbụ jụ otu echiche maọbụ ibe ya” Abụ ọnụ metutara ọnọdụ niile ma ọnọdụ ọma ma nke ọjọọ. ọ bụ ihe nd echiche ha gbasara ụwa. N’ age ugba a, abụ ọnụ na’alaghachizi azụ n’ihi na ndị mmadụ enweghizi mmasi na ya. ndị ọkpọabụ na –ahiazikwa ahụ inwete n’ihi na o nweghizi onye na-ege abụ ọnụ. Ihe onyonyoo nd ọche ma foonu dgz. Ewerela ọnọdụ abụ ọnụ Igbo.
Abụ ederede bụ abụ ndị ahụ e deturu edetu n’akwụkwọ. N’ụdị abụ a, a maara onye dere ya na onye ya.
Echebima bụ odee abụ Igbo. ọ bụ ode aka siri ike n’ihe gbasara abụ Igbo. Ọ bụ onye ode ọ na-amas n’iji abụ mee ka ọgụụ huta ihe na-eme n’ ụwa n’ụzọ dị iche iche. Echibima bụ onye Egbu-Owere dị na steeti Imo. ọ bụ ezigbo onye nkuzi kuzirila na nnukwu ụlọ akwụkwọ dị iche iche ma dekwa ọtụtụ akwụkwọ ngugu. ọ bụ onye asụsụ igbo doro anya nke ọma. Onye ọbụla na-agụ akwụkwọ aghaghị ịhụ ụtọasụsụ, okwu chara acha, amamihe, mkpughe na ezi akọ na uche nke jupụtara n’ime ya.
Mmepe Ala Naịjirịa
`Naịjirịa bụ obodo nwere ọtụtụ omere asụsụ na ekpemekpe dị iche iche. Kemgbe afọ (1960) Naịjirịa nwechara onwe ha, mmepe nke ala Naịjirịa bụ nke na-achu ndị mmadụ ụra, mana ịkpa oke, ọgbaghara na ịkwafu ọbara dzg. nke ndị mmadụ ibe ya, nke nsi otu ekpemekpe dị iche iche, nke otu agbụrụ na ibe ya na-eme ka ebumnobi Naịjirịa gbaa mta ezi mkpụrụ. Ala Naịjirịa nwe0re ato kacha pụtakarcha ihe n’ime ya; agbụrụ nd ahụ bụ Awụsa, Igbo and Yorụba. Agbụrụ niile ndị a juputere ala Naịjirịa olile anya mgbe niile oge Naịjirịa ga-esite ndụ ochie benye ndụ ọhụrụ.
Mmepe bụ mgbe mmadụ, obodo, mba, agbụrụ sitere na ndụ ochie wee banye na ndu ọhụrụ, sitekwa n’omume ọjọọ wee banye n’omume ọma.
Dike (2008:38) kọwara mmepe dịka mmadụ maọbụ sitere na ndụ ochie wee banye na ndụ ọhụrụ maọbụ omume ọhụrụ” ndụ ochie a, nke a gbanwere bụ nke a tụrụ anya na o ga-enweiri ihe oma ya na ya so bụ aka e jiri dechie anya ihe ọjọọ. Ndụ ọhụrụ maọbụ omume ọhụrụ a ka a tụwara anya na ọ ga-eme ka ụwa dịwagara ndị mmadụ mfe n’obibi.
Mmepe abụghị naanị iru ihe a na-ahụ anya dịka iru ọku letrik, pomp mmiri, iru okporo ụzọ, ụlọakwụkwọ na ihe ndị ọzọ. Mmepe nke kacha mkpa bụ mmepe nke mgbanwe echiche na akpamagwa ndị mmadụ adịghị mma ma mee ka ha chee echiche n’ụdị kachasị mma ga-eweta udo na agam n’ihu nyere onye ọbụla n’obodo. Akidi (1013:178) kwuru na ọ bụ eziokwu na mmepe nwere ike ịdị na mpaghara niile dịka ọrụ ugbo, agụmakwụkwọ, izu aha, nkanuzu, dzg. o kwuru na n;ime mpahara niile nd e nwere ike inwe mmepe nay a ma na mmepe kaches baa uru bụ mmepe nke mmadụ siste n’omuma ọjọọ ya gbanwee wee mewe omuma oma. Nke a pụtara na ihe kachasi di mkpa na mmepe bu “echiche”. ọ bụ na n’echiche mmadụ ka ihe ọma maọbụ ihe ọjọọ na esite apụta. ọ bụrụ na ndị mmadụ eụhezie echiche nke ọma, nke ga-eweta ihe ọma dị iche iche ma chefuo omume ọjọọ, ihe abakwa dịịrị ndị mmadụ mfe, ndụ atọwakwa onye ọbụla ụtọ. Mgbe ọnọdụ dị etu dịịrị, mmepe ga-adikwa. Ka e wee nwee mmepe tọrọ atọ n’ala Naịjirịara, abụ Igbo di ezigbo mkpa n’iji mee nke a n;ihi na abụ na-eji ụzọ doro anya kuziere ma gbaziri ndị mmadụ ụzọ kachas mma ha ga-esi ebi ndụ ha. Ekwealor (2009:22) kwadoro nke a mgbe o kwuru ka “… abụ bụ okwu dere ede na-eji nwayọọ edeba n’obi.” Ihe na-eme ha abụ baa ndị mmadụ n’obi ma nye echiche etu a tụrụr anya bụ asụsụ ode abụ. Odee na-ewere nhọrọọkwu kacha mma ji mee ka abụ ya metụ ọgụụ n’obi. ọ bụ site n’ikpechapụ anya n’họrọ okwu kwesịrị ma debakwaa adaba site na ka ọnọdụ siri dig a-eme ka ọgụụ maọbụ ndị na-ege nti tulee okwu ndị ha nụrụ n;uche ha ma kpebie n’igbanwe agwa ọjọọ dịka kwafụ ọbara , ohi na ọgbaghara dị iche iche ma nabata mmekorita, ịdịnaotu, mgbaghara dzg. ọ bụ na ọnọdụ dị etu a, nje a ga-eweta mmepe di elụ n’ala Naịjirịa.
Abụ Igbo abụ ndị ahụ dị ọkpụ, nke malitere mgbe ndị Igbo malitere. Na mbu, ọ bụ n’ọnụ n kiti ka ana-agụ ya. ọ bụkwa site n’aka fere aka ka ọ siri rute anyi aka. Abụ di ụzọ abụọ, abụ ọnụ na abụ ederede. Abụ ọnụ bụ abụ nd ahụ a na-agụ naani n’ọnụ nkiti, bụ nke e detugh edetu n’akwụkwọ. A maghị chepụtara ha, a maragodu ka oga na-aga, a na-echefu ha.
Abụ ederede bụ abụ nd ahụ e detụrụ edetụ n’akwụkwọ. Nwadike (1992:34) kwuru na abụ ederede Igbo dịka iduuazi na ejije ederede, ebidigh oge. N’agbanyegh na ọtụtụ ndị mmadụ e deela abụ na onwe ha. O kwuru na abụ Igbo apụtaghi n’oge genye n’afo 1975 bụ mgbe Ekechukwu chikọtara abụ iri issi na ise (65) kpọọ ya “Akpa uche” nke ndị “Oxford University press bipụtara”.
Abụ ọbụla dị n’akwụkwọ bụ agụmagụ ka ọ bụ. Emenanjọ (2013:10) kọwara abụ dịka ihe mmadụ chepụtara ma detụọ ya n’akwukwọka ụwa na olu ya. Ọ bụghi naani nchepụtara mere abụ ihe ọ bụ, e chepụtakwara iduuozi ma ejije echepụta kama ọ bụ usoro e jiri dee abụ nakwa asụsụ aka e jiri chọọ abụ mma, mere ka abụ dị iche na nglalba agụmọgụ ndị ọzọ.
Abụ na-adị n’ahịrị n’ahịrị na nkeji na nkeji n’abụ, a naghi ekwu ahịrịokwu, owere ihe a na-ekwu bc ahịrịabụ ọtụtụ oge, e nwere ike inweta ahịrị maọbụ karịa n’otu ahịrị abụ bụ nke ga-emese ahịrịokwu zuru oke ma nye nghọta mgbe ufọdụ otu ahịrị abụ na-enye nghọta zụrụ, mgbe ọzọ nghọta ya anaghi ezu oke ganye na ọ banyere n’ahịrị ọzọ. Abụ anaghi eji ogologo akwu arụ ọrụ dike iduunazi na ejije. Abụ na-akpa okwu akpa, otu mkpuruokwu n’abụ nwere ike pụta ọtụtụ ihu akwụkwọ ma atulechaa ya. Ihe kpatara nka a bụ n’ihe na ode jọrọ okwu kacha mma bu nke o jiri dee abụ. Nhọrọ okwu ndị ahụ bụ asụsụ nka. Asụsụ nka dịka Emenanjo (1988) kwuru bụ asụsụ a pr aka nke ọma chepụta ma họpụta bụ nke ode jiri chọọ agụmagụ ya mma. Nke pụtara na ọ bụ asụsụ nke dị iche iche bụ nke odeasụ webatara n’abụ ya ka ọ ji eme ka ọgụụ hụta ụwa d ọ siri hụ ya.
Akparobaro (2006:304) kowere abụ dịka nke mmadụ na-esite na ya were na-egosipụta ọhanaeze ka ihe siri metu ya na mmụọ. Nke a pụtara na mmadụ nwere ike isite n’abụ egosipụta ebumnobi nakwa nghọta dị iche iche ọ nwere gbasara ihe na-eme na ndu, na-atụghị ụjọ ọbụla maọbụ mee ihere. Site n’abụ, ode na-agwa ndị mmadụ eziokwu gbasara ndụ. O nwee ebe ndị mmadụ mere ihe ọma, ọ bụ ọrụ odee ijali ha maọbụ too ha. Ọ dịkwanụ ebe e mere ihe ọjọọ, ọ bụ ọrụ ode na-akatọ ihe ọjọọ ndị ahụ ma mee ka ndị mmadụ chọpụta ebe ha riri mperi na ha.
Abụ bụ ụzọ mmadụ si akọwapụta ka ime mmụọ ya dị. Asụsụ bụ ụzọ dị iche iche mmadụ si akọwapụta ebumnaọbi ya. A na-ewere abụ dịka asụsụ mgbe ọkpọabụ jiri abụ mee kọwapụta ebumnobi ya. Okafor (2005:383) kwuru na “… n’ihi mmadụ na-eji abụ akwapụta ebumnobi ya, ya bụ na abụ bụ asụsụ.”
N’ikọwaoụta ebumnobi mmadụ. Asụsụ ọbụla baara ndị na-asu ya uru. Ọ nweghi asụsụ ka ibe ya mma. Asụsụ ọbụla dị mkpa n’ihi ọrụ dị iche iche ọ nwere ike rụrụ ndị nwe ya. Asụsụ ndị Igbo na-asụ ka a na-akpọ asụsụ Igbo. ọtụtụ ndị igbo enweghị ihe ha ji asụsụ Igbo kpọrọ . ndị dị etu a kwereyere n’asụsụ Igbo kwesighi isu asụ. Ha chefuru na ma asụsụ Igbo ma asụsụ bekee na ọ bụ otu ọrụ ka ha na-aru, iji kọwapụta ebumnobi ndị mmadụ. ọ bụ ihe asụsụ ndị mba dị iche iche na-arụ ha, ka asụsụ Igbo na-arụrụ ndị Igbo. Nke a pụtara na ndị Igbo kwesịrị iji asụsụ ha nwere kpọrọ ihe ma ghara ịdị na-eleda asụsụ Igbo anya. N’ihi na ọ bụrụ na ndị Igbo ejiri asụsụ ha kpọrọ ihe, nke a ga-eme ha ndị mba ọzọ mụọ isu na ide asụsụ Igbo. N’ụzọ dị etu a, ga eme, ọ bụrụ na odee abụ ejiri asụsụ Igbo dee abụ ya, ndị ma ọrụ maọbụ agbụrụ ọzọ ga-agụ ya ma nwekwa ezi mgbanwee n’akparamagwa bụ nke ga-ebute mmepe nke ala Naịjirịa.
Ikekaonwu (1999:VI) na ndị otu ya kọwara asụsụ dịka “… ebe nehedo nke akọnauche na ahumuihe ndị mmadụ.” Asụsụ na-egosi ebumnobi mmadụ. E jikwa ya akuzi usoro akparamagwa na omume di mma bụrụrkwa usoro nkọcha nke agwa ọjọọ dị iche iche. ndị Igbo bi n’ọwụwa anyanwu nke Naịjirịa. steeti ndị mebere ala Igbo gunyere Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi and Imo, ebe ọzọ bụkwa Delta na mpaghara cross River na Rivers.
Abụ igbo na asụsụ Igbo dịka aka nri na aka ekpe. ọ nwegh nke a ga-ewezu ga n’ebe ihe ya no. tupu abụ Igbo arụọ ọru nke ọma n’iji ya zie ọhanaeze oz, ọgụụ maọbụ ndị na-ege nti ga-abụ ndị mara asụsụ Igbo nke ọma. Ibekwe (2010”135) kwenyere nke a mgbe o kwuru na tupu mmadụ e nwee ike ngọta ihe abụ na-ekwu maka ya na onye ahụ ga-abụ onye asụsụ e jiri dee abụ ahụ doro anya nke ọma.”
Abụ ga-arụ ọrụ ya karia ma ọ bụrụ na ọgụụ bụ onye asụsụ Igbo doro anya nke ọma. Asụsụ Igbo ido ọgụụ anya gụnyere imeta imeta ma tii ma rii din a ya bụ imata ma atụmatụokwu ma atụmatụ agụmagụ bụ nke e ji achọ abụ Igbo mma.
Mmakọrita ọzọ dikwa n’ettit abụ Igbo na asụsụ Igbo bụ na abụ Igbo na-amalite rụ ọrụ yam be asụsụ igbo rụsiri ọrụ mke ya. Nke a pụtara na ọ nwere okwu ụfodụ mmadụ e nweghi ike ikwu dịka okwu karia ma e kwuru ya n’ụd abụ. Abụ na-enyere mmadụ aka a ikwapụ okwu n’oha na-emeghi ihere ọbụla. Marriam (1964), Tracey (1954) na Nettle (1964) kọwara n’ime ibekwe (2013:155) na n’abụ mmadụ nwere ike iji abụ kwuo okwu ọ gaghi e nwe ike kwuo m’ọnọdụ nkiti ma e wezuga abụ. Nke a pụtara na ode nwere ike ikwu gbasara ọnọdụ ọbụla na-atụghịi ụjọ. N’ihi ikikere nke abụ na-enye nd ọkpoabụ maọbụ ndị ode, ode nwere ike isite n’ abụ dee gbasara ọnọdụ ọbụla nke nwere ike ibu ọnọdụ oma maọbụ nke mbe ọjọọ ma tuzikwara ndị aka etụ ọ kwesịrị ka ọnọdụ di iji weta mmepe na ịdịnaotu nke ala Naịjirịa.
Ụdịdị Abụ Igbo Dị Iche Iche
Nd igbo nwere ọtụtụ abụ ha ji egosipụta ihe na-eme na ndụ ha dịka . Nebolisa (2014:38) kọwara n’ufodu n’ime abụ ndị igbo gunyere abụ Ifo, Abụ otito, abụ nkocha, abụ akwarr, abụ ịhụnanya.
Abụ ifo: bụ abụ ndị ahụ a na-enbata mgbe a na-efo ifo. Abụ ifo nwere ike kwụ naani ya, a na-efo dịka ifo. ọ nwekwara ike nọkwa n’ime akụkọ ifo.
Abụ otito: Nke a bụ ụdi abụ nwere ike iji too Chukwu maọbụ mmadụ. E nwekwara ike iji ya too ihe nkiti.
Abụ nkọcha: nke a bụ udi bụ eji agwa mmadụ ihe ọjọọ ọ na-eme. Ebumnobui abụ a, bu ka onye ahụ kwụs ihe ọjọọ ọ na-eme.
Abụ akwarịrị: Nke a bụ ụdị abụ maadụ ji egosi na obi adịghị ya
Abụ ihunanya: n’ụdi a, mmadụ ji ya egosi ihunanya n’ebe onye ọzọ nọ.
Uru Abụ Bara
Abụ bara ọtụtụ uru nke gụwayere nd a. ọ bụ site b’abụ ka mmadụ si ezipụta ka ihe siri metata y na mmụọ. Mmadụ jikwa abụ akasi onwe ya obi. Eji abụ ekpe ikpe ma jirikwa ya na-efe ofufe dị iche iche. E ji abụ akwagide ihụnanya dị iche iche. Abụ na-arụkwa dịka enyo ncheta ihe gara aga na ndu mmadụ. Ihe nke a pụtara bụ na ihe ọbụla nke e tinyere n’ụd abụ ọbụlafodu omenala, nkwenye maọbụ ihe ọbụla mere mmadụ na ndụ, ọ bụ na-agụpụta n’abụ, ọ ga-aha ezigbo tupu ndị mmadụ maọbụ ndị nke a metutara echefuo ya.
Abụ Igbo na Mmepe Ala Naịjirịa
Ode abụ bụ otu n’ime ndị odee bụ ndị nyere aka iji kwalite ịdịnaotu na mmepe nke ala Naịjirịa bụ.
Echebima. Nchocha a na-eleba anya n’abụ dịka enyo e ji ahụ ihe na-eme n’ala Naịjirịa dịka Echebima siri dee ya n;isiokwu nke o kpara “Gini ka mmadụ bu” isiowku a na-egosi ka o si anu ode ọkụ n’obi, n’ime ka e nwee udo, ịdịnaotu na mmepe n’ ala Naịjirịa. ode a mepụtara ọnọdụ ọjọọ dị iche iche bụ nke a na-ahụ n’ ala Naịjirịa dịka oke ọchịchịọ nke onwe, mmegbu naikwafu ọbar na mee ka ogụụ ghọta n; ihe niile nd a, e nwegh nke bara uru ọbụla n’ihi na njedebe ha nile bụ n’uwa a. Odee dighi abụ a maka iji me endị mmadụ obi ụtọ. ọ depụtara ụzọ di iche iche ndị mmadụ si echekasi ma na adogbu onwe n’ihi oke ọchichọ, ma chefuo na mmadụ bụ aja nkiti.
Mmegbu, na ikwafu ọbara na nkewa anaghi eweta mmepe ọbụla n’ala Naịjirịa keria omume ọjoo ndị a na-eme ka ọnọdụ ala Naịjirịa jọkaria ajọ. Odee depụtakwara ka ndị mmadụ n’enwe obi anur mgbe ha na-akwafu ọbara ma na-emegidekwa mmadụ ibe ha. Odee kwụrụ na ndị mmadụ e chefuola n’ uwa a bụ ihe efu. Odee gosipụtakwara nwute ya n’ala Naịjirịa ka ndị mmadụ si adogbu onwe ha n’oke ọchịchịọ ma chefuo n’ụwa bụ aja.
Gini ka mmadụ bụ
O ji esogbu onwe ya
Adogbu onwe ya
Echegbu onwe ya?
Ikuku efu (peji 29: ahịrị 1-7)
Odee kọwakwara omume ụfodu na-ebute ndegbachiazụ na mmepe nke ala Naịjirịa dịka mmegbu na I nara mmadụ ihe rurru ya. ọ tuziri aka na I nweghi ruruuuuu mmadụ na-erite mgbe ọ na-emgbu mmadụ ibe ya.
I na-emegbu mmadụ ibe gi
I bụ onye?
I ga-ato n’ụwa
I ga-ebụ akụ ụwa laa mmụọ?
ọ dighi, eny m
ọ dgh (ahịrị 1-6)
Odee egosipụtakwara ka ndị mmadụ si e nwe anụri mgbe ha na-akwafụ ọbara. O nyere ndụmodụ ka agbzrz niile na n’ime Naịjirịa nwee obi mgbaghere, ịdịnaotu ma na-emekọrita dịka nwanne na ọ bụ ụzọ dị etu a kachas mma iji bi n’ụwa, n’ihi n’ụwa a bụ aha onye nọsa ọ laa.
Mgbe I nan-enu na-eme abụba
Mgbe na-eweliri onwe gi aka
N’ihi ike na mmegbu gi
Na ụwa bụ aha
Onye nọsa ọ laa. (ahịrị, 1-6)
Odee chopụtara mkpa ọ d udo, ịdịnaotu n’ala Naịjirịa. ọ chọpụtara n’omume rur ụny niile a na-ahuta n’ala Naịjirịa. agagh abụ uru ọbụla na mmepe ala Naịjirịa. ọ mere ka nd omebi iwee niile, ndị na-akwafu ọbara na nd mmegbu ka ha mata ọnọdụ ha n’cwọ.
Na aja efu ka I bụ?
Kom kom efu
Nke nke ise (ahịrị 1-3)
N’ihe na odee chọpụtara mkpa ọ dị na e nwere ezi mmepe n’ala Naịjirịa. ma ọ bụkwanụ mmadụ nwere ike ime ka mmepe ahụ ghara idị etu o keresiri. Odee na-eme ka ndị mmadụ mata na ọ ka mma hapụ ihe omume ọjọọ dị iche iche iji nwee mmepe n’ala Naịjirịa makana dịka mmadụ, na ọnwụ nwere ike ba mgbe ọbụla.
Gini ka mmadụ bụ?
Na nwegh nọ n’ime ya
Ebumnobi odeabụ a bụ ka e were nwee udo, ịdịnaotu na ezi mgbanwe tọrọ atọ. ọ bụ ihe nd a jikọtara ọnụ wee bụrụ mmepe nke ala Naịjirịa. obodo nwere udo na ịdịnaotu e nwela mmepe n’ihi na mmepe kacha dị mkpa bụ mmepe nke ndị mmadụ isite n;ụzọ ọjọọ ha si eche echiche webanye n’iche echiche etu kwesịrị ekwesi. Odee wepụtara ọnọdụ ọjọọ dị iche iche bụ nke a na-ahụ n’ala Igbo nakwa Naịjirịa dịka; mmegbu Ikwafu ọbara, ikpo as nke ndị otu ekpemaekpe dị iche iche, nkewa, oke ọchịchịdgz. Ihe ndị a niile bụ ihe ndị so akpagide mmepe nke ala Naịjirịa.
Abụ bụ ezegbata ngwaọrụ eji ahụza akpamagwa ndị mmadụ.
Nchọcha a na-atu alo na ọgugu na ọmụmụ abụ Igbo ga-eme ka e’nwee udo, ịdịnaotu, chekwa na obi mgbaghara n’etit agbụrụ niile mejupụtara ala Naịjirịa. n;ihi na abụ ba-eji okwu aka dị iche iche gbanwee wchiche ndị mmadụ bụ nke ga-ebute udo isinaotu mmepe nke ala Naịjirịa.
Ala Naịjirịa a nwechebeghi mmepe n’ akụkụ niil dịka o kwesịrị . Ihe kpatara nke a bụ nkewa, kwafu ọbara, ndị nna ndọrọ na ekparamagwa ndị mmadụ dị iche iche bụ ndị mejupụtara ala Naịjirịa. Ebe ọnọdụ ọjọọ dị iche iche etu a di, mmepe fọrọ atọ agaghi adikwa ọ bụ ọrụ odee abụ n’iji asụsụ dabara adaba gbanwee echiche ndị mmadụ ma mee ka ala Naịjirịa nwee udo, ihunanya, ịdịnaotu na mmepe. Abụ kwesikwara ka a na-agụ ma na-tuzi ya malite n’ụlọakwụkwọ ọtakara wee ruo na mahadum. Nke a ga-akunye ihunanya n’ime nd na-eto eto na mee ka ha mata na mmadụ n’ala Naịjirịa bụ otu na ebe nkewa na ikpa oke di na mmepe anaghi adi.
Akinlabi, A.W Waheed, T, A, Ojo, T.A (2013). Poetry as a tool for promoting national intergration and security. Journal of African & Asisa studies Nnamdi Azikiwe University Awka. Vol 1, No (2) pp 103.
Akparobaro, F. B. O (2006) Introduction to African oral literature Lagos: Princeton press.
Akidi, C.F (2013). Igbo language & sustainable development interaction journal of Igbo studies Awka Nnamdi Azikiwe university Awka.
Chukwuezi, A. B (1988); Akọ bụ ndụ. Lagos mages press.
Dike, G. A (2008) Nigeria languages: Veritable tools for community education and development. Journal of language, Art & culture. Owerri Alvan ikoku federal college of Education.
Echebina, G. N (2001) Ako na uche Ibadan loyal press.
Ekwealor C. C (2009) Agụmagụ ederede Igbo n’ozuzu oke nsukka: pascal press.
Emenanjọ, N. (2013). Utara Nti Nwoyacha Abụ igbo Awka.
Emenanjo, N (1988). Atumatu agụmamụ na atụmatụ okwu lagos: long men press
Ikekaọnwụ, C. N. ndị otu ya (1999). Fọnọloji na grama igbo Ibadan: University press.
Ibekwe, E.U (2010) Music, Languag and the universal implication of meaning journal of the association of Nigeria music cologists pp 66-73.
Ibekwe; E.U (2013). Music as and invaluable tool for substance of Igbi language. Journal of igbo studies, unizik.
Merrian, A. P (1964) the anthropology of music. leSA: North Western university press.
Mett, B. (1964). Theory aid method in Ethnomusicology. Nwe York Macmilliam press.
Nebolisa, O. E (2014). ọmụmụm Agụmagụ igbo Awka: SamosamoPress.
Nwana, O. C (1989). Role of Education in fostering national and united in Nigeria. Nigeria palm beach foundation press.
Nwadike, I. U (1992), Ntọala Agụmagụ: Enugu: Ifunanya press.
Okafor, R. C (2005) music in Nigeria society. Enugu: nwe generation press.
Mkpọaha na Nnọchiaha Na-enweghị Nnọso: Ụdịdị Na Ọnọdụ Ọdabere N’asụsụ Igbo
Akwukwo a na-elebanye anya na mkpọaha na nnọchiaha na-enweghị nnọso; ụdịdị na ọnọdụ ọdabere n’asụsụ Igbo site n’itule usorookwu na echiche/nghọta nke mkpọaha na nnọchiaha na-enweghị nnọso, mwube mkpoolu na-enweghị nnọso, mwube ụbara na-enweghị nnọso; ụdịdị ọdabere na ọnọdụ ọdabere, ntụcha odabere Igbo na ọnọdụ ọdabere n’Igbo. E nwetara njatụle (data) n’akwụkwọ e dere ede na ụfọdụ ndị e nwetere n’ọwa ịntanetị. Usoro ntụcha bụ nchọcha nkọwa nke gbadoro ụkwụ na njatụle e ji n’aka. Mkpọaha na nnọchiaha na-enweghị nnọso bụtụ ngalaba ọhụrụ n’amụmamụ usorookwu, nke na-arụtụ aka nye mkpọaha na nnọchiaha na-enweghị nnọso (article) maọbụ nkwuso (determiner). N’asụsụ dịka Bekee, a na-eji aha nsina ngwaa na-enweghị nnọso naani na mwube pụrụ iche ma na-enwekwa nghọta pụrụ iche. N’eziokwu, ọnọdụ na nkọwa mkpọaha na-enweghị nnọso n’asụsụ na-agbado ụkwụ na mkpụrụokwu ndị e ji arụ ọrụ. Akwụkwọ a gbadoro ụkwụ n’atụmatụ ngakọrịta ndịzu mma (Bidirectional Optimality Theory) nke Blutner tụpụtara iji kọwaa ihe kpatara ụdịdị ndị na-enweghị akara ji nwee nghọta na-enweghị akara. Ngakọrịta bụ ohere na-eme ka e nwee nzimozi n’ụzọ abụọ. Mkpọaha ndị nwere akara ka a na-akpọ mkpọaha ndị zuru oke ebe ndị na-enweghị akara ka a na-akpọ mkpọaha na-enweghị nnọso. Nchọcha gosipụtara nnọchiaha Bekee n’izugbe na nkwuso anaghị anọkọrita, ebe ha nọkọrịtara, a na-enwekarị mgbanwe n’ọrụ nke nnọchiaha ahụ. Nchọcha gosiri na ọmụmụ ọdabere Igbo nwere ntụnye dị mma n’atụmatu sayensị asụsụ n’izugbe. Akwụkwọ a na-atụnye alo ka e mee nchocha n’ọdiniihu iji kọwamie isiokwu nke edemede a.
Lingwistiiks bụ mgbaso usoro sayensị n’amụmamụ asụsụ. Agbedo (2015) kọwara na lingwistiiks metụtara sayensị n’ihi na ọ gụnyere ọmụmụ n’ụzọ tọrọ atọ banyere ụdịdị, ọdịdị, nghọta, njiarụọrụ, mgbanwe na akụkọ ntolite nke asụsụ. E nwere ụfọdụ ogo nke amụmamụ asụsụ na-anọ arụ ọrụ: (i) ogo nke ụda (ekwurunọnụ), (ii) ogo ụdịdị na ndokọ nke e nwekwara ike ịkpọ ogo grama/usorookwu; na (iii) ogo echiche/nghọta. Ngalaba lingwistiiks nke na-ahụ maka ogo ndị a bụ: amụmamụ ụda na amụmamụ mkpụrụụdaasụsụ, amụmamụ mmebeokwu, amụmamụ usorookwu, na amụmechiche. Ka o sila dị, ọrụ a ga-agbasakwa ụkwụ na mkpọaha na nnọchiaha na-enweghị nnọso; ụdịdị na ọnọdụ ọdabere n’asụsụ Igbo. Mkpọaha na nnọchiaha na-enweghị nnọso bụ mkpọaha na nnọchiaha na-enweghị nnọso maọbụ nkwụso. Ọdabere n’aka nke ọzọ bụ mkpụrụasụsụ/mọfịm ntado nke so n’otu n’ime nkejiasụsụ obere dịka nnọchiaha, nkwuso, njikọ, nnyemaka, akara njụmajụjụ, wdg (hụ Halpern 1995). Mbah na ndị ọzọ (2013:137) kọwara ọdabere dịka “okwu nwere ike ịkwụrụ onwe ya mana e gburu ya ịchafụ o wee dabere n’okwu ọzọ.”
Ọmumụ usorookwu bidoro na mba Griik. Ndị fịlọsọfa Griik chọpụtara ma guzobe nkejiasụsụ asatọ a maara ama. Ya bụ, maka nka na ọgụgụ isi nke ndị ọkammụta Griik, Rom, nke welitere isi ka Griis dachara, gbadokwara ụkwụ n’usoro grama ndị Griik n’iwube ọmụmụ grama Latịn. N’ihi nke a, ọmụmụ Latịn nakwa n’ebe ọ dị ukwuu nkewa nke nkejiasụsụ sooro ụkpụrụ ndị Griik n’inwetekwa nkejiasụsụ asatọ. Asụsụ Bekee sokwaara ụkpụrụ ndị ọkammụta asụsụ Rom wee nwetekwa nkejiasụsụ asatọ nke a na-ahụ n’asụsụ Bekee.
Ọtụtụ mba dị n’Afrịka ka ndị ọcha chịrị. Naịjirịa, otu n’ime mba Afrịka a chịrị, ṅọmiiri ndị ọcha a n’ebe ọ dị ukwuu n’ihe gbasatara obibi ndụ mmadụ nke amụmamụ asụsụ na lingwistiiks so n’ime ha. “Ndị Briten chịrị Naịjirịa; ọ bụkwa ya kpatara amụmamụ asụsụ ama ala Naịjirịa dịka Igbo, Hausa, Yoruba, Tiv dịrị gawazie gbasoro usoro asụsụ Bekee” (hụ Mbah 2006:15).
Nkọwa a nọ n’elu mere ka anyị ghọta na e mebere amụmamụ asụsụ Igbo site n’iṅomi asụsụ Bekee. Ya bụ, asụsụ Igbo wepụtakwara nkejiasụsụ asatọ nke e nwere ike ịkpọ nkenụdị mkpụrụokwu. Nkenụdị ndị a bụ: mkpọaha, nnọchiaha, ngwaa, nkwuwa, mbuụzọ, njikọ, nkọwaaha na ntimkpu.
Usorookwu bụ otu n’ime ngalaba gbara ọkpụrụkpụ na lingwistiiks. Ọ bụ ngalaba lingwistiiks nke na-ahụ maka etu mkpụrụokwu na-esi anọkọta ọnụ iji mebe ahịrịokwu na ewumewu ndị ọzọ ndị dịwagara iche n’amụmamụ mmebeokwu nke na-elebanye anya etu e si emebe mkpụrụokwu. Anagbogu, Mbah na Eme (2010) kwuru na usorookwu na-ahụ maka nhazi mkpụrụokwu n’ụzọ gara nke ọma iji nweta nkeji buru ibu dịka ahịrịokwu, nkebiahịrị nakwa ntụcha ewumewu ndị ahụ. Usorookwu na-agba mbọ ịhụ na mwube ndị ahụ nwere nghọta. N’ihi nke a, mgbe ụfọdụ; a na-akpọ usorookwu grama.
Otu ihe dị mma gbasara usorookwu bụ na ọ na-enyere ndị ọkachamara sayensị asụsụ aka n’ikewa asụsụ. Ọtụtụ asụsụ na-egosi myiri n’ụdị – isiahịrị, ngwaa, na nnara. Ịmaatụ:
Myiri n’ụdị nrụaka/mọdịfaya na isi aha (head noun) bụkwa ihe e nwere ike ịgbado ụkwụ n’ikewa asụsụ.
Ntụcha na nkọwa ihe ndị a pụtara ihe n’asụsụ bụ ihe usorookwu na-ahụ maka ya. Usorookwu na-amụ maka “ewumewu ndịnịime nke ahịrịokwu.” N’okpuru usorookwu ka e mebere iwu ndị a na-eji asụsụ ọbụla arụ ọrụ na-eso iji nweta “ewumewu ahịrịokwu a nabatara” buru ibu (Agbedo 2015).
Mkpọaha na nnọchiaha n’asụsụ Bekee na-enwe ụfọdụ ndịnọrụ (keesi) dị iche iche dịka ọrụ ha na-arụ si wee dị n’ahịrịokwu. Ha nwere ike ịbụ keisiahịrị maọbụ kenọmịnativ (nke pụtara na ha nwere ike ịnọ dịka isiahịrị nke nkebiokwu nnọrọonwe maọbụ ndabe), keonwunwe (nke pụtara na ha na-egosi onwunwe nke ihe ọzọ), maọbụ kennara (nke pụtara na ha na-arụ ọrụ dịka nnara emereme na nnara nke mbuụzọ). Ewezuga ọdịdị keonwunwe (nke a na-emebekarị site n’itinye rịkọm elu n’ihu akaraedemede s), mkpọaha anaghị agbanwe ọdịdị ndịnọru ha (ya bụ, ọdịdị kegrama) n’asụsụ Bekee. Ha nwere ike iwere ọdidị ndịnọrụ keisiahịrị maọbụ ọdịdị ndịnọrụ kennara, mana, ọdịdị kegrama ha na-adị ị etu ọ dị. Ọmụmaatụ:
N’ọmụmaatụ dị n’elu, ọnọdụ keisiahịrị na kennara nke Obi weere agbanweghị ọrụ kegrama Obi dịka aha. Ihe a bụ otu n’ime obere ụzọ asụsụ Bekee ji dị mfe karịa asụsụ ndị ọzọ. Nnọchiaha n’aka nke ọzọ, na-agbanwe ọdịdị ya mgbe ha gbanwere ndịnọrụ; mgbanwe na-apụtakarị ihe n’etiti nnọchi onwe dịka:
N’ọmụmaatụ ahịrịokwu ndị a dị n’elu, nnọchiaha him gbanwere ọdịdị ya bụrụzie he dịka ndịnọrụ ya si n’ọdịdị ndịnọrụ kennara bụrụzie ndịnọrụ keisiahịrị. Nke a bụ maka na ọ dabachaghị ikwu:
Ọdịdị ndịnọrụ keisiahịrị Ọdịdị ndịnọrụ kennara Ọdịdi ndịnọrụ keonwunwe
Mkpoolu Ụbara Mkpoolu Ụbara Mkpoolu Ụbara
I We Me Us Mine, my Ours, our
You You You You Yours Yours, your
He/she/it They Him/her/it them His/her/hers/it Their,
Nnọchiaha bụ mkpụrụokwu (me, they, she, it that) ndị e ji anọchi nkebiaha, na-arụtụkarị aka n’ihe a mabuuru. Ịmaatụ: he likes himself, this is it (Yule 2002).
Nchọpụta gosiri na e nwere mkpọaha nwere akara na ndị enweghị akara n’ụfọdụ asụsụ. Mkpọaha ndị nwere akara, nke a na-akpọ mgbe ụfọdụ ‘mkpọaha mzuruoke’ maọbụ ‘nwere nnọso’ bụ mkpọaha ndị nwere nnọso na nkwuso dịka; otu igwe, otu oroma, mkpara ahụ, ngwaahịa ahụ, klaasị ahụ, osimiri ahụ, nwata nwaanyị ahụ, elekere mgbaaka ahụ wdg. N’aka nke ọzọ, mkpọaha na-enweghị akara bụ mkpọaha ndị na-enweghị nnọso maọbụ nkwuso. A na-ejikarị ha arụ ọrụ na mwube pụrụ iche nke nghọta pụrụ iche. Ọmụmaatụ:
I went to the Emekas’
A ma ahaaka maka ọdịdị enweghị nnọso ha (ya bụ, ha anaghị enwe nnọso maọbụ nkwuso). N’ebe ha nwere, ha na-eweta nghọta pụrụ iche. N’ahịrịokwu nọ n’elu, ahaaka Emeka nọ n’azụ nkwuso nke mere ka nghọta ya pụọ iche. Emekas’ n’ebe a pụtara ezinaụlọ Emeka ha.
Site na nkọwa nnọchiaha e nyerela, ha bụ mkpụrụokwu nke e ji anọchi anya mkpọaha ha na-anọchite anya. N’ụdị a, ha nwere ohere ịnọ ebe mkpọaha ha na-anọchite anya nọ. Ya bụ, nkọwa ọbụla anyị na-enye mkpọaha metụtara nnọchiaha n’otu ụzọ maọbụ ụzọ ọzọ. Na-adị ịghịkwa ka mkpọaha, nnọchịaha so na nkenụdị ntachi (ya bụ, a ma ole ha dị). Dịka e kwuru na mbụ, mkpọaha anaghị agbanwe ọdịdị ndịnọrụ ha n’asụsụ Bekee ewezuga ụdịdị ndịnọrụ keonwunwe dịka: Obi’s, Mary’s, frogs’, doctors’ wdg. Nnọchiaha na-agbanwe ọdịdị ma ha gbanwee ndịnọrụ. Ọmụmaatụ:
b) The goat was killed by
N’ebe a, nnọchiaha I na (a) n’ọnọdụ keisiahịrị gbanwere ọdịdị ya n’ọnọdụ kennara n’ahịrịokwu nke abụọ maka na ndịnọrụ ya gbanwere.
Nchọpụta nke nchọcha a ga-abara amụmamụ usorookwu uru n’izugbe ma ọkachasị mkpọaha na nnọchiaha na-enweghị nnọso; ụdịdị na ọnọdụ ọdabere n’asụsụ Igbo. Ụfọdụ ndị ọmụmụ edeela ihe na mkpọaha nzuruoke n’asụsụ Bekee nakwa ọnọdụ ọdabere n’asụsụ Igbo na-elebanyeghị anya na nwanne ya na-enweghị nnọsọ: ya bụ na-emeghị nchọcha n’ọdabere ihu na ọdabere nkenụdị ndị ọzọ. Site na nke a, enweghị ezigbo akaebe gbara ọkpụrukpụ igosi na elebanyela isiokwu a anya nke ọma. Ọ bụ n’ihi nke a ka ndị nchọcha ji wee hụta ya ka ihe dị mma ilebanye anya n’isiokwu a. Etu ọ dị, nhịahụ nchọcha bụ enweghị oge. Anyị enweghị ike inyocha isiokwu a etu a chọrọ. Ya bụ, a na-atụ anya na a ga-emekwu nchọcha iji wee kọwamie mkpọaha na nnọchiaha na-enweghị nnọso; ụdịdị na ọnọdụ ọdabere n’asụsụ Igbo.
E kewara akwụkwọ a ụzọ anọ. Nke mbụ bụ mkpọlite, nke nyere ntọala n’izugbe gbasara akwụkwọ na nhazi ya. Nkebi nke abụọ bụ ebe atụlegharịrị agụmagụ ndị yitere isiokwu. Nke atọ bụ ntụcha njatụle. Nke anọ bụ nchịkọta na mmechi.
Nkebi a nyere nchịkọta nchọcha emerela na mkpọaha n’izugbe. Ebumnuche ya bụ inye ọgụụ ntọala mkpọaha.
E nwetere mkpọaha na mkpụrụokwu Latịn, ‘Nomen’ nke pụtara nnọọ ‘aha.’ Ya bụ, mkpọaha pụtara nnọọ aha. Ya bụ, ihe e jiri mara onye maọbụ ihe. Onye ọbụla maọbụ ihe dị n’ụwa a nwere ihe a na-akpọ ya maọbụ ihe e jiri mara ya, ne a na-abụkwa aha ihe ahụ maọbụ onye ahụ ozugbo. N’ịgbado ụkwụ na nkọwa a dị n’elu, Onah (2010:11) kọwara mkpọaha dịka aha a na-enye mmadụ, ebe, anụmamụ, ihe, njirimara, emereme na ihe e ji atụ ihe.
Mkpọaha dịka Yule (2002:88) si kwuo bụ mkpụrụokwu ndị ahụ e ji arụtụrụ mmadụ, ihe, ihe okike, ebe, njirimara, echiche na ebumnuche ahụghị anya dịka a ga-asị na ha bụ ‘ihe’ niile. Ụdịrị nkọwa a bara uru n’iwepụta ụdịdị dị iche iche mana o zuchaghị oke. Nke a bụ maka usoro dị iche nwere ike ilekwasa anya na nkejiasụsụ a. Ịmaatụ; e nwere ike ịkọwa mkpọaha dịka ọdịdị na-abịa n’azụ nnọso aha (the, a) ma nwekwaa mgbanwe maka onwunwe (-‘s) na ụbara (-s). N’eziokwu, ọ bụghị aha niile (ọmụmaatụ; ozi, ụrọ) nwere njirimara ndị a (Yule, 2002).
Dịka Ukwuegbu, Idris, Okoro, Okebukola na Owokade (2002:77) si kọwaa, e nwere ike ịkọwa mkpọaha n’ụzọ abụọ.
O nwere ike ịnọ n’ọnọdụ ihe maọbụ n’azụ ngwaa ozugbo n’ahịrịokwu. Ọmụmaatụ: (a) The ____ is good. (b) We saw a_____.
O nwere ngwụcha ụbara –s (maọbụ ọdịdị ọzọ pụtara ‘karịrị otu’) dịka: boys, churches, women
O nwere ọdịdị keonwunwe. Ọmụmaatụ: (a) Olu’s book; (b) The girl’s handbag
‘Akara aha’ nwere ike ịnọ n’ihu aha dịka a, an, the, his, my, this, those, several, many. Ọmụmaatụ: a book, my pen, those apples, several students.
Nkọwa a gbasara aka ma kwekwa nghọta n’ọdịdị ya. Ọ bara uru n’ịchọpụta ọdịdị buru ibu. Ọ dabakwara adaba.
Mkpọaha n’asụsụ Bekee ka e kwuru na ọ na-egosi ndịnọrụ dịka ọrụ ya si dị n’ahịrịokwu. Ha nwere ike ịbụ Mkpọaha na nnọchiaha n’asụsụ Bekee na-enwe ụfọdụ ndịnọrụ (keesi) dị iche iche dịka ọrụ ha na-arụ si wee dị n’ahịrịokwu. Ha nwere ike ịbụ keisiahịrị maọbụ kenọmịnativ (nke pụtara na ha nwere ike ịnọ dịka isiahịrị nke nkebiokwu nnọrọonwe maọbụ ndabe), keonwunwe (nke pụtara na ha na-egosi onwunwe nke ihe ọzọ), maọbụ kennara (nke pụtara na ha na-arụ ọrụ dịka nnara emereme na nnara nke mbuụzọ). Ewezuga ọdịdị keonwunwe (nke a na-emebekarị site n’itinye rịkọm elu n’ihu akaraedemede s), mkpọaha anaghị agbanwe ọdịdị ha na Bekee (Ihe bụ otu n’ime obere ụzọ asụsụ Bekee ji dị mfe n’asụsụ ndị ọzọ). Nnọchiaha n’aka nke ha, na-agbanwe ọdịdị ma ha gbanwee ndịnọrụ; mgbanwe ndị a na-apụtakarị ihe na nnọchionwe.
Ọtụtụ mba Afrịka bụ ndị ọcha chịrị ṅomiri ndị ọcha a n’ihe gbasara obibi ndụ mmadụ nke amụmamụ asụsụ na lingwistiiks so na ha. Ndị ọcha chịrị Naịjirịa, n’ihi nke a, ọmụmụ asụsụ amaala Naịjirịa dịka Igbo, Hausa, Igala, Yoruba, Tiv wdg sooro ụkpụrụ asụsụ Bekee (hụ Mbah 2006:15).
E nwere ụzọ dị iche iche e nwere ike isi kewaa mkpọaha Igbo. Ụfọdụ n’ime ụzọ ndị a bụ: iji usoro keọkpụ, kemmebeokwu maọbụ ụzọ ụdaolu.
Usoro kemmebeokwu bụ ụzọ e si emebe mkpọaha n’ebe o metụtara nkejiokwu mebere mkpọaha ahụ. N’okpuru nkenụdị a, anyị nwere mkpọaha otu nkejiokwu nke bụ mkpọaha nwere nnọọ otu nkejiokwu. Ọmụmaatụ; chi, di, ji. Anyị nwekwara mkpọaha nkejiokwu abụọ, ndị gụnyere mkpọaha nwere nkejiokwu abụọ. Ọmụmaatụ; mbe, ncha wdg. E nwere mkpọaha ndị nwere nkejiokwu atọ. A na-akpọ ha kenkejiokwu atọ. Ọmụmaatụ: agbịsị, obodo wdg. Mkpọaha ndị nwere nkejiokwu karịrị atọ ka e kpokotara ọnụ iji mebe nkenụdị mkpọaha a na-akpọ mkpọaha nkejiokwu ukwu. Ọmụmaatụ: oketembe, ogologo wdg (Mbah 2006:15-16).
Usoro ụdaolu na-arụtụ aka etu e si eji ụdịrị ụdaolu ọdịdịchi mkpọaha wee na-ekewasị ha. Usoro keọkpụ bụ usoro nke na-agbado ụkwụ n’ọrụ, agụmọnụ, ọnọdụ na ogo a hụrụ anya wee na-ekewasị mkpọaha.
Na-adị ịghịkwa ka mkpọaha Igbo, mkpọaha na Bekee nwere nkenụdị abụọ. Na nkenụdị nke mbụ, anyị nwere ụdịrị aha dịka aha izugbe, aha aka, aha igwe, aha ọkpụrụkpụ na aha uche. N’okpuru nkenụdị nke abụọ, anyị nwere mkpọaha ngụtaọnụ na agụtaọnụ.
Anyị ga-eji atụmatụ ngakọrịta ndịzu mma nke Blutner (2000) n’usorookwu ịkọwa ihe kpatara ọdịdị enweghị akara (enweghị nnọso) ji nwee nghọta na-enweghị akara (nkwekọrịta). Na ntụcha ọrụ a, anyị ga-ekwu maka mkpọaha ‘nwere nnọso’ na nke ‘na-enweghị nnọso’ otu oge iji wee kọwaa ma meek a o dokwuo anya ihe mkpọaha na nnọchiaha na-enweghị nnọso pụtara. Atụmatụ e ji rụọ ọrụ bụ iji mee ka ihe a na-akọ doo anya. Agụmagụ/ederede ọhụrụ na mpụta nkwuso n’asụsụ mba ụwa gosiri na nnọso pụtara n’oge n’asụsụ ebe a na-ekpokọta ntinye nkwuso, dịka ọ dị n’Ịtalịan, Katalan, na Griik (Chierchia et al, Guasti na Gavarro 2003, Marinis in press).
Ọnọdụ mkpọaha na-enweghị/nwere nnọso na-apụta n’ọnọdụ ọbụla n’asụsụ Bekee ma na-egosi enweghị nhatanha nke isiahịrị/nnara na Katalan na asụsụ Romansị ndị ọzọ. Anaghị anabata nkebiaha na-enweghị nnọso na Katalan. Ya mere, nkebiaha na-enweghị nnọso na-apụta naanị n’ọnọdụ mmachi (restricted co ndịtions) na Katalan: n’ọnọdụ ọchịchị, dịka nnara mbuụzọ na dịka nnara ngọm na dịka ngafe isiahịrị ngwaa nke nnara ekelesu (Chierchia 1998). Akụkụ kacha mkpa na nghọta mkpọaha na-enweghị nnọso bụ agụmagụ nhanọha (jenerik) na agụmagụ ọdịdị ya bụ nghọta nsinweta. Ọ dị mkpa ịma na nnara na-enweghị nnọso na Katalan nakwa nnara na isiahịrị na-enweghị nnọso nwere otu ụdịrị agwara na Bekee. Ọmụmaatụ:
‘I look for shoes’ (nhanọha)
‘I look for the shoes’ (kpọmkwem)
Aha nsina ngwaa na-enweghị nnọso bụ nkebiaha nke na-enweghị nnọso maọbụ nkwuso. Achọpụtala na nnọchiaha Bekee niile na nkwuso anaghị agakọrịta. Nnọchiaha bụ mkpụrụokwu anyị na-eji anọcha aha/nkebiaha iji wee rụtụ aka nye mmadụ, ihe iji wee gbanarịa nkwunwo na-adị ịghị mkpa (Eyisi 2006). Ọ dị mma ikwu na ọrụ kacha mkpa nke nnọchiaha na-arụ n’ahịrịokwu bụ ịnọchi aha nke a kpọburu aha ka nkwunwo aha ndị a ghara ịgwụ ndị ọgụụ maọbụ ndị na-ege ntị ike. N’eziokwu, nnọchiaha Bekee na nkwuso anaghị anọkọta mana ebe ọbụla ha nọkọtara, a na-enwekarị mgbanwe n’ọrụ nnọchiaha ahụ. Ọmụmaatụ:
He maọbụ she nọ n’elu nwere ụdịrị nnọchiaha mana ọ na-arụ ọrụ ka nnọchiaha. Ka o sila dị, nnọchiaha ndị nọ na ndịnọrụ keonwunwe maọbụ jenetiv ga-arụnwu ọrụ dịka nkwuso: my, our, your, his, its, na their. Ọmụmaatụ:
Dịka o si dị, nnọchiaha na-arụ ọrụ dịka nkwuso na-anọkarị n’ihu mkpọaha. Ya bụ, a na-etinye ha n’ihu mkpọaha ịkọwa ha maọbụ igosi agwara ha.
N’asụsụ Igbo, ewezuga nnọchiaha nrụaka ‘ndị’ (those) dịka; ‘Ndị ahụ bịara’, nnọchiaha Igbo niile enweghị nnọso. Na nleruanya nke ọma, isi mkpọaha a na-anọ n’ihu nrụaka n’asụsụ Igbo: ‘nwa a’ (this child), ‘ewu ahụ’ (that goat). Na-adị ịghịkwa ka Bekee ebe nrụaka na-abịa n’ihu isi mkpọaha dịka: this man, the goat, that girl wdg.
Ọ bụrụ na anyị dowe ahaaka n’otu akụkụ, aha nsina ngwaa na-enweghị nnọso dị ụzọ abụọ: ụbara na-enweghị nnọso na mkpoolu na-enweghị nnọso. Achọpụtala na elebanyela anya n’ụbara na-enweghị nnọso ogologo oge, mana mkpoolu enweghị nnọso, dịka ọmụmaatụ ndị a, bụ ndị dọtara mmasị ndị ọkachamara sayensị asụsụ na nsonso a:
Na mwube ndị a nọ n’elu, mkpọaha mkpoolu ngụtaọnụ ka ya na nkwuso na-anọkọrịta dịka:
Mwube ndị a anaghị apụta ihe naanị na Bekee, mana n’asụsụ ndị ọzọ ndị na-achọ mkpọaha mkpoolu ngụtaọnụ dịka hospital, knife, fork, piano, na door inwe nkwuso.
Ọ bụrụ na anyị tụlerịta mwube na-enweghị nnọso nan di nwere nnọso anyị ga-ahụ na aha nsina ngwaa na-enweghị nnọso nwere ọdịdị nkọwa ‘nkwekọrịta’ bara ụba. N’ịgbado ụkwụ n’ọmụmaatụ ndị a nọ n’elu, a ga-achọpụta na nkuso na-eweta ókè nye nghọta mkpọaha. Ọmụmaatụ ndị a nwere akara nwere nghọta dị iche maka na ha nwere akara (ya bụ, ha nwere nnọso), ya bụ ịrụtu ihe a na-ekwu maka ya aka kpọmkwem.
A chọpụtara na ọdịdị enweghị akara na nghọta enweghị akara na-agakọrịta ebe ọdịdị nwere akara na nghọta nwere akara na-agakọrita (ya bụ, obere ọdịdị – nghọta buru ibu). Mwube na-enweghị nnọso dịka ọ dị n’elu nwere nkọwa bara ụba maka asọmpi ya na nke nwere nnọso na-eweta ndapụta dizu mma nke bụ na dịka ọdịdị na-adị ịkwu obere, nghọta nkwekọrịta na-ebukwu ibu, mana ọ bụrụ na ọdịdị adịghị obere, nghọta nkwekọrịta anaghị adịkwa obere. Site na nke a, atụmatụ ngakọrịta ndịzu mma na-enye aka ighọta ihe kpatara e nwee obere ọdịdị, enwee nghọta buru ibu.
NB: N’ụzọ ọ dị mfe inwetanwu, ọtụtụ ọmụmaatụ ga-esi na Bekee, belụsọ asụsụ ndị ọzọ a kọwara mwube n’ụzọ kacha doo anya.
Etinyeghị nnọso aha na nkebimuụzọ bụ ihe a na-ahụta n’ọtụtụ asụsụ dị iche iche, ọkachasị na mbuụzọ ebe (Hemmelmann 1998, Stvan 1998; Baldwin et al 2006). Ọmụmaatụ bụ: in town, at sea, in church, otu of bed, on televisin, on tape, off stage, in view, at lunch, on vacation etc.
Mwube nzimebe na-enweghị nnọso na mkpọaha na-agakọrịta ịrụtụ aka ohere (n’ebe buru ibu); ebe (obodo, osimiri), otu (ụlọ ụka, ụlọ akwụkwọ maọbụ akwa), mgbasa ozi (onyoonyo, teepu), frem (nkwago, nsiahụ) na oge (nri ehihie, akaọrụ). E nwere mmetụta abụọ kacha mkpa nke anyị nwere ike iji tụlee ndịiche dị n’etiti nzimebe na-enweghị nnọso na ndị nwere nnọso. Site n’ohere keotu, nzimebe na-enweghị nnọso na-enwekarị ihe Stvan (1998) kpọrọ, nghọta emereme (an activity sense) dịka:
13a) to be in prison ‘to be a prison’
b) to be in the prison ‘to be in the location designated by ‘prison’
Ịnọ n’ụlọnga arụtụghị naanị akaebe a na-ahụ anya n’ụlọ mana isonye n’emereme nke ụlọ ahụ (njide).
Agụmamgụ amụmechiche adọghaala n’ebe ọ dị ukwuu ọdịdị isiahịrị mkpoolu na-enweghị nnọso. Ha nwere nrụtụaka dị adị dịka nghọta nnara si dị. Site na njirimara nnara dịka ‘Firemen are nice’ (nhanọha), ụbara na-enweghị nnọso na-ewere otu ụdị nkọwa, na-arụtụ ngalaba ahụ aka n’ozuzuoke, ebe ‘Firemen are available’ (kpọmkwem) na-akọwa naanị na e nwere ụfọdụ ndị mmenyụ ọkụ nọ n’otu oge. Ọnọdụ nnara na-enweghị nnọso doro obere anya. Ọmụmaatụ:
Site na mgbatị ngwaa nọ na (a), ụbara enweghị nnọso dị adị: mpụtara ya bụ e nwere ụfọdụ karọt m tara. N’okpuru ngwaa ọchịchọ dịka ọ dị na (b); e nwere okwu dị adị: ọ ga-ekwe omume na nnara adịghị adị, dịka e si gosipụta na (ch).
Ya bụ, ọnọdụ na nkọwa mkpọaha na-enweghị nnọso n’asụsụ na-adị abere na akọrọngwa mkpurụokwu dị adị. Ọnọdụ [+arg, +pred] nke ntụ na-eme ka mkpọaha na-enweghị nnọso kwe omume na bekee, mana mkpụrụokwu a tụrụ aka na otu agwara maọbụ nke ọzọ na-anọkọrịta. Nke a na-eweta mmeso mkpụrụokwu tara akpụ maka ịkọwa ihe ga-apụta dịka mkpọaha na-enweghị nnọso na Bekee: Naanị aha igwe nwere ike ịpụta n’ọnọdụ isiahịrị n’ọdịdị mkpoolu dịka ọdịdị: “Truth is rare,” nakwa mkpọaha ngụtaọnụ ga-enweriri ụbara dịka ‘Books are available.’ Chierchia (1998) kwuru na ndịiche aha igwe/ngụtaọnụ bụ mkpụrụokwu nke onye: ‘change vs coins’ nwere otu ụdị nghọta mana ọ na-akpa agwa n’ụzọ dị iche iche. Ya bụ, a na-anabata aha igwe mkpoolu na Bekee. N’ịga n’ihu, a na-ewepụtakarị mkpọaha na-enweghị nnọso dịka nhanọha ma hapụ ya ka ọ rụọ ọrụ echiche/nghọta dịka nnara maọbụ aha. Ọzọ kwa, nnabta nkwuso a hụrụ anya na-ewebilata agụmagụ ọdịdị na nnọso aha n’ọdịdị na-enweghị nnọso. Nchọpụta gosiri na mkpọaha na-enweghị nnọso anaghị akwụnyere nke ọbụla n’ihe gbasara ndịiche kpọmkwem/nhanọha.
Mgbanwe na-ekwe omume naanị n’ọnọdụ a chọrọ
Na mgbakwunye n’ihe usorookwu na-achọ, Dayal (2003) chịkọtara ụfọdụ ihe amụmechiche chọrọ maka ịkọwa mkpọaha na-enweghị nnọso dịka nkebiaha e kpokọtara ekpokọta. Ha gụnyere:
Obere odidoanya n’ụbụbọ (ya bụ, iji asụsụ na mwube na-enweghị nnọso adịghọ mfe ịghọta).
Ọdabere bụ mkpụrụasụsụ/mọfịm ntado nke so n’otu n’ime nkejiasụsụ nka dịka nnọchiaha, njikọ, nkwuso, nnyemaka, akara njụajụjụ, wdg (hụ Halpern 1995; gawazie). Ọdabere enweghị nnwereonwe keụda maọbụ keusorookwu kama, ha na-adị abere n’úkwù ha (ya bụ, mkpụrụokwu). E nwere nkenụdị ọdabere abụọ. Ha bụ: ọdabere azụ na ọdabere ihu. Mgbe mkpụrụokwu ha nọ na ya bu ha ụzọ, a na-akpọ ha ọdabere azụ, mana mgbe ha bịara n’ihu mkpụrụokwu ahụ, a na-akpọ ha ọdabere ihu. Ọmụmaatụ:
16a) Joy’s box
b) L’enfant noir (Fụrenchị)
N’ọmụmaatụ ndị a nọ n’elu, ‘s’ nọ na (Joy) bụ ọdabere azụ maka na ọ bịara n’azụ mkpụrụokwu, ebe na (L’enfant) nnọso aha ‘le’ bịara bụrụ ‘l’ site n’ịgbado ụkwụ na grama Fụrenchị. Na Fụrenchị, ụdaume anaghị agakọrịta. ‘L’ bụ ọdabere ihu ebe ọ bụ na ọ nọ n’ukwu mkpụrụokwu, a na-enweta ọdabere azụ. E nwere ike igosipụta usoro a site n’akara a:
17(a) le amour l’amour
Obi + ‘s Obi’s
N’agbanyeghị mkewa ọdabere ihu na nke azụ, e kewakwuru ọdabere n’ụzọ mfe na mpụrụiche. Ọdabere mfe bụ ịchafụ ọdịdị nke mkpurụokwu zuru oke nke na-anọkwa n’ọnọdụ keusorookwu nke mkpụrụokwu ọ na-anọchi na-anọ. Ọmụmaatụ:
18 They’ve gone
‘ve bụ ịchafụ ọdịdị have. N’otu aka ahụ kwa, na
19 We’ll come or go
‘ll bụ ịchafụ ọdịdị will. Ma (18) na (19) nwere ọmụmaatụ ndabere mfe. Ya bụ, anyị nwere ike ịkọwa odabere mfe dịka “ịchafụ odịdị nke mkpụrụokwu kwụụrụ onwe ya” (Katamba 1995:240).
N’aka nke ọzọ, ọdabere mpụrụiche bụ ọdịdị ndị nwere ike ịpụta naanị ka mọfịm ntado a gbakwunyere n’ukwu n’ụfọdụ ọnọdụ keusorookwu/ọdabere mpụrụiche dị iche na mgbanwe/inflekshọn. Otu njirimara dị mkpa e ji ewta ndịiche dị n’etiti ọdabere mpụrụiche na mgbanwe bụ ikike o nwere ịrụ ọrụ dịka mgbanabọ (dual citizenship). Nke a pụtara na “ọdabere bụ onye otu nke ọzọ n’ọdịdị.” N’itinye ya n’ụzọ ozọ, ọdabere na-anọ ka nkeji mkpọnammebe. N’ihi nke a, ha nwere agwara nke na-eme ka ha dị iche n’ebe mgbakwunye na mkpụrụokwu dị.
Ọnodụ ọdabere na-adị ị n’agbanyeghị nghọta ụfodụ mwube. Ọmụmaatụ: the principal of school’s car, ukwu keụda bụ school ebe ukwu keusorookwu/nghọta bụ nkebiaha niile nke principal bụ isi ya. N’agbanyeghị na ọ bụ principal na-abụghị school nwe car, agbakwunyeghị ‘s na principal. Ya mere, ihe a chọrọ bụ ịgbakwunye ‘s na mkpụrụokwu ikpeazụ nke nkebiaha keonwunwe. Ya bụ, e nwere ike inweta ọdabere mpụrụiche site na ntunye iwu pụrụ iche maọbụ site n’abụmonye otu nke nkeji ntachị/obere. Nchọpụta gosiri na e nwere ọnọdụ ọdabere anọ nke na-enweghị mgbagha ọbụla si n’aka Anderson (1995). Ha gụnyere:
N’ọnọdụ mbido mkpụrụokwu
N’ọnọdụ ngwụcha mkpụrụokwu
Ọnọdụ nke abụọ n’ahịrịokwu
Ọnọdụ osote nke ikpeazụ (ya bụ tupu nke ikpeazụ0 n’ahịrịokwu.
N’Igbo, a na-ahụ ọdabere mfe na nke mpụrụiche. Na mgbakwunyere ọtụtụ ọnọdụ ọdabere n’okwu, a ka nwere agwara dị mma ndị gụnyere nghọta pụrụ iche nke ọdabere na-eweta dịka:
‘These are also children’
‘It is actually Uche that gave me yam’
‘They must be really bad people’
Ọnọdụ ọdabere n’Igbo
Dịka Anderson (1995:200) si kwuo, “ọdabere dabeere nnọọ n’ukwu ha n’ụdị ụda.” Etu ọ dị, ụfọdụ mwube nwere ọdabere n’asụsụ Igbo egosila na nke a abụghị eziokwu. E nwere ụfọdụ dabeere nwekwaa ndị na-adị abeghị. Ugbu a, egosipụtala na:
Ọdabere anaghịcha adabere n’ukwu ya n’ụdị ụda
‘Speak’ (A na-agwa onye nke abụọ (ụbara)
‘Ada will come daily’
Ọ na-adị abere n’ukwu ya n’ụdị usorookwu na nghọta.
iii. Ndakọrịta ụdaume na-ewere ọnọdụ n’etiti ọdabere n’ukwu ya.
Ọdabere anaghị apụta ihe naanị na mbido ahịrịokwu maọbụ n’ọnọdụ nke abụọ mana n’ọnọdụ ndị ọzọ n’ahịrịokwu.
Ọdabere ọyọ na-apụta ihe n’ụfọdụ olundị Igbo
Ọdabere ihu dị n’asụsụ Igbo
24) Anyị nọ n’ụlọ Obi
‘We are in Obi’s house.’
Site n’ọnọdụ dị iche iche nke ọdabere n’asụsụ Igbo weere n’elu, a chọpụtara na ọdabere na-emetụta nghọta/echiche nke ahịrịokwu. Ọdabere ndị a nọ na tebụlụ dị ala bụ ndị a na-ahụ n’ọlụndị Igbo na Igbo izugbe.
S/N ỤDỊDỊ OKWU ỌNỌDỤ
1. Ọdabere ihu n’ In Mbuụzọ na-abịa n’azụ ngwaa
Ga- will/shall Na-abịa n’ihu ngwaa tensị ndịnịihu
2. Ọdabere azụ kwu Also N’azụ NP na n’azụ VP
Cha in addition to N’azụ NP na n’azụ VP, n’ụfọdụ ọmụmaatụ
Naanị n’azụ ngwaa; n’ụfọdụ
ọmụmaatụ n’azụ np naanị
Li actually N’azụ ngwaa
Lili really N’azụ ngwaa
Nwa themselves Nnọchiaha kentụkwasị. N’azụ NP
Ni dummy Na-eso akara ajụjụ
Ki question marker Na mbido ahịrịokwu
Zi then N’azụ ngwaa, 2P, na ngwụcha ahịrịokwu
Nu you pl. Akara onye nke abụọ (ụbara); n’azụ ngwaa
Nu please, polite, request N’azụ ngwaa, anaghịcha anọ n’azụ aha nsina ngwaa dị ka kwe nu
Fu now N’azụ aha nsina ngwaa
afụ that N’azụ aha nsina ngwaa
Kwe dummy N’azụ aha nsina ngwaa
Kwa every; repetitive N’azụ aha nsina ngwaa
Nchọcha e mere n’isiokwu nke akwụkwọ a egosila na e bu ụzọ akwụsị iwepu nnọso aha na Fụrenchị na Ịtalịan karịa na Bekee na Swidish nakwa na Katalan tupu na Dọọchị (Dutch). A chọpụtara na n’asusụ dịka Bekee, a na-eji aha nsina ngwaa na-enweghị nnọso arụ ọrụ na mwube pụrụ iche, ha na-ejikwa nghọta pụrụ iche abịa. Ọzọ kwa, etinyeghị nnọso aha na nkebi mbuụzọ bụ ihe dị n’ọtutụ asụsụ ọkachasị na mbuụzọ nzimebe.
Mkpọaha na-enweghị nnọso ga-abụrịrị ihe dịka ụbara maọbụ mkpoolu igwe maka asụsụ dịka Bekee. A chọpụtakwara na nnọchiaha na-akpa ụdịrị akparamagwa mkpọaha ha na-anọchite anya ha na-akpa. Mkpọaha na nnọchiaha anaghị enwe nnọso n’ọdịdị nkịtị ha. Ọ bụrụ na o nwere, ya na ntụ okwu n’asụsụ Igbo ga-agakọrịta.
Mkpọaha na-enweghị nnọso ga-arụnwu ọrụ dịka nghọta aha na Chinese. Agụmagụ nsonso na mpụta nkwuso n’asusụ mba ụwa gosiri na nkwuso pụtara n’oge n’asụsụ ebe ntinye nkwuso nọ n’izugbe, dịka o si dị n’Ịtalịan, Katalan na Griik. Nnara na-enweghị nnọso na Katalan na isiahịrị na nnara na-enweghị nnọso Bekee na-enwekọta otu agwara. Nchọpụta gosiri na ọdabere anaghịcha adabere n’ukwu ya n’ụdị ụda dịka e kwuburu na mbụ, e gosiri ọtụtụ ọnọdụ ọdabere na-ewe n’asụsụ Igbo. A chọpụtakwara na ọnụnọ ọdabere na-emetụta nghọta ahịrịokwu. Ntinye/ọnọdụ ọdabere na-adị ị n’agbanyeghị nghọta ụfọdụ mwube.
Anyị na-emechi site n’ikwu na ebumnuche akwụkwọ a, nke bụ, ilebanye anya na mkpọaha na nnọchiaha na-enweghị nnọso na ụfodụ ọmụmaatụ mwube ụbara na-enweghị nnọso pụtara n’asụsụ. Akwụkwọ a lebakwara anya n’ụdịdị na ọnọdụ ọdabere n’asụsụ Igbo. O doro anya n’Igbo nwere ntụnye dị mma ime n’atụmatụ sayensị asụsụ n’izugbe, ọkachasị n’ihe gbasara ọnọdụ ọdabere n’okwu na ndabere ụda. Anyi enweghị ike ime nchocha dizu mma banyere isiokwu n’ihi oge. Ya bụ, anyị na-atụnye alo ka e mee nchọcha n’ọdịnịihu iji kowamie mkpọaha na nnọchiaha na-enweghị nnọso, ụdịdị na ọnọdụ ọdabere n’asụsụ Igbo.
Nsogbu Ịkụzi Ụdaolu Igbo N’ụlọ Akwụkwọ Sekọndịrị
Ezema, Chinenye Anthonia Humanities Unit School of General Studies University of Nigeria, Nsukka chinenye.ezema@unn.edu.ng
Nchọcha a lebara anya n’ọmụmụ ụdaolu Igbo n’ụlọ akwụkwọ sekọndịrị. Ọ bụkwa maka ịkụzi ụdaolu dị ka ihe ọmụmụ n’ụlọ akwụkwọ ka e mere nchọcha na ya. Ọ chọpụtara ụdaolu dị ka otu ihe ọmụmụ na-ahịa ndị nkụzi ahụ ịkụzi ya n’ụlọ akwụkwọ sekọndịrị n’agbanyeghị na e nyere ha (ndị nkụzi) ọzụzụ na nke a n’ụlọ akwụkwọ dị elu – Kọleji Edukeshọn na Mahadum. Ọ bụ otu isiokwu kacha enye ndị nkụzi nsogbu n’ịkụzi n’ụtọasụsụ Igbo. Itinye ma ọ bụ ịkanye akara ụdaolu site n’olu dị elu ma ọ bụ ala ekweghị ha akanye. Nchọcha a lebara anya n’ụdaolu na ihe ọ pụtara. Ọ gakwara n’ịkọwa ụdị ụdaolu e nwere, akara ha dị iche iche na nsorịta ha n’okwu na n’ahịrịokwu. Echiche atọ ka a ga-esi kanye akara ụdaolu bụ nke e lebara anya wee hụ nke a naghị ede ha n’ihi nhịamahụ dị na ya na ndị a nabatara a ka ji ede ihe ma taa. E mere nchọcha a na zonu mmụta Nsụka. Usoro e ji mee nchọcha bụ ndịmemecha. E ji ndị nkụzi dị iri iteghete na abụọ sitere n’ụlọ akwụkwọ dị iri na ise wee mee nke a. A chọpụtara site na data nke e wetara na njụmaza ma jiri pacenteji (%) wee gosi nsogbu/nhịa ahụ ndị nkụzi na-enwe n’ịkụzi ụdaolu n’ụlọ akwụkwọ sekọndịrị. Ndị nkụzi niile e jiri mee nchọcha kwetara na ha chọkwuru ọzụzụ n’ụdaolu na otu e si akanye akara ụdaolu. Ọ bụrụ na ndị nkụzi amụta ma mara ụdaolu na ịkanye akara ya nke ọma site n’ọzụzụ ha ga-enweta, ọ ga-ebelata ọsọ ha na-agba ịkụzi ya n’ụlọ akwụkwọ ma sikwa otu ahụ nwee mmasị na-akụziri ya ụmụaka bụ ndị ga na-aghọta ya nke ọma mgbe onye mara ya na-akụziri ha.
Ụdaolu bụ nke pụtara ịkpọli ụda elu ma ọ bụ ịkpọda ya ala oge a na-akpọpụta okwu. Ọ bụ etu e si eji olu akpọpụta okwu na otu o si ada oge a na-akpọpụta ya. Ụdaolu na-eme ka a mara ihe okwu pụtara ọkachasị ebe otu mkpụrụokwu nwere ike inwe ọtụtụ nghọta. Naanị ihe ga-eme ka amata ihe okwu dị otu a pụtara bụ site n’ịkanye ya akara ụdaolu iji gosi mgbe olu dị elu ma ọ bụ ala. Mbah na Mbah (2006) kọwara ụdaolu dị ka mpụtara njikwa ogo olu. Ha gakwara n’ihu kọwaa na ọtụtụ ihe na-emetụta ogo olu dị ka ndọtị mkpọụda nke na-eme ka ogo olu rịa elu. Nke abụọ, etu ikuku si aga na ngụ na-eme ogo olu ịdị elu ma ọ bụ ala.
Anagbogu, Mbah na Eme (2010) na nkọwa nke ha kwuru na ụdaolu bụ ndịiche dị n’olu dị ka o si gbasa nkejiokwu n’asụsụ ụdaolu, nke nghọta ya pụtara ihe nke ọma ma dị iche n’ụdị ya. Ndịiche dị n’ụdaolu n’okwu abụọ ma ọ bụ karịa na-esite n’asụsụ bụ asụsụ ụdaolu. Nke a pụtara ihe nke ọma n’asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo dị ka a mara bụ asụsụ ụdaolu. Ikekeọnwụ, Ezikeojiakụ, Ụbani na Ugojị (1999) mere ka a matakwa na ọtụtụ asụsụ mba Afrịka na ụfọdụ asụsụ mba Eshia bụ asụsụ ụdaolu. Ihe nke a pụtara bụ na ọ bụ ka mkpụrụokwu si ada ka e si amata nghọta na mpụtara ya. N’asụsụ Igbo, otu mkpụrụokwu nwere ike na-akọwa ọtụtụ ihe. Ọ bụ ụdaolu na-eme ka a mata ihe mkpụrụokwu ọ bụla pụtara. Ọtụtụ mkpụrụokwu na-enwe otu nsụpe ma ha na-enwe nghọta dị iche iche. Ọ bụ ụdaolu na-eme ka nghọta ha na-egosipụta ihe ha pụtara.
E ji akara ụdaolu egosi ụdị ụdaolu e ji kpọpụta nkejiokwu dị iche iche. E nwere ụdị akara ụdaolu atọ n’asụsụ Igbo. E ji ha eogsi ka nghọta, ọnọdụ na ọrụ mkpụrụokwu si dị. Ha bụ:
Mkpụrụokwu ‘akwa’ nwere ike ịpụta ọtụtụ ihe dị ka: ogodo; ọgọdọ; ime ọkụkọ; na ụrịa. Ọ bụrụ na a kanyeghị ya akara ụdaolu, mkpụrụ edide ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na o bu akara ụdaolu na-egosi kpọmkwem ihe ọ bụ , onye akpọtaghị ya dara ya ada.
òké (anụmanụ na-arị arị)
ózò (ụdị anụ ọgụ)
nchà (nnyemaka ogbo)
E lee anya na nọmba 1 rue 10, a ga-ahụ na a bịa na otu nke ọ bụla mkpụrụokwu niile e depụtara nwere otu mkpụrụ edide, naanị ihe dị iche na ibe ya bụ ụdaolu bu nke mere ka nghọta ha dị iche. Ọ bụ n’elu ụdaume (a e i ị o ọ u ụ) ka a na-akanye akara ụdaolu dị ka a hụrụ na nọmba 1 rue na 7. N’aka nke ọzọ, a na-akanyekwazị akara ụdaolu na myiriụdaume (m n) dị ka a hụkwara na nọmba 8 rue na 9. Nke a pụtara na ọ bụghị mkpụrụ edide niile ka a na-akanye akara udaolu. Naanị ụdaume na myiriụdaume na-ebu ụda na mkpọpụta ha. Ọtụtụ na-nwe nsogbu nchọpụta na ebe e kwesịrị ịkanye akara ụdaolu. Tinyekwara ịmata ụdị akara ụdaolu a ga-akanye.
Dị ka e gosirila na e nwere akara ụdaolu atọ n’asụsụ Igbo – ụdaolu elu, ụdaolu ala na ụdaolu nsụda. Akara ndị a nwere njirimara ha na usoro ha si esorita onwe ha.
E meela nchọcha banyere ụdaolu na akara ụdaolu. Mbah na Mbah (2010), Nwachukwu (1995), Emenanjọ (1987), na Green na Igwe (1963) ndị ọkammụta dị iche iche e lebara anya n’ụdaolu na ka a ga-esi kanye ha akara dị ka o kwesịrị . A tụlere ụdaolu elu, ụdaolu ala na ụdaolu nsụda na ka e si kanye akara ha n’ọmụma atụ mkpụrụokwu ụfọdụ.
anọ n’etiti mkpụrụokwu d.k. ógólógó njédébé
anọ n’etiti mkpụrụokwu d.k. ùdèlè àkùkò
eso ụdaolu ala ọzọ k. ìtè ùgò
na-anọ n’etiti mkpụrụokwu d.k. ngiga íjiji
na-eso naanị ụdaolu elu k. ája íme
Ọrụ Ụdaolu N’assụsụ Igbo
Ụdaolu na-arụ nnukwu ọrụ adịghị mgbagha n’asụsụ Igbo. Ọrụ ọ na-arụ gụnyere:
Ngosi ndịiche n’okwu abụọ ma ọ bụ karịa nwere otu nsụpe.
Ngosi ndịiche n’ahịrịokwu ajụjụ na ahịrịokwu nkwusa.
Ò nò n’úlò Ó nò n’úlò
Ó jere Ò jèrè
Ngosi ndịiche dị n’ọnụ ọgụ na nọmba nke.
Ngosi ndịiche dị n’ahịrịokwu na nkebiokwu keaha.
Ngọzi bịara …
Ngosi ndịiche dị na mkpọaha mgbe ọ na n’okwu na mgbe ọ na-egosi onwunwe.
Nkanye Akara Ụdaolu
Mbah (2009) kwuru na ọtụtụ ndị ọkammụta kwenyere n’ọnụ ọgụ ụdaolu e nwere n’asụsụ Igbo. Ebe ọ gbata uhie dịzi bụ ka e si depụta ma ọ gosipụta ha n’ihe a na-ede. Ụfọdụ na-ekwu na ịkanye akara ụdaolu n’ebe niile o kwesịrị na-eme ka ndị mmadụ ghara inwe mmasị n’ịgụ ihe e dere. Ebe ụfọdụ kwenyere ka a kanye akara ụdaolu niile, ụfọdụ ekwetaghị na nke a.
Ọ dị echiche atọ pụtara ihe n’usoro ịkanye akara ụdaolu. Nke mbụ ma bụrụkwa nke ochie bụ nke R. C. Abraham wepụtara. Ọ dị mkpa ka a mara na a nabataghị usoro odide ya. Usoro a na-ekwu na :
nkejiokwu niile nwere ụdaolu elu na-aga ede ya na nnukwu mkpụrụ edide/leta.
nkejiokwu niile nwere ụdaolu nsụda a ga-eji nnukwu mkpụrụ edide wee bido ma dezie ụdaume na-eso ya n’obere leta ma ọ bụ ọ bụrụ myiriụdaume e jiri obere leta dee ya.
Nkejiokwu niile bụ ụdaolu ala a ga-eji obere leta dee ha.
Usoro odide a e nweghị nnabata ozuru mba n’ụdị ka e si eji nnukwu mkpụrụ edide ede ihe, ọkacha n’ibido mkpụrụokwu, nkebiahịrị ma ọ bụ ahịrịokwu. Nke ọzọ, ọ na-emeka ihe e dere ghara ịdị mma ma mekwa ka ịgụ ihe hịa ahụ. N’aka nke ọzọ kwa, ọ na-eme ka a ghara ịma ka a ga-esi na-ede obere leta. Usoro odide a anwụọla, a naghịzi ede ya.
Echiche nke abụọ bụ nke ndị ndu ha bụ Welmers na Nwachukwu. E jirila nke a dee ọtụtụ ihe dị ka a ga-ahụ na Green na Igwe (1963), Welmers (1973), Nwachukwu (1983), na Mbah (1999,2006). Usoro odide anabatara akara nta abụọ maka ụdaolu atọ e nwere – ( ´) maka ụdaolu elu na nsụda na ( ` ) maka ụdaolu ala. Ọ na-ekwu ka:
ebe e nwere ndịiche n’ụdaolu elu na-esotenu, ka a kanye akara ụdaolu nke mbụ na ndị ọzọ.
aghara ịkanye ụdaolu elu niile akara
akanye ụdaolu ala niile akara
akanye udaolu nsụda niile akara
Okwu Abraham Williamson Welmers
íré (tongue) IRE Ire Íre
élé (antelope) ELE Ele Éle
áká (hand) AKA Aka Áka
ákwà (cloth) Akwa Akwà Ákwà
nwa óke (man) NWA Oke nwa oke nwá oké
àlà (land) Ala Àlà Àla
nkàtà (basket) Nkata nkàtà Nkata
égo (money) Ego Ego Égó
ìkwìghìkwíghi (owl) ikwighiKWIGHi Ìkwìghìkwighi Ìkwighikwíghí
Ịkụzi ụdaolu n’ụlọ akwụkwọ tụmadị na nke sekọndịrị bụ nke nchọcha a lebara anya. Ịkụzi ụdaolu n’ụlọ akwụkwọ sekọndịrị so n’otu n’ime ọmụmụ e nwere ma na-eme n’ụtọasụsụ Igbo. Ọ bụ n’ihi na e mere nchọcha ka a chọpụtara na ịkụzi ụdaolu n’ụlọ akwụkwọ na-enye ndị nkụzi nsogbu. Na nchọcha Mbah (2009) mere maka ụmụ akwụkwọ na-agụ na ngalaba Igbo Asụsụ Nịajirịa ndị ọzọ, na ọmụmụ IGB 308 ebe ụdaolu so n’otu ihe a na-akụzi n’ọmụmụ ahụ.
Nchọcha a bụ maka ụmụ akwụkwọ nọ oge niile n’ụlọ akwụkwọ na ndị na-abịa naanị n’oge ezumike ogologo oge. Ndị na-abịa ọmụmụ n’oge ezumike bụ ndị e kwenyere na ha bụ ndị nkụzi n’ụlọ akwụkwọ dị iche iche. A chọpụtara na otu ajụjụ bụ nke a jụrụ maka ụdaolu na imirikiti ha azaghị ya. Ebe ndị nke zara ya aza ka ọtụtụ n’ime ha dara. Nchọpụta gosiri n’ihe ha ji agba ọsọ n’ụdaolu bụ amaghị isiokwu ahụ nke ọma nke mere na ha anaghị akụziri ya ụmụ akwụkwọ ha.
Nchọcha nke a lebara anya na nsogbu ndị nkụzi na-enwe ịkụzi ụdaolu n’ụlọ akwụkwọ sekọndịrị. Ụdị nchọcha a bụ Ndịmemecha. Ebe e mere nke a bụ na zonu mmụta Nsụka. E ji ụlọ akwụkwọ iri na ise wee mee ya. Ndị nkụzi dị iri iteghete na abụọ n’ọnụ ọgụ na-akụzi Igbo n’ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ka e ji mee ya. E ji njụmaza dị iteghete wee weta ọsịsa ndị nkụzi gbasara nke a. E jikwa pacenteji wee yochaa data e nwetara. E ji akara ngosi anọ wee zaa njụmaza ndị ahụ. Ha bụ Ekwesịrị m ike (EI), Ekwere m (E), Ajụrụ m (A) na Ajụsiri m ike (AI).
Tebulu 2: Ịkụzi Ụdaolu N’ụlọ Akwụkwọ Sekọndịrị
N/i Ajụjụ %EI %E %A %AI
1 Ụdaolu bụ otu ihe ọmụmụ n’ụtọasụsụ Igbo 80 16 04 –
2 Enwere m ọzụzụ n’ụdaolu 60 20 05 15
3 Ana m akụzi ya n’ụlọ akwụkwọ 40 36 13 11
4 Ama m akụzi ya nke ọma 08 14 31 47
5 Ama m akanye akara ụdaolu n’ebe o kwesịrị 08 14 36 42
6 Enwere m ike ịza ajụjụ ọ bụla sitere n’ụdaolu 06 10 35 49
7 Ana m ezere ịkụzi ụdaolu n’ụlọ akwụkwọ 45 25 25 5
8 Ịkụzi ụdaolu edochaghị m anya 48 25 24 03
9 Achọrọ m ọzụzụ na nka ịkụzi na ịkanye ụdaolu 79 11 06 04
Site na tebulu dị n’elu, a chọpụtara na ọtụtụ ndị nkụzi nwere nhịa ahụ n’ịkụzi ụdaolu. Ha kwenyere na a na-akụzi ya n’ụlọ akwụkwọ mana ọ bụghị ha niile na-ekwe akụzi ya n’ihi na ha amaghị akụzi ya nke ọma na ịkanye akara ụdaolu ebe o kwesịrị . Ụfọdụ ha na-eze ịkụzi ya site n’ịmafe ya n’usoro nkụzi ha. Ha kwetara na ịkụzi ụdaolu edochaghị ha anya. Ha gakwara n’ihu kweta na ha chọrọ ọzụzụ pụrụ iche n’ụdaolu – ịkụzi na ịkanye akara ụdaolu.
Ọmụmụ ụdaolu n’ụlọ akwụkwọ sekọdịrị bụ otu isiokwu e nwere n’ọmụmụ ụtọasụsụ Igbo. Ọtụtụ ndị nkụzi na-agba ọsọ ịkụzi ya n’ihi na ha amaghị isiokwu a (ụdaolu) nke ọma. Nchọcha lebara anya n’ụdaolu na ihe ọ pụtara. Tinyere ụdị ụdaolu atọ e nwere n’asụsụ Igbo – ụdaolu elu, ụdaolu ala na ụdaolu nsụda na akara ha. E gosipụtara ezi nsorịta ha n’okwu na n’ahịrịokwu. Ọrụ ụdaolu na-arụ bụ nke a kọwapụtara n’uju na nchọcha a. Ụzọ echiche atọ pụtara ihe n’ịkanye akara ụdaolu ka e gosiri na usoro odide ha.
Data e nwetara site na njụmaza ndị nkụzi zara gbasara nsogbu na nhịa ahụ ha na-enwe n’ịkụzi ụdaolu n’ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ka e ji pacenteji gosi. Ndị nkụzi kwenyere na ha na-enwe nsogbu n’ịkụzi ụdaolu n’ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ma kweta na ha chọrọ ọzụzụ pụrụ iche maka nke a iji kwalite mmasị ha n’ịkụziri ụmụ akwụkwọ nke a.
Emenanjq, N. E. (2015). A Grammar of Contemporary Igbo Port Harcourt: M & J Grand Orbit Communications Ltd.
Ezema, C. A. (2018). Ndubata N’ọmụmụ Asụsụ Igbo. Enugu: Computer Edge Publishers.
Mbah, B. M. (2009). ‘‘ The Teaching and Learning of the Igbo Tone: Guides to its Effective Understa ndịng in a Typical Classroom Learning Situation”. Review of Education. Vol 20 no. 1. Ihu 108-123.
Mbah, B.M. & Mbah, E.E. (2010). Topics in Phonetics and Phonlogy. Contribution from Igbo. Nsukka: AP Eụpress Publishers.
Nkeji Mmeju N’asụsụ Igbo
Ọnọdụ mkpụrụokwu nwere na nkega dị iche iche dị n’ahịrịokwu na-enye aka ịchọpụta na ịkọwa ọrụ ọ na-arụ na ndokọ okwu ahụ, n’ihi ya mkpụrụokwu ọ bụla nwere ike ịrụ otu ụdịọrụ n’otu ọnọdụ ma rụọ ọrụ ọzọ n’ọnọdụ ọzọ. Ọrụ ya nwere ike ịbụ ọrụ a maara ma ọ bụ a tụrụ anya ọdịdị nkeji asụsụ ahụ kwesịrị ịrụ mana n’aka nke ọzọ, ọrụ ya nwekwara ike ịbụ ọrụ eseghị n’elu dịka ọdịdị ya si dị. Mbunuche nchọcha a bụ ileba anya n’ echiche adabanyeghị banyere mmeju n’asụsụ Igbo dị ka o si metụta ọnọdụ ha oge ụfọdụ, ịkọwapụta na ọ dịghị ihe dị iche na nnara na mmeju n’ebe o metutara ndokọ okwu Igbo. E nwetere ngwa ọrụ e jiri rụọọrụna nchọcha a site n’ajụjụọnụ nwa nchọcha gbara mmadụ abụọ ndị bụọka n’amụmamụ usoro okwu Igbo nakwa ịgụọtụtụ ederede banyerenchọcha a nke ọtụtụ ndị mmadụ edeela ihe banyere ya. Nchọcha a chọpụtara ebe dị iche iche mmeju okwu na-anọọnọdụ isiahịrị nke ngwaa anaghị agacha tupu e nwete ya bụ mmeju site ka iwu na ntụ ndokọ okwu Igbo si eme. Nchọpụta ọzọ bụ nzipụta mkpụrụokwu ndị ahụ na-esochi ngwaa n’azụ ndị nọọnọdụ nnara mana ha abụghị nnara kpọm kwem kama nnapụta nnara site n’okwu ọzọ na-eso ha n’azụ, wee na-akọwa na ma nnapụta nnara ma nnara, na ha niile bụ mkpụrụokwu mmeju di na-etinyeso aka n’imejupụta echiche dị n’ahịrịokwu ma ọ bụ nkeji ahịrịokwu a na-akọ maka ya. Nchọcha a chọpụtakwara na n’ogo ndokọ mkpụrụokwu, na mkpụrụokwu mejupụtara echiche zuru oke nye mkpụrụokwu nke bụ isi-ahịrị nwere ọdịdị ya nke na-arụkwa ọrụọzọ ma e wezuga ọrụ mmeju nke sere n’elu ọ rụrụ nye mkpụrụokwu ahụ. Ntinyeuche ederede a bụ izipụta na e kwesighịịgbaso usoro asụsụọzọ si akọwapụta mmeju n’asụsụ ha wee na-akọwa nke Igbo maka na asụsụ Igbo rijuru afọị kwụrụ onwe ya nakwa ọ bụghị mkpụrụokwu niile nọọnọdụ nnara bụ mmeju ma ọ bụ na-arụọrụ mmeju. Nke a ga-enye aka n’ebe mmụta na ikuzi ụtọasụsụ ndokọ okwu Igbo na-abanyewu.
N’ụtọasụsụ, mmeju bụmkpụrụokwu , nkeji ahịrịokwu ma ọ bụ nkebiahịrị nke dị mkpa imezu mpụtara okwu enyere. Dịka Borsley (1991) na Brinton (2000) si kọwaa na mgbe ụfọdụ mmeju na-abụ aha (nke bụ okwu na-enye aka n’imezu mpụtara ngwaa). Mbah na ndịọzọ (2013:129) kọwara mmeju dị ka “okwu echiche ya dị n’echiche isiokwu ya mana echiche isiokwu ya adịghị n’echiche nke ya onwe ya; ya na isi nkeji na-ejikọ bụrụ nkeji ahịrị“. Ebe Cook na Nweson (2009:41) n’aka nke ha kwuru na mmeju bụ akụkụ asụsụ mgbanwe dị mkpa nke metụtara ọnọdụ isi na mmekọrịta mmewere keji ahịrịokwu ndịọzọ. Mmeju dabaranọ n’echiche “nnara” nke ụtọasụsụọdịnaala mana ụfọdụọka asụsụ dị ka Nwachukwu na Emenanjọ na-akọwa na nnara dị iche na mmeju. Ha kọwara na mmeju bụ naanị na ngwaa ka e si enwete ya site na nkewasi nkeji ngwaa. Mana Mbah na Mbah na-arụsịụka ike na-ekwu na ọ dịghị ihe dị iche na nnara na mmeju, na ọ bụ otu ihe ka ha abụọ na-akọwa nke bụ imejupụta echiche dị n’ahịrịokwu.
N’ihi nrụmaarụụka a gbasara ihe e nwere ike ịkpọ mmeju n’ebe o metụtara nkeji mmeju Igbo kpọlitere mmụọ nwa nchhọchha iji mebe nchọcha a; iji chọpụta ebe dị iche iche mmeju okwu na-anọ ọnọdụ nakwa ihe ịmata kpọm kwem ma e nwe ihe dị ichhe na nnara na mmeju n’ebe o metụtara mmeju Igbo maka na dị ka e si mara na mmeju n’ahịrịokwu bụ onye agwa ngwaa kpara fesara, nke na mgbe ụfọdụ ọ na-enwe nnapụta. Ajụjụ abụrụzie ma nnapụta o sokwa bụrụ mmeju?
Mkpa nchọcha a ga-egbo bụ I doo oke na ngwere anya na ọ dighị ihe dị ichhe na nnara na mmeju dị ka Mbah na Mbah si kọwaa belusọ na mkpụrụokwu ọ bụla nọọnọdụ mmeju na-enye aka izipụta echiche dị n’ahịrịokwu ahụ ma ọ bụ mkpụrụokwu. Otu uru nchọcha a ga-aba bụ idozighara echiche ọtụtụ banyere ihe bụ mmeju n’asụsụ Igbo ọ kachasi ndị na-ebu n’uche na mmeju Igbo bụ okwu na-esote ngwaa n’azụ site na ndokọ okwu IsNgwNn n’usoro ụtọasụsụọdịnaala e ji atụtụ X-bar na-akọwa. Nchọcha a ga-egosipụta naọ bụghị mkpụrụokwu ọ bụla nọdebere ngwaa bụ mmeju ọ kachasị ma ọ bụrụ na mkpụrụokwu ahụ bụ nrụmaka “a” na “ahụ”. Nhịamahụ nwa nchọcha nwetere na nchọcha a bụ nchọpụta ndị o nwetesiri site n’aka ụmụakwụkwọ nakwa ụfọdụ ndị nkuzi ụtọasụsụ tụmadị akwụkwọ ụfọdụ e derela banyere mmeju wee na-ekwu na okwu ọ bụla na-arụọrụ mmeju na-eso naanị ngwaa n’azụ site n’iwu na ntụ a na-agbaso akọwa ndokọ okwu nakwa na mkpụrụokwu sitere ngwaa na-abụ nnara na–abụghị mmeju.
Ọ bụ n’akwụkwọ nkọwa bụÌgbò Àdìka e si kọwapụta mkpụrụokwu sayensị asụsụ dị na nchọcha a.
A hazịrị mpaghara a n’ụzọ ndị a : nkọwasị mkpụrụokwu dị n’isiokwu, atụtụ nchọcha, chọcha ndị e meerela n’isiokwu nakwa nchịkọta ntulegharị agụmagụ.
Nkowasị mkpụrụokwu dị n’isiokwu
N’ebe a nwa nchọcha ga-eleba anya n’ụfọdụ mkpụrụokwu o chere dị mkpa n’ịkọwasi isiokwu ọ na-eme nchọcha na ya. Otu mkpụrụokwu metụtara isiokwu a bụ usoro okwu, maka na tupu mmadụ e nwe ike kọwata mmeju, ga-ebu ụzọ mata ka asụsụ Igbo si agakọ.
Usoro okwu dị ka Mbah na Mbah (2014:28) si kọwaa bụ “isi sekpụ ntị n’amụmamụụtọ-asụsụ. Nke a bụ n’ihi na ọ na-akọwa ka asụsụ si ahazi okwu na mgbakwunye ụtọ-asụsụ dị iche iche iji nweta ahịrị-okwu dịziri adịzi ma nwee echiche”. Ha gakwara n’ihu kọwaa na n’ezie, ọtụtụ ndị mmadụ na-ewe usoro okwu dị kaụtọ-asụsụ, mana usoro okwu naụtọ-asụsụ dị iche’. Ha kowari na usoro okwu metụtara naanị ka asụsụ si ahazi mkpụrụokwu ya iji mebepụta ahịrị nwere echiche ma nwee ike kwụrụ onwe ya.
Site n’echiche Mbah na Mbah, o kwere ghọta na usoro okwu bụ ihe dịọkpụ nke pụtara na ọ bụ ihe dị adị. Usoro okwu bụ usoro asụsụ ọ bụla si edokọ mkpụrụokwu ya n’ụzọ ha ga-enye nghọta n’ihi ya asụsụọ bụla site na mmalite agbụrụ wee ya na-ahazi mkpụrụokwu ya n’ụzọ ha ga-enye nghọta nke echiche ndụ na usoro obibi ndụ ha. E nwere ike ighọtakwa na usoro okwu site na nkọwa Mbah na Mbah nyere, bụkwa ụzọ agbụrụ kwekọrịtara ha si ezikọrịta ozi ma ọ bụ akparịta ụka. Ọ bụ nke a mere na agbụrụụ bụla dị ka Igbo sikwa hazie asụsụ ya ga-adịrị ya otu ahụ tụmadị ma ọ bụrụ na ọ na-egboro ha mkpa ga. Eleghị anya ọ bụ nke a mere sayensi asụsụ ji kwuo hooha na asụsụ niile dị n’ụwa haa nhatanha.
Anthony na Timothy (2014) n’aka nke ha kwuru na usoro okwu na-eleba anya ka e si etinyekọ mkpụrụokwu ọnụ iji mebepụta ahịrịokwu nwere nghọta ihe a chhọrọ. Ha gakwara n’ihu kwuo na isi usoro okwu bụ na mkpụrụokwu asụsụọ bụla na-abịa n’ụdị dị iche iche ma ọ bụ nkeji asụsụ dị ka aha, ngwaa, nkọwaaha, mbuụzọ dgz. N’akụkụ Mbah na Mbah (2014), ha kwuru na “ usoro okwu agabigala agba atọ n’ọmụmụ ya. Agba nke mbụ bụ inyochapụta ọdịdị usoro okwu. N’ebe a, a na-enyochapụta etu e si ekeji mpaghara asụsụ dị iche iche iji nweta ọdịdị okwu, ụdịdịya na ọrụ dị iche iche ọ na-arụ n’ọnọdụ dị iche iche. Agba nke abụọ bụ agba metụtara etu a ga-esi mebepụta iwu usoro okwu dị iche iche nke pụrụịchịkọta ụzọ dị mma a ga-esi kọwaa ndokọ nwere otuụdịdị nhazi”. Ha kwuru na mbọ agba a na-agba bụịhụ na ndokọ okwu niile yiri onwe ha ga-enwe otu iwu a ga-eji jikọta ha. Ọzọ kwa, agba a na-agba mbọịchọpụta etu a ga-esi kpokọta iwu dị n’asụsụ ma pịajilata ha ka ha pelata mpe. Sitekwa na nkọwa ọzọ Mbah na Mbah (2014:80) nyere gbasra usoro okwu, ha kwuru na “usoro okwu dị ka atụtụ na-ekwu na asụsụ ọ bụla nweriri ụzọ o si ahazi okwu n’ụtọ-asụsụ ya iji mepụta ahịrị okwu nwere echiche”. Ha kwuru na asụsụ dị iche iche ga-enwezu ntụ ọ ga-eji tupụta ụzọ ọ ga-esi gbaso iwu nke a. n’ịkọwada echiche ha, ha kwuru na Comrie (1981) na Jesperson (1924) amụọla ụzọ nhazi usoro okwu dị iche iche asụsụ nwegasịrị. nhazi usoro a gunyere ka nkeji asụsụ dị iche iche si eso onwe ha n’imebe ahịrịokwu nwere echhichhe. Imirikiti asụsụ nwere usoro isi ahịrị, ngwaa na nnara (INgNn) dị ka Bekee, Frenchi, Igbo na Jaman. Ebe usoro okwu asụsụ ndị ọzọ bụ isi ahịrị, nnara na ngwaa (INnNg), ngwaa, isi ahịrị, na nnara (NgINn).
N’ụtọasụsụ ọdịnaala, nkeji asụsụ bụ nkeji okwu ndị nwere njimara nghọta n’ụtọasụsụ yiri. Mkpụrụokwu ndị e kenyere n’òtù nkeji asụsụ na-egosipụta otu ụdị akparamagwa n’usoro okwu. Ha na-arụ otu ụdị ọrụ n’ime ahịrịokwu ndokọ nghọta n’ụtọasụsụ, oge ụfọdụ n’usoro mmebeokwu, na nke ahụ ha na-anabata mgbakwunye maka otu ụdị njimara. Ụfọdụ nkeji asụsụ a bụ: mkpọaha, ngwaa, nkọwaaha, nkwuwa, nnọchiaha, mbuụzọ, njikọ, ntimiwu.
Mbah na Mbah(2014:29) gbadoro ụkwụ n’atụtụ ọdịnaala kọwaa ihe nkeji asụsụ bụ, wee kwuo na atụtụ ọdịnaala gbadoro ụkwụ n’ịchọpụta nkeji asụsụ dị iche iche nakwa okwu dị n’asụsụ kwunyere na ya. Ha kọwara na atụtụ ọdinaala jiri ọdịdị na ọrụ okwu na-arụ n’ọnọdụ ya n’ọgbara okwu mee nkeji asụsụ. Ọ bụ nkewa atụtụọdịnaala mepụtara ka e ji akọwa asụsụ ruo oge ugbu a. Nkeji asụsụ pụtara ihe n’atụtụ a bụ aha, nnọchiaha, nkọwaaha, ngwaa, nkwuwa, mbuụzọ, njikọna olu mkpu. Site na nkọwa Mbah na Mbah nke gbadoro ụkwụ n’atụtụọdịnaala, a ga-aghọta na nkeji asụsụ bụ nkewapụta e kewapụtara mkpụrụokwu nke bụ na mkpụrụokwu bụ otu nkeji asụsụ dị ka ọnọdụ ha nọ, ọrụ ha na-arụ na ndokọ okwu ahụ si dị. Nkeji asụsụ bụkwa nchịkọta nke a chịkọrọ okwu dị ichhe iche dị ka ọdịdị ha si dị, ọrụ ha nakwa ọnọdụ ha nọ. Ihe nke a pụtara bụ na nkeji asụsụ abụghịnaanịotuụzọ ka e si akọwa ya maka na mkpụrụokwunwere ikeị bụotu nkeji asụsụn’otu oge dị ka ọdịdị ya ma ọ bụọrụọ na-arụ maọ bụọnọdụọ nọ, ma a bịa n’ebe ọzọ, mkpụrụokwu ahụ nwekwarsa ike ịrụọrụ dị iche ma ọ bụ zaa nkeji asụsụ dị iche; ya mere iji kọwaa nkeji asụsụ etu kwesịrị nakwa usoro ụtọasụsụ ọgbara ọhụụ, e kwesịrị na a ga-eleba anya n’ihe atọ ndị a:
Ọdịdị mkpụrụokwu ahụ
Ọrụ ya n’ebe ahụ.
N’ọdịdị ihe ọ pụtara bụna mkpụrụokwu ọ bụla nwere nkeji asụsụọ bụ dị ka nkewasị e kewasịrị mkpụrụokwu dị ka aha e nyere ya si dị ma ọ bụ ka Chi si kee ha, mana ọ na-abụ aha kwesịrị inye ihe dị ka ya ma ọ bụ n’ihe ọ dabara.
Ọrụ mkpụrụokwu bụ isi sekpu ntịna nkọwa mkpụrụokwu na nkeji asụsụ n’usoro ụtọasụsụọgbara ọhụụ. Ọ bụọnọdụ mkpụrụokwu na ndokọ na-ekenye mkpụrụokwu ọrụ ha na-arụ. Ima atụ: ụlọ m
Ụlọ nọ ọnọdụ isiahịrị, ebe ‘m’ nọ ọnọdụ mmeju nke rụrụ ọrụ ‘nnwe’ na-emejupụta ihe isiahịrị bụ na ndokọ.
N’ebe a, nwa nchọcha ga-eleba anya n’atụtụ dị iche iche metụtara nchọcha ma kọwapụta atụtụ dabara adaba iji kọwapụta nchọcha a. atụtụ nchọcha a niile bụ nke Mbah na Mbah(2014).
A bịa n’usoro okwu, e chepụtala ọtụtụ atụtụ gbasara ụzọ ka mma ma zuo ezuo a ga-eji na-akọwa asụsụ.Usoro ndị a gabigara agbatọ.Agba nke mbụ bụ inyochapụta ọdịdị usoro okwu. N’ebe a, a na-enyochapụta etu e si ekeji mpaghara asụsụ dị iche iche iji nweta ọdịdị okwu, ụdịdị ya naọrụ dị iche iche ọna-arụ n’ọnọdụ dị iche iche. Agba nke abụọ bụ agba metụtara etu a ga-esi mebepụta iwu usoro okwu dị iche iche nke pụrụịchịkọta ụzọ dị mma aga-esi kọwaa ndokọ nwere otu ọdịdị nhazi. Mbọ a na-agba bụ ịhụ na ndokọ okwu niile yiri onwe ha ga-enwe otu iwu a ga-eji jikọta ha. Ọzọ kwa, agba a na-agba mbọịchọpụta etu a ga-esi kpokọta iwu dị n’asụsụ ma pịajilata ha ka ha pelata mpe.Nke a ga-eme ka e nwee otu iwu jikọtara ọtụtụ iwu usoro okwu. Ya bụna atụtụ usoro okwu niile e nwere hidoro isi n’agba atọ ndị a. atụtụ usoro okwu e nwere gunyere: atụtụọdịnaala, atụtụ ndokọ ma ọ bụ ewumewu, atụtụụtọasụsụ mgbanwe na ụtọasụsụ izugbe.
Atụtụọdịnaala bụ atụtụ izizi e mebepụtara na-akọwa usoro okwu.O sitere na nsirihụ filọsọfi kọwaa asụsụ Griik. Ọ gbadoro ụkwụ n’ịchọpụta nkeji asụsụ dị iche iche okwu dị n’asụsụ kwụnyere na ya. O jiri ọdịdịnaọrụ okwu na-arụ n’ọnọdụ ya n’ọgbara okwu mee nkeji asụsụ. Ọ bụ nkewa o mepụtara ka e ji akọwa asụsụ ruo oge ugbu a. atụtụọzọ atụtụ ndokọ, atụtụ pụtara n’ihi ọghọm atụtụọdịnaala nwere. Ndị otu a nke onye isi ha bụ Ferdinard de Saussure kọchara atụtụọdịnaala etu o si na-esi agụgọnaọ bụ naanị nkeji abụọ ka ahịrị okwu ọ bụla kwesịrị inwe, ya bụ mpaghara omee na nke ihe o mere. Nke abụọ, ha ekwenyeghi n’ihe atụmatụ ọdịnaala kwuru na asụsụ ederede ka mkpa karịa nke asụrasụ. Ha gbadoro ụkwụ n’echemeche a, nke ha na-akọcha na asị na asụsụ bụ ndịnusoro.
Atụtụ ndokọ na-ekwu na iwu asụsụ bụụdọ ji ya bụ asụsụ. Ha nabatara na ahịrịokwu nwere nkeji abụọ; nkeji nke isi ahịrị/ omee na nkeji ngwaa. Mana ha siri agụgọ sịna, na mpaghara ọ bụla n’ime ha, nkeji ndabe mejupụtara ya. E nwere ike igbuda nkeji abụọ ndị a ka e nweta nkeji ndabe ndịa n’iji mejupụta nke a, ha malitere ụzọọhụrụ esi egbuda ndịna ahịrịokwu ka nke ọ bụla n’ime ha kwuru onwe ya. Usoro mgbuda ndokọ okwu ndị a ka a na-akpọ nkewa ndịna ewumewu ma ọ bụ ndokọ. Ha chepụtara usoro anọ e nwere ike iji kọwada ahịrịokwu ọ bụla e nyere. Usoro anọ ndị a na-ekwu otu ihe mana usoro ha ji eme nke a dị iche iche. Ha gunyere usoro akara nkịtị, usoro akara mbudo, usoro eserese nkịtịna usoro eserese nkọwa.
Atụtụọzọ e kwesịrị ka eleba anya na ya n’ebe o metụtara nchọcha a bụ atụtụụtọasụsụ mgbanwe. Atụtụ a na-akọwa naọ bụghi mgbe niile ka okwu niile na-enye ahịrịokwu echiche na-apụta ihe n’ihe a na-akpọpụta mgbe a na-ekwu okwu. Atụtụ dị n’atụtụụtọasụsụ mgbanwe dịọtụtụ, ndị gunyere: mbughari, mwepu, mtinye, mgbanweta. Ọ bụkwa ewumewu anọ na-egosipụta mgbanwe anọ ndị a. mgbe e wepụtasiri iwu mgbanwe dị iche iche, a chọpụtara na iwu ha dịọtụtụ, ọzọkwa ime nke a , agaghị egosipụta ihe nwa ọhụụ mma mgbe ọ matara asụsụ epum ya; e chere na ọ dị mkpa ịchọpụta iwu ga-achịkọta iwu mgbanwe ndị a niile. E chhere na e nwee iwu metụtara mbughari ọ ga-ejikọ iwu mgbanwe ndịọzọ niile. A kpọrọ iwu a ‘bugharị ihe ọ bụla ά’
Atụtụ nke ikpeazụ bụ atụtụụtọasụsụ izugbe nke gbanwere nsirihụ nchọcha ụtọasụsụ ma gbado anya n’etu asụsụ niile si wee yite onwe ha. Atụtụ a nwere agba abụọ, isi ihe atụtụ na-akọwa bụ maka iwu na ntụ metụtara etu asụsụ dị iche iche si ahazi okwu. Mbah na Mbah (2014)
Ọ bụ site n’atụtụ a metụtara iwu na ntụ ka e siri nweta atụtụ a kpọrọX-bar. Dị ka Wikipedia si kọwaa X-bar, ha kwuru na ọ bụ usoro mwube ọdịdị usoro okwu nke nwere nkwado abụọ kwụụrụ onwe ha nke mbụ bụ na nkebiokwu nwere ike inwe nkega nke siri na isi nkeji, ebe nke abụọ bụ na usoro nkega a gbasoro nwekwara ike ịbụkwa otuụdị wee nye otu nkebiokwu ndịọzọ dị ka ( mkp,Ng, Nkw, Mbz). Ihe ‘X-bar’ pụtara bụụzọ e si amata mkpụrụokwu nkeji na-eso isi nkeji n’usoro okwu asụsụọ bụla.N1 ka a gbanwere ọ bụrụzie N– , ọ bụ akara a dị n’elu N ka ana-akpọ ‘bar’. N’aka nke Mbah na Mbah (2014:18) a ga-ahụta na ha kọwara ‘X-bar’ dị ka atụtụ ewumewu gbasara nhazi okwu nye mmebe nkeji ahịrịokwu nke a chịkọtara n’ọdịdị usoro nkeji ahịrị dị ka:
I1 – isiokwu na nkowa
I11 – isiokwu, nkọwa na mmeju nkọwa
N’ebe a, a chọpụtara ọtụtụ atụtụ nchọcha dị iche iche wee hụta na ọ bụ naanị site n’atụtụ mgbanwe ọ kachasị bughari, x-bar na ndokọ nke metụtara eserese nkọwa ga-enye aka n’ịkọwapụta isi nchọcha a n’ụzọọ ga-esi doo anya.
Nchọcha ndị e meerela n’isiokwu
N’ebe a, nwa nchọcha lebara anya na nchọcha e meerela banyere isiokwu ọ na-eme nchọcha na ya wee họta na ọ bụ na nkewasị nkeji ngwaa Igbo n’ebe ọ gbasatara mmeju ya ka ọtụtụ ndị nchọcha megoro nchọcha na ya. A bịa na nkewasi nkeji ngwaa Igbo, achọpụtara na Nwachukwu (1987:17) kewara ngwaa Igbo site na mmeju ha dị ka:
Ngwaa mmeju ndabe( Bound Verb Complement (BVC): N’ebe a o kwuru na mmeju ngwaa ndabe (BVC) bụ urughuru ngwaa nke na e site ma na-adị abe na ngwaa n’onwe ya. Ọ bụrụna mmebere ngwaa adịghị, o nweghị ike ịkwụrụ onwe ya. Ngwaa mmeju ndabe bụ akara onye nke nwere ike iji ngwaa Igbo pụta mgbe ọ bụla e nwere mmasị ikwusi ihe ike. ịma atụ: Aga m ekwu ezi okwu ekwu.
UdemmadụnaỌkpalike (2014:106) n’ịkọwada echiche Nwachukwu kọwara na nkọwa ngwaa a kọwara n’ọmụma atụ dị n’elu dị ka nkọwaaha ngwaa maka na ha na-arụ ọrụ nkọwaaha na-arụ n’asụsụ ọzọ. BVC bụ mmewere iwu ụdị ngwaa ‘-ru’. ịma atụ: Ọjị toro eto
Ha gara n’ihu kwuo na e nweghịụzọọzọ a ga-esi kọwapụta mpụtara nkọwaaha a ma ọ bụrụ na-ejighị BVC ma ọ bụ mmeju mkpọaha kwesịrị . Myiri agwa usoro okwu dị n’etiti BVCna IC (mmeju nsinachi) ka a makọrọ na myiri nghọta echiche ha. BVC bụ mmewere onye, ebe IC bụ mpụtara nzi ma ọ dịghị n’ime ha abụọ bụ aha.
Ngwaa mmeju nsinachi (Inherent Complement verbs (ICVs): Ngwaa mmeju nsinachi bụ nke iwu ngụpụta bụ iwuriri na mpụtara na-ezi mmeju mkpọaha ga-eso. ịma atụ ICVs gunyere
ICVs na-apụtakarị n’oge niile nakwa n’ụdịọ bụla nke mpụtara ha na-ezipụta mmeju mkpọaha, nke a na-akọwa na nsinachi.
Ngwaa mmeju nkeji mbuụzọ (Prepositional Phrase Complement): Ọ bụ eziokwu na e kejisiri ụfọdụ ngwaa ma ka nkeji mbuụzọ mana e nwere ọtụtụụfọdụ ngwaa nke na n’agbanyeghị na ọnọdụ nkeji mbuụzọ site n’echiche e chere ka ha nwee. Ọzọ kwa, nkeji mbuụzọ na-amịpụta usoro mịrị mkpụrụ n’ịkọwa mpụtara nkwuwa. ịma atụ: Ogu bi n’Aba.
Ngwaa mmeju nnabiga (Ergative Complement Verbs): Ngwaa mmeju nnabiga dị ka UdemmadụnaỌkpalike (2014) si kọwaa na edughie edughie maka na o nweghịụdị ngwaa a n’Igbo ma ọ bụ nke asụsụ Igbo ji bụrụ nnabiga. Mana nnabiga na-emetụta ndịnọrụ na-ekenye njirimara asụsụ. Igbo nwere ikeị bụ naanị asụsụ nnara ebe ọ bụ na ngwaa Igbo na-ekenye omee ọrụ isi ahịrị/ aha nsịna ngwaa, ebe nnarahụhụ ya bụ ndịnọrụ nnara. Emenanjọ (2005:479) kwadoro ihe Nwachukwu (1987) kwuru. Nwachukwu kwuru na ngwaa Igbo kwesịrị ka ekenye ha site na mmeju ha. Ihe dị iche n’echiche ọka mmụta abụọ a bụna Nwachukwu gbakwunyere na ụfọdụ ngwaa nwere ike ịbụ mmennara ebe ndịọzọ bụ ebū nnara iji maa atụ ngwaa ‘gbu’ bụ mmennara na: Ugoo gburu oke.
Mana ngwaa ‘ri’ nwere ike I nwere mmeju nsinachi dị ka –nri, -mperi dgz dị ka na:
Ifeji riri mperi
Na nchọkọta ntulegharị agụmagụ nchụcha a, e lebara anya n’ọtụtụ agụmagụ e dogoroola gbasara mkpụrụokwu ndị nwa nchọcha chere bara ezigbo uru banyere nchọcha a ndị gunyere usoro okwu, nkeji asụsụ maka na tupu e nwee ike imete nchọcha a nke ọma o kwesịrị ka a mata ka asụsụ ọ bụla si ahazi okwu na ndokọ okwu nakwa ihe ndị kpatara ụdị ndokọ ahụ etu ọ ga-esi gboro ha mkpa. E lebakwara anya n’atụtụ dị iche iche dị ka atụtụ ụtọasụsụ ọdịnaala, ndokọ okwu, mgbanwe, ụtọasụsụ izugbe, ka e nwe ike ị mata nke ga-adaba adaba iji kọwada isiokwu nchọcha a.
Usoro a gbasoro mee nchọcha a bụ usoro nkọwa.Nwa nchọcha gbasoro usoro nkọwa mee nchọcha a site n’izipụta ma kọwaa usoro okwu nkeji asụsụ mmeju n’ebe ọ gbasatara asụsụ Igbo.Ọ bụ ihe ndị a bụ nkeji asụsụ n’Igbo ka e jiri mee nchọcha a. n’ihi ya , mmadụ atọ bụ ndị Igbo mara ma na-amụkwa asụsụ Igbo ọ kachasị n’ebe o metụtara ụtọasụsụ Igbo bụ ndị e jiri mee nchọcha a. Ebe a gbakwasara anya bụ ebe dị iche iche e nwere mmeju n’asụsụ Igbo. Mmadụ atọ a bụỤzọma, Chisom ebe onye nke atọ bu ọka mmụta n’asụsụIgbo , onye bụọka mmụta Udemmadụ, ndị na-agụ mana arụkwa ọrụ na mahadum Nnamdi Azikiwe, Ọka Anambara Steeti. Nwa nchọcha gukwara ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche ma ndị o nwetere n’ ọba akwụkwọ ma ndị sitere nakọmpụta.
A ga-enyocha isiokwu e mere nchọcha na ya nke a gbadoro ụkwụ n’echiche ihe mmeju pụtara nke Mbah na Mbah kwuru na ma nnara ma mmeju, ha niile bụ mmeju. Na nchọcha a, akọwapụtara isiokwu site n’atụtụ ndokọ ewumewu eserese nkọwa, atụtụ mgbanwe nke mbugharị nakwa x-bar nke ụtọasụsụ izugbe kọwapụta ya. Nke a bụ maka na e nwere ọtụtụ ebe na nkọwapụta isiokwu a agaghị anabatali X-bar ma ọ bụ bugharị ma ọ bụ eserese nkọwa kama otu n’ime ha n’ebe dị iche iche. Ọ bụkwa echiche Mbah na Mbah (2014) maka atụtụ ma ọ bụ ewumewu gbasara nchọcha ka nwa nchọcha ji kọwapụta isiokwu ya. N’ebe o metụtara eserese nkọwa, ọ bụ ndebiri ndị a ka e ji rụọọrụ:
Nkeji mmeju – Nmmj- A
Nkeji mkpọaha – Nmkp
Nkeji ngwaa – Nngw
Nkeji nkowa – Nnkọ
Nkeji mbuụzọ – Nmbz
Nkeji nkwuwa – Nnkw
Mmeju – mmj
Mkpọaha – mkp
Nkọwa – nkọ
Mbuụzọ – mbz
Ngwaa – ngw
Nrụaka – nrk
4.1 Mkpụrụokwu ndị na-esochi ngwaa n’azụ nọọnọdụ nnara mana ha abụghị nnara kpọm kwem kama nnapụta nnara site n’okwu ọzọ na-eso ha n’azụ. Mana e nwere ha niile ka mmeju n’ihi na ha tinyekọrọ aka zipụta echiche zuru oke nye ndokọ okwu aha nọ na ya.
Nna m zụtara m uwe
N’ọmụma atụ a, a ga-ahụna ‘m’ nke abụọ sochiri ngwaa ‘zụtara’ n’azụ mana ihe ọ nọọnọdụ ebe ahụ bụ nnapụta nke ‘uwe’ mejupụtara dị ka nnara. Mana ha ‘m’ na ‘uwe’ bụcha mmeju nye ahịrịokwu ezipụta
‘Ọjọọ’ dị ka nnara bụ ọdịdị nkọwaha ka ọ bụ nke mejupụtara echiche ndokọ okwu a nke ọdịdị ‘agwaa’ bụ mkpọaha mana ọ nọ ọnọdụ nnapụta.
re N’ebe a ‘Chisara’ mejuru ‘akwụkwọ’ iji zipụta echiche zuru oke
Chinedu zuru ego Nkọlị
Ọdịdị‘Nkọlị‘ bụ mkpọaha, nke nọọnọdụ nnara, ebe ‘ego’ nọọnọdụ nnwe nnapụta nke ọdịdị ya bụkwa mkpọaha, ha jikọrọ aka dị ka nnapụta na nnara mejupụta echiche dị na ndokọ okwu dị n’elu
Ha ga-ete ofe ete
N’ọmụma atụ a, ‘o’ nọọnọdụ isiahịrị nke rụrụọrụ mmeju nye ngwaa maka na echiche ndokọ okwu a tadoro n’elu isiahịrị nke kọwapụtara onye kpara agwaa ngwaa maka na e wepu ‘o’ ihe a ga-enwezi bụ ‘hichapụrụ ochhe nke e nweghị echiche zuru oke.
Otu ihe ahụ mere n’ọmụma atụ nke mbụ mere na nke abụọ.
N’ọmụma atụ nke a, a ga-ahụna ‘na’ nke ọdịdị ya bụmbuụzọ nọọnọdụ isiahịrị na ndokọ okwu a mana ọ bụọrụ mmeju ka ọ rụrụ nke tinyekwuru nghọta n’ihe a na-ekwu maka ya nke bụ maka na ‘ọ bịaghị‘. Nke a bụ site na bugharịa ὰ nwetere mgbanwe nye mpụtara echiche ahịrịokwu ahụ.
Otu ihe mere n’ọmụma atụ ‘iii’ bụkwa ihe mere na ‘iv’.
N’ebe a ‘mgbe’ nke ọdịdị ya bụ nkwuwa nọọnọdụ isiahịrị nke rụrụọrụ mmeju nye ngwaa maka na o mejupụtara echiche dị na ndokọ okwu ahụ.
Na nke a, ‘etu’ rụrụ ọrụ mmeju nye ngwaa ndokọ okwu a, mana ọnọdụ ya bụ ọnọdụ isiahịrị nke ọdịdị ya bụ nkwuwa keagwaa.
Nzipụta ihe abụghị mmeju n’ogo ndokọ mkpụrụokwu nakwa nke bụ mmeju n’ogo ndokọ mkpụrụokwu.
Ọmụma atụ ndị abụghị mmeju n’ogo mkpụrụokwu
Ugbene ọcha ahụ
N’ọmụma atụ ndị a, nrụaka ‘ahụ’ na ‘a’ arụghịọrụ mmeju n’agbanyeghịna ha nọọnọdụ mmeju n’usoro ndokọ dị ka ọtụtụ ndị si kọwaa. Ọ bụrụ ka akọwa ha dị ka mmeju site n’usoro ndokọ, nke mbụ bụ na ha agbasoghị usoro iwu na ntụ ndokọ nke bụ (IsNgwNn) nke merenu na nchhọchha a ekwunye n’echiche ndị na-ekwu na ‘ahụ’ na ‘a’ bụ mmeju n’ebe ndokọ ogo mkpụrụokwu a nọ “Ada ọma ahụ” kama a ga-asị na ihe ‘ahụ’ ‘na’ rụrụ na ndokọ mkpụrụokwu a bụ mgbatị nkọwa nye isiokwu mkpụrụokwu nke na-agbasobe usoro ndokọụtọasụsụ izugbe bụ X-bar, ihe ‘ahụ’ na-ezipụta nọ nzi (specifier) nke bụ XII.
Ọmụma atụụfọdụ ndokọ n’ogo mkpụrụokwu
‘ụlọ’ n’ebe a bụ isiokwu nke ọdịdị ya mkpọaha, ebe ‘m’ dị ka mmeju ya bụkwa mkpọaha n’ọdịdị nke nọọnọdụ mmeju nakwa nnwe. ‘M’ mejupụtara echiche dị n’isiokwu.
‘Ego’ na ‘Ibe’ bụ mkpọaha n’ọdịdị, ebe Ego nọọnọdụ isiahịrị, ‘Ibe’ anọdụọnọdụ mmeju nakwa nnwe nke mejupụtara echiche isiahịrị ‘Ego’
‘Ugbene’ bụ mkpọaha n’ọdịdị nọọnọdụ isiahịrị ebe ‘ọcha bụ nkọwaaha nke nọọnọdụ mmeju tinyekwuru ngọta n’echiche isiahịrị ‘ugbene’. X0– ugbene, XI– ọchha
‘Mmanya’ bụ mkpọaha n’ọdịdị nke nọọnọdụ isiahịrị, ebe ‘ụtọ’ bụ aha nkọwa n’ọdịdị ma na arụ ọrụ mmeju nye ‘mmanya’. X0– mmanya, XI– ụtọ
Otu ihe ahụ mere n’ọmụma atụ ‘d’ bụkwa ihe mere na nke a. X0 –Ama, XI– obosara.
E gosipụtara ebe emegorola nchọcha banyere isiokwu nchọcha a wee hụta na ọ bụ o metụtara nkewasị ngwaa ka aka zipụta ihe e nwere ike ịkpọ nkeji mmeju n’asụsụ Igbo. Mana nwa nchọcha chọpụtakwara ebe ọzọ a na-enwe mmeju n’asụsụ Igbo wee chọpụta mkpụrụokwu ndị na-esochi ngwaa n’azụ nọ ọnọdụ nnara mana ha abụghị nnara kpọm kwem kama nnapụta nnara site n’okwu ọzọ na-eso ha n’azụ ma rụrụ ọrụ mmeju. Ọzọ kwa , nwa nchọcha chọpụtakwara mkpụrụokwu ndị nọ ọnọdụ isiahịrị bụ mmeju nke ngwaa anaghị agacha tupu enwete ya dị ka iwu na ntụ ndokọ okwu Igbo si eme (IsNgwNn). Ebe nchọpụta nke ikpeazụ bụ nzipụta ihe abụghị mmeju n’ogo ndokọ mkpụrụokwu nke ọtụtụ ndị na-eche na ha bụ mmeju ma zipụtakwa nke bụ mmeju n’ogo ndokọ mkpụrụokwu.
Na mmechi, ọ dị mkpa na tupu mmadụ ọ bụla akọba ma ọ bụ chọọ ị mata banyere asuụsụ ọbụla, onye ahụ ga-agba mbọ ị mata usoro asụsụ ahụ si edekọba mkpụrụokwu ha, iwu na ntụ ha na-agbaso n’ogo ahịrịokwu ma ọ bụ nkeji ahịrịokwu ma gharakwa iji usoro asụsụ ndị ọzọ na-akọwa asụsụ ọ na-achọ ịmụta ma ọ bụ amụta maka na asụsụ ndị bụ ọdịbendị nke na-enye nghọta nke echiche ndụ na usoro obibi ndụ ha; ma malitekwa mgbe agbụrụ ha malitere ọ kachasị asụsụ Igbo.
Cook, V.J & Nweson, M. (2009). Chomsky’s Universal Grammar: An Introduction (mbgh 3). Malden: Blackwell Publishing.
Udemmadụ, T. N. &Ọkpalike, B.I. (2013). Igbo VP in X-bar Syntax. N’ Anedo, A.O ^& T.N, Udemmadụ (ohz) Igbo scholars journal. (vọl; 1)
Mgbasa Ozi Ọha dịka Ngwa E Ji Akuzi Asụsụ Obodo na Naịjirịa
Aruah, Virginus Onyebuchi ¹ Ngalaba Lingwistiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa Ndị Ọzọ Mahadum Naịjirịa, Nsụka onyebuchi.aruah@unn.edu.ng 08039482647
Eze Jacinta Ukamaka ² Ngalaba Lingwistiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa Ndị Ọzọ Mahadum Naịjirịa, Nsụka eze.ukamaka@unn.edu.ng 08069088560
Mamah Juliana Ginika ³ Ngalaba Lingwistiks, Igbo na Asụsụ Naịjirịa Ndị Ọzọ Mahadum Naịjirịa, Nsụka juliana.mamah@unn.edu.ng 08063932170
Akwụkwọ nchọcha a na-enyocha mgbaza ozi ọha dịka ngwa e ji akuzi asụsụ obodo na Naịjirịa. Mbunuche nchọcha a bụ inyocha mkpa ọ dị iji mgbasa ozi ọha kuzie ma mụọ asụsụ obodo n’ime Naịjirịa, itule oke na ọrụ dịrị ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ iji mgbasa ozi ọha rụọ ọrụ dịka ngwa ọmụmụ na igosi uru na ọghọm ndị ọmụụ na-enwe mgbe e ji mgbasa ozi ọha akuzi ha ihe. Nnweta njatule bụ nke ewekọtara site na nsiripụta nke nsoje. Nchọcha a gbadoro ụkwụ n’usoro nchọcha nkọwa. Nchọpụta nchọcha a gosipụtara na ndị nkuzi asụsụ obodo Naịjirịa ga-eji usoro mgbasa ozi ọha wee kuzie asụsụ obodo Naịjirịa. Nke a ga-adị ire mgbe ndị nkuzi haziri usoro nkuzi ha n’ụdị a chọrọ ka ọ bụrụ ihe mgbado ụkwụ maọbụ ntụziaka akpamụbụbọ mgbe nkuzi nsinikuku malitere gbasara asụsụ obodo. Ụmụ akwụkwọ bụ ndị ga-arụ ọrụ akpamụbụbọ mgbe amụmamụ nsinikuku malitere kpọmkwem. Nchọcha a gosikwara na mgbasa ozi nwere ụfọdụ ọghọm n’ebe ndị ọmụụ nọ mana uru ndị ọmụụ na-enweta na ya abụghị nke a ga-eleda anya.
Ọkpụrụkpụ okwu: Mgbasa ozi, nkuzi, asụsụ obodo, mgbasa ozi ọha, amụmamụ nsinikuku, Naịjirịa
This paper examines social media as tools for teaching i ndịgenous languages in Nigeria. The objectives of this study are to investigate the possibility of using social media in teaching and learning of i ndịgenous languages in Nigeria, to examine the role of teachers and learners in the use of social media as learning tools and to find otu the positive and negative impacts of social media on the learners. Data for this study are gathered through secondary sources and the study employs descriptive approach in its analysis. The fi ndịngs of the study reveal that i ndịgenous language teachers can effectively use social media platform to teach i ndịgenous languages. These teachers can achieve these by designing the instruction and playing the role of interaction facilitators when the online courses begin while the students should engage in online tasks-based discussion. The study also reveals that though there are some negative impacts of the social media on the user, the positive impacts cannot be underestimated.
Key concepts: Media, teaching, i ndịgenous language, social media, online pedagogy, Nigeria
Asụsụ bụ ngwa nkwalite kachasi mkpa na ndụ mmadụ. Nke a mere Daniel Webster jiri kwuo n’ime Ọmachonu (2011) na ọ bụrụ na akaraka na ike niile a bụrụ nke a napụrụ ya site n’ụfọdụ ihe mgbochi nke nduzi, na ya ga-enwe ike ichekwa naanị otu ihe n’ime ha. N’egbughi oge na ya ga-echekwa ikike nke e ji na-ekwu okwu maka na site n’ikwu okwu ka ya ga-eji naghachite ihe niile ndị ahụ nke a napụrụ ya. Asụsụ bụ ngwa omenala n’ebe ndị mmadụ nọ n’ọha obodo. Leenu anya ka obodo na-enweghi asụsụ ga-adị.
Kedu ka obodo dịka Naịjirịa bụ ndị ejighi akuzi asụsụ obodo ha n’ụlọ akwụkwọ kpọ mkpa ga-adị. Ụmụ akwụkwọ n’onwe ha na-ahụta asụsụ obodo ndị Naịjirịa dịka asụsụ na-etozughi etozu ka akuzie ha n’ụlọ akwụkwọ ndị sekọndịrị nakwa n’ogo ụlọ akwụkwọ ndị dị elu. Asụsụ obodo Naịjirịa ka a na-ahụta dịka ihe mgbe oche, ihe tara nchara, na ihe enweghi uru ọ ga-abara ụmụ akwụkwọ ndagba ọhụrụ. Nke a bụ ezigbo nsogbu nye asụsụ ala Naịjirịa n’ihi na o nwere ike ime ka asụsụ ala anyị nwụọ kpamkpam.
N’ihi ọnọdụ ọjọọ a dakwasara nkuzi asụsụ obodo Naịjirịa n’etiti ụmụ akwụkwọ nime klaasị n’ụwa taa mere ka e jiri ngwa teknọlọjị agbara ọhụrụ bụ nke nwere ike ikwalite mkpakọrịta na njikọta mgbasa ozi ọha ọnụ n’ikuzi asụsụ ala Naịjirịa. Mgbasa ozi ọha bụ nkebiokwu na-akọwa ka nrụ ọrụ weebụ na ngwa teknọlọjị ndị ọzọ si ejikọta ọtụtụ mmadụ ọnụ ka ha nwe ike kpa ụbụbọ maọbụ zirita onwe ha ozi. Nke a bụ mkpanaka nrụ ọrụ weebụ nke mba ụwa niile bụ nke nwere ọdịdị ndị a: ọgbakọ bụlọgụ, ngwa ịkọrị, bụlọgụ nta ndị ọzọ, ngosikọrịta foto, ududo nzụkọrita ahịa, ịgba cha cha keọha na ududo keọha. Ududo keọha gụnyere: ihu akwụkwọ teknọlọjị (facebook), mbipụta okwu (word press), ndị na-ede bụlọgụ, insitagramụ, tiwita, wasapụ na ọtụtụ ndị ọzọ. n’ụwa taa, ihu akwụkwọ teknọnọjị nwere nnukwu ọrụ ọ na-arụ na ndụ mmadụ. ọ na-abawanye dịka ngwa mgasa ozi nke dị mkpa n’ọnọdụ agụmakwụkwọ. N’ezie, mgbasa ozi ọha nwere ike ịrụ ọrụ pụrụ iche n’ikuzi nakwa n’ịmụ asụsụ ala Naịjirịa.
Mbunuche nchọcha a bụ ịchọpụta ka mgbasa ozi ọha ga-esi nye aka n’ọmụmụ na nkuzi asụsụ obodo na Naịjirịa. Nchọcha a gakwara n’ihu ma nyochaa ka a ga-esi e ji mgbasa ozi ọha kuzie asụsụ obodo n’ime Naịjirịa. Nchọcha a ga-elebe anya n’ihe ndị a kpọmkwem:
Inyocha ohere dị ,’iji mgbasa ozi ọha wee kuzie ma mụọ asụsụ obodo ndị dị n’ime Naịjirịa.
Itule ọrụ dịrị ndị nkuzi nanke dịrị ndị ọmụụ mgbe e ji mgbasa ozi ọha arụ ọrụ dịka ngwa ọmụmụ.
Ịchọpụta mmana adịghị mma ndị ọmụụ na-enweta site n’iji mgbasa ozi ọha mụọ ihe na klaasị.
N’iji nweta mbunobi nchọcha a kpọmkwem, ajụjụ nchọcha ndị a ka a ga-eleba anya:
Kedu ka a ga-esi eji mgbasa ozi ọha wee kuzie ma mụọ asụsụ obodo Naịjirịa?
Olee ọrụ dịrị ndị nkuzi na ndị ọmụụ n’iji mgbasa ozi ọha mere ngwa ọmụmụ?
Gịnị bụ mma na adịghị mma mgbasa ozi ọha na-eweta ebe ndị ọmụụ nọ?
Nchọcha a ga-abụ ihe mmepe anya n’ebe ndị nne na nna, ndị nkuzi na ndị nlekọta nọ iji wee zie ụmụ ha uru dị n’iji usoro mgbasa ozi ọha wee mụọ ihe. ụmụ akwụkwọ n’onwe ha ga-esonye n’ihe a na-eme na mba ụwa dum gbasara ọmụmụ asụsụ obodo n’oge ugbu a. usoro ọmụmụ a ga –emepe anya ndị Naịjirịa ka ha mata na ọ bụghị naanị ọghọm maọbụ ihe adịghị mma ka a na-enweta n’ụdị nkuzi e ji mgbasa ozi ọha akuzi. Nchọcha a ga-abụ ebe mgbado ụkwụ nye onye maọbụ ndị nchọchaọ bụla ga-eme nchọcha yiri nke a.
Ọ bụ eziokwu na-emeela ọtụtụ nchọcha gbasara mgbasa ozi ọha dịka nwa nkuzi mana site n’amamihe ndị nchọcha a na o nwebeghi nchọcha emereela gbasara iji mgasa ozi ọha wee kuzie ma mụọ asụsụ ala Naịjirịa. Asụsụ ala Naịjirịa gụnyere asụsụ niile e ji mara ndị Naịjirịa ma bụrụ asụsụ epum ha.
Ntulegharị agụmagụ e mere maka isiokwu a dabara n’ụzọ atọ ndị a: atụtụ n’isiokwu, atụtụ na nchọcha na nchịkọta.
N’ụwa taa, usoro mgbasa ozi ọha jupụtara n’ọtụtụ ebe mana ọrụ e ji ya arụ dị iche iche site n’otu ebe gaa n’ebe ọzọ. E nwere ike ịhụta ya ka ngwa akpụrakpụ nke na-akwalite nkuzi na ọmụmụ ihe. Kaplan na Haelein (2010) kọwara mgbasa ozi ọha dịka otu ngwa ududo bụ nke nwere ntọala echiche ya na weebụ 2.0 ma na-enyekwa aka ịkpụ na mgbanwekọrịta echiche ndị njiarụ ọrụ. Kalasi (2014) na-ekwu na mmetuta nke mgbasa ozi ọha na nkuzi na ọmụmụ ihe gosipụtara onwe ya n’usoro nkuzi na ọmụmụ ihe, oke na ọrụ dịrị ndị nkuzi na ndị ọmụụ nakwa ọnọdụ mmetuta na àgwà ndị ọmụụ. Schmidt na Brown n’ime Kalasi (2014) kpebiri n’ụzọ kachasị mma iji usor mgbasa ozi ọha wee kuzie ihe bụ site n’ịgwakọrịta usoro nkuzi n’ikuku na nke ọdịnala ọnụ n’ime klaasị mgbe a na- akuzi ihe. Ha kwenyere n’ụdị ngwakọrịta a na-enye aka ịhazi ebe nkuzi na ọmụmụ ihe tinyere ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ inwe ezi mmụta sitere na teknọlọjị ọgbara ọhụrụ. Site n’echiche ha , e kwesịrị ikwalite mma dị n’ọmụmụ keahụrụnanya site ,’inyocha usoro nkuzi; itule usoro kacha mma ndị ọmụụ ga-agbaso; inwe ezi mmụta gbasara usoro nkuzi n’ikuku na nke nkuzi ọdịnala nakwa ịhọrọ ngwa nkuzi dabara adaba maka inweta ezi ọmụmụ pụrụ iche. A ga-esikwa na ya wee kpughepu ma mejupụta atụmatụ nkuzi ma megharịa atụmatụ usoro nkuzi n’ikuku.
Site n’ọnọdụ mgbasa ozi ọha maka ezi ọmụmụ, Moody (2010) na-ekwu na ọ bụrụ na e ji mgbasa ozi ọha akụzi ihe, na a ga-enwe ohere nkọwami onwe, mmekọta, ọmụmụ ihe, mkpughepu ihe zoro ezo na ọmụmụ ihe ga-abawanye. Nzaghachi nke ndị nkuzi, ikesa ọmụmụ ihe, nrite ihe a tụrụ anya n’aka ụmụ akwụkwọ, ndịiche, ikesa usoro nkuzi, nchekwa amamihe na usoroedide ga-abawanye. Dịka Wright (2010) siri kwuo na ezi mgbasa ozi ọha na-eme ka obodo dị mma. O kwukwara na mgbe e jiri mgbasa ozi ọha wee na-amụ ihe maọbụ eme nchọcha na o na-enyere ndị nchọcha aka ịma onwe ha site n’ịbịkọta ọnụ n’ọnya nwa ududo. Ọ bụghị naanị ka abịakọta ọnụ ka ọ na-eweta, ọ na-eme ka ha nweta ndị enyi, ichekwaba mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịmụta ihe n’aka ndị enyi nakwa iwube ogbe ọhụrụ n’ikuku. Kalasi kwadosiri okwu a ike site n’ikwu okwu nke ya n’ụdị ọnọdụ a na-ejikọka ụmụ akwụkwọ na ngalaba na ngalaba ma wube ọkachamara ududo ndị ga-ejiko ụmụ akwụkwọ n’otu ogbe bụ nke karịrị ọnụmara klaasị.
Otu ihe doro anya n’ihe doro anya n’ihe isi ike a na-enweta n’ọnọdụ mbara ezi mgbasa ozi ọhụrụ mere ka Paulsen n’ime Paulsen na Tække (2013) gosipụtara ihe ndọghachi azụ ndị nke na-apụtachaghị ihe a na-enwe na klaasị. Ụdị ọnọdụ a mere ka-enwe ihe ndọlazụ mgbe e webatara isiokwu nke na-adị ịghị na ndịnusoro nkuzi bụ nke agaghị ekwe ụmụ akwụkwọ nghọta na klaasị. O kwukwara na ụdị ndọlazụ ọzọ ụmụ akwụkwọ na-enwe bụ ndọlazụ nra mmadụ ahụ bụ nke a na-enweta mgbe e ji ngwaa teknọnọjị ọgbarọhụ akuzi ihe na klaasị. Iji ngwa teknọlọjị ọgbarọhụ wee kuzie ndị a maghị ka e si eji ya arụ ọrụ bụ ịmafe aka n’ụdị usoro nkuzi omenala e ji akuzi ihe na klaasị n’oge mbụ. Kalasi gosipụtara na mgbasa ozi ọha na-eme ka ndị nkuzi si n’iwebata isiokwu nkuzi ma mafe aka n’ịkọwa isiokwu a ka ọ bụrụ nka ọmụmụ. Nka ọmụmụ gbadoro ụkwụ n’usoro e ji akuzi ma na-amụ ihe na klaasị.
Site n’ịkwalite echiche ụmụ akwụkwọ n’ebe mgbasa ozi dị, Paulsen na Takke tụrụ aro na a ga-ebu ụzọ hiwe isin’ime ka ụmụ akwụkwọ mata ọrụ dịrị ha mgbe a na-akuzi ihe ma lebekwa anya n’ihe ndọlazụ ha na-enwe n’ihi ọtụtụ ọrụ ha ji n’aka n’otu oge. Nke abụọ, a ga-akwalite mmụọ ụmụ akwụkwọ ka nwe ike chọpụta ka a ga-esi e ji mgbasa ozi dijitalụ wee kuzie ihe, jikọta ọtụtụ mmadụ ọnụ, kpa ụbụbọ, nwe nchekwa ma nwe echiche mkpọghachi azụ ihe ndị a kuziri ha.
Atụtụ na nchọcha
Mpaghara ntulegharị nchọcha a na-enyocha nchọcha ndị e mereela gbasara iji mgbasa ozi ọha wee kuzie ma mụọ ihe. Ụfọdụ ndị nchọcha emeela nchọcha yitere ihe ọmụmụ a bụ nke a tulegharịrị nchọpụta nchọcha ha n’okpuru ebe a ma tinyekwa nchọpụta nchọcha a n’okpuru.
Mgbe a na-ekwu maka mgbasa ozi ọha, a ga-arụtụ ihe gbasara ụdọ nzikọrịta ozi (network) na ngalaba ya dị iche iche aka. Ụdọ nzikọrịta ozi na-ejikọta ọtụtụ mmadụ ọnụ na mba ụwa dum. Ihe ana-akpọ nke a bụ ụdọ nzikọrịta ozi ọha. Nke a mere Kalasi (2014) jiri mee nchọcha ya gbasara mmetuta ụdọ nzikọrịta ozi ọha na iji ya kuzie ma mụọ ihe n’oge agba ọhụrụ a. Nchọcha o mere chọpụtara na ụmụ akwụkwọ maọbụ na-etolite etolite na-eji nga teknọlọjị ọgbara ọhụrụ wee na-arụ ọrụ mmụta nke aka ha. Ha na-ejikwa ya akpa ụbụbọ n’etiti ndị ọgbọ ha nakwa iji ya kọwa aro nke ha tụpụtara. Kalasi tụrụ aro sị na ndị ọkachamara na-eji ngwa teknọlọjị ogbara ọhụrụ na-arụpụtakaịrị ọrụ akamkpa bara uru site n’ịmata nka dị na kọmpụta nke ọma. Paulsen na Tække (2013) siri agụgọ na ngwa mgbasa ozi ọhụrụ na-ebute ọtụtụ ihe ndọlazụ ọ kachasị mgbe a na-amụ ihe n’ụlọ akwụkwọ. Nke a ga –eweta ọtụtụ ihe nrite bara uru ma ọ bụrụ na ndị nkuzi achịkọlata ngwa teknọlọjị ndị a ka ha gbasa usoro dị mma n’ikuzi ihe na klaasị. Mgbe a na-akọwa ọrụ dịrị ndị nkuzi n’ịgbaso usoro nkuzi n’ikuku, Dunran na Bernett n’ime kalasi (2014) chọpụtara na e nwere ọrụ ndị karịrị ịgbazi ụzọ na igosi ka usoro nkuzi n’ikuku ga-esi amịta mkpụrụ ọma. ndị nkuzi ga-ahazi ụfọdụ mgbanwe na-abata n’oge a na-akuzi nkuzi nakwa ihazi ọrụ e ji edozi ihe ndọghachi azụ a na-enwe mgbe a na-akuziri ụmụ akwụkwọ ihe. Nchọcha ọzọ a tulegharịrị bụ nke Alfraki na Alharthy (2014) bụ nke gosiri na ọmụmụ na nghọta asụsụ obodo dị mkpa ka-enwe ngwa nkuzi zuru ezu nke ga-enye aka n’inweta ezi ọmụmụ dị mma. Na mgbakwụnye, usoro ọmụmụ ihe nke a enweghi njedebe ma bụrụ ihe ntule nke na-anaghị agwụ agwụ bụ usoro ọmụmụ ihe nke ududo ọha. Mgbasa ozi ọha na-enye aka ka enwe ohere ịmụta asụsụ ma mafe aka n’ọnọdụ ọmụmụ ihe nke a na-amụ na klaasị.
N’ezie, usoro nkuzi a na-enyere ụmụ akwụkwọ aka n’ebe ọ dị ukwuu ịmụta asụsụ ala ha ma na ọ ga ka dị ire ma ọ bụrụ na ndị nkuzi n’onwe ga-agbalị hazie ma họrọ ngwa nkuzi nke ga-amasị ndị ọmụụ (Thurairaj na Roy, 2012). Site n’ịgbaso okwu a dị n’elu nke a, ihu akwụkwọ n’ikuku na tịwịta ga-aka akwalite ezi ọmụmụ asụsụ n’ebe ndị ọmụụ nọ. Na nchọcha e mere gbasara mgbasa ozi n’otu ntabi anya, Craig n’ime Thurairaj, Hoon, Roy naFong (2015) chịkọtara nchọcha a ma kwuo na mgbasa ozi site n’ọwa mgbasa ozi n’ikuku ga-enyere ụmụ akwụkwọ aka inwe ohere ịmụta asụsụ n’ụzọ pụrụ iche. N’ezie, a chọpụtakwara na usoro mgbasa ozi a anaghị akwalitecha ezi mmụta n’ihi na ndị ọmụụ na-agbaso usoro mkpọbiri maọbụ ndebiri na ụfọdụ asụsụ ọrụ arọrọ arọ bụ nke nupuru isi n’iwu ụtọasụsụ asụsụ ala Naịjirịa a na-akuzi. Ụdị ọnọdụ a na-ebute ndacha n’usoro edide na ndọlazụ ezi mmụta n’ebe ụmụ akwụkwọ nọ.
N’ịkọwa ihe ịmaka a na-enweta n’iji igwe kọmpụta kuzie asụsụ, Cumming n’ime Thurairaij na ndị otu ya (2015) na-ekwu na o nweghi mgbe iji kọmpụta nye aka na nkuzi asụsụ ga-anochite anya ndị nkuzi. N’ihi nke a, ọnọdụ ọchịchị nchekwa bụ nke e ji mara ndị nkuzi n’oge ikuzi na ọmụmụ asụsụ na klaasị ga-abụ nke a ga-ewepu n’ọrụ. ka o sila dị, e kwetara na e nweela usoro ọhụrụ kachasị mma eji akuzi asụsụ ma bụrụ ngwa a ga-eji edozigharị ọnọdụ agụmakwụkwọ n’ obodo mba ụwa dum. Usoro dP etu a ka nchọcha a tinyere n’ọrụ iji kuzie asụsụ obodo Naịjirịa.
Nchịkọta ntulegharị agụmagụ
Ntulegharị agụmagụ a gosipụtara na e nweela ihe ndọlazụ na mmekpa ahụ mgbe e ji mgbasa ozi ọha dịka ngwa nkuzi wee na-akuzi ihe mana ọtụtụ ihe mbamuru ga-esikwa n’ime ya pụta ọ kachasị mgbe a haziri ngwa ọmụmụ nakwa usoro nkuzi n’oge ugbu a ka ọ dabara ndị agba ọhụrụ. Nchọcha a gosikwara na-emeela ọtụtụ nchọcha yiri nke a n’asụsụ ofesi (AO) mana e nweghi ụdị ya e jiri asụsụ obodo Naịjirịa ọ bụla wee mee.
Igosi na inyocha nnweta njatụle
Nchọcha a gbadoro ụkwụ n’ụzọ a ga-esi eji usoro mgbasa ozi ọha wee kuzie ma mụọ asụsụ obodo Naịjirịa. Mgbasa ozi ọha nwere ọdịdị ndị a: ihu akwụkwọ n’ikuku, yutubu, tịwịta, bụlọgụ, wasapụ, mbipụta okwu na ndị ọzọ. Nke ọ bụla n’ime ọwa okwu ndị a na-enye aka ịkwalite ezi ọmụmụ asụsụ obodo ndị Naịjirịa n’ebe ọ dị ukwuu. Kedu ka a ga-esi eji mgbasa ozi ọha kwalite ezi ọmụmụ ihe mgbe a na-amụ asụsụ obodo Naịjirịa? Ka a ga-esi enweta ihe nrite a bụ site n’ịgbaso ihe ndị a:
Ihu akwụkwọ n’ikuku (facebook)
Usoro ndị a ka a ga-agbaso iji sonye ọwa okwu ihu akwụkwọ:
Nke mbụ bụ imepe maọbụ isonye n’ihu akwụkwọ n’udodo bụ nke ga-ejikọta ndị ọmụụ niile sonyere na ya ọnụ. Ndị ọmụụ ndị a ga-emepe ihu akwụkwọ site n’akpọmoku bụ nke jikọtara ndị otu a niile ọnụ.
Ịkpọbata ndị ọmụụ ka ha sonye n’otu a e mepere.
A ga-ezipu isiokwu kwesịrị nkọwa n’asụsụ a chọrọ ka e nwee usoro ihe omume bụ nke ndị ótú ótù a niile ga-enwe ohere na ikike iji asụsụ a na-ekwu maka ya wee kọwa isiokwu ahụ.
Ndị ọmụụ na ndị ngere ga-atụnye echiche ha site n’ịgbaso usoro iwu nkuzi asụsụ obodo ahụ.
Itinye ngwa nkuzi ndị ga-akwalite ọmụmụ asụsụ obodo ahụ.
A ga-enye ndị ọmụụ na ndị nkuzi ohere izipụta maọbụ isepụta isiokwu ọ bụla kwesịrị ịmụ amụ n’asụsụ obodo a na-amụ site n’ọwa okwu ihu akwụkwọ n’ikuku.
Ndị nkuzi dịka ndị nkwalite na ndị nduzi ga-anọ n’ọwa okwu nkuzi a mgbe niile iji zaghachi ndị tụnyere aro maọbụ echiche ha n’ihe a na-akuzi ma gbaa ha ume site n’ụdị aro ha tụnyere.
Aro niile ndị a ga-atụnye ga-agbaso usoro asụsụ obodo e ji amụ ihe maọbụ eme nchọcha.
Usoro ndị a ga-agbaso wee sonye n’ọwa okwu Wasapụ nakwa iji ya wee mụọ ihe gụnyere:
Ndị ọmụụ ga-emepe ma banye n’ótù Wasapụ.
A ga-anabata ndị ọmụụ asụsụ obodo a n’ọwa okwu a.
A ga-ewere asụsụ ọmụmụ a zite isiokwu n’ọwa okwu a bụ onye ọ bụla sonyere n’ótù a ga-atụnye echiche ya.
A ga-etinye ihe nkiri onyonyo n’ọwa okwu a bụ nke ga-egosi ndị ọmụụ ka ndị nwe asụsụ a na-amụ maọbụ ndị ọ bụ asụsụ epum ha si eji asụsụ ha akpa ụbụbọ ma nụkwa asụsụ a n’ụdị ọkpụ.
Onye tinyere isiokwu a ga-atụle kwesịrị ịgwa ha ka ha were asụsụ a na-amụ wee tunye aro n’ihe gbasara ihe ha kiriri nakwa nke ha nụrụ na nti.
Ndị nkuzi dịka ndị nnyocha na ndị nhazi, kwesịrị ịhazi ihe ndị ọmụụ depụtara na aro ha tụnyere ma dezie ụtọasụsụ ebe ha dejọrọ. Ha ga-eduzikwa ndị ọmụụ n’iwu na-achịkwa ọmụmụ asụsụ obodo karịa ihe uche ha gwaburu ha na mbụ.
Oke na ọrụ dịrị ndị nkuzi nandị ọmụụ n’iji mgbasa ozi ọha dịka ngwa e ji akụzi mana amụ asụsụ obodo
Nchọcha a ga-ekewa ọrụ ndị a n’ụdị nke ndị nkuzi na nke ndị ọmụụ. Ya bụ ọrụ nke dịrị ndị nkuzi na ọrụ nke dịrị ndị ọmụụ. Usoro ótù abụọ ndị a na-agbaso n’iji mgbasa ozi ọha rụọ ọrụ mmụta na nkuzi di iche. A ga-ebu ụzọ zipụta oke na ọrụ dịrị ndị nkuzi gbasara iji mgbasa ozi ọha wee mụọ ihe maọbụ kuzie ihe.
Ọrụ dịrị ndị nkuzi mgbe e ji mgbasa ozi ọha akuzi asụsụ obodo Naịjirịa:
Ịgwa ndị ọmụụ ka ha sonye n’ọmụmụ ihe a na-eme n’ọwa okwu ududo bụ nke gbadoro ụkwụ n’asụsụ obodo a na-amụ.
Ịhazi mkparịta ụbụbọ na ọmụmụ ihe nke na-aga n’ikuku maọbụ n’ọnya nwa ududo.
Ịkwado ndị ọmụụ ka ha nwe ohere mepee ma sonye n’ọwa mkparịta ụbụbọ dịka ọwa bụlọgụ, ọwa ihu akwụkwọ n’ikuku na ọwa okwu ndị ọzọ ka ha nwe ike na-enweta nchọcha ndị e mereela gbasara ịmụ asụsụ obodo ka ha nwe ike na-agụ ha mgbe niile.
Iwube ogbe n’ọwa okwu, intaneti ebe ndị ọmụụ ga -ezukọrịta ma kpaa ihe dịrị ha.
Ha ga-akwalite ótù na-agba mbọ ma dị uchu n’ọrụ nakwa iguzobe ọnụnụ ọmụmụ juru ahụ oyi.
Ndị nkuzi ga- abụ ndị ọkpụụ ngwa nkuzi.
Ndị nkuzi ga-adị nkwadebe ịzaghachi ihe ndị ọmụụ mepụtara gbasara ihe a tụrụ anya n’aka ha. Ya bụ ịhazi oge nkuzi ha ka ọ daba adaba.
Ịgba mbọ kpọkọta ndị ọmụụ ma jikọta ha na ndị ogbe na-asụ asụsụ a na-amụ site n’ọwa nkiri, Yutubu.
Ọrụ dịrị ndị ọmụụ gụnyere:
Ndị ọmụụ ga-esonye n’ihe ọmụmụ n’ikuku nke gbadoro ụkwụ n’asụsụ obodo a na-amụ.
Ha ga-anabata mkparịta ụka keọha iji chọpụta ka e siri wube ihe ọmụmụ nke a na-amụ.
Ndị ọmụụ ga-agba mbọ tinye echiche ha na ka-esi eji asụsụ ọha obodo a na-amụ agbagha isiokwu e wepụtara ka a mụọ.
Ha ga-atụlekọrịta ọrụ keonwe ha. Nke a ga-enye aka ịkwalite nka nnabata/ ngere na nka nrụpụta.nkwupụta n’ime asụsụ a na-amụ maka ya.
Ha ga-ajụ ajụjụ banyere ihe mgbagwoju anya gbasara asụsụ nke a na-amụ nakwa omenala ebe asụsụ ahụ siri pụta. Ha ga-agba mbọ tulee ọtụtụ echiche ndị mmadụ gbasara mgbagha ndị ọmụụ mere bụ nke ga-enyere ha aka ịgbọta asụsụ ahụ nke ọma.
Mbamuru na ọghọm a na-enweta mgbe e ji mgbasa ozi ọha akuzi ihe.
A ga-ebu ụzọ leba anya na mbamuru. Ha gunyere ndị a:
Mgbasa ozi ọha bụ ngwa ọrụ e ji ewube nka odide na nke ọgụgụ n’ime asụsụ a na-akuzi. Ịma atụ: ọwa okwu ihu akwụkwọ n’ikuku, bụlọgụ nakwa ọwa okwu ndị ọzọga.
Ọwa nkiri yutubu bụ ụdị mgbasa ozi ọha nke na-akwalite nka ọnụnụ asụsụ site na nkiri ihe onyonyo.
Mgbasa ozi ọha na-akwalite ọnụdụ ọmụmụ nke onwe.
ndị nkuzi bụ enyi ndị ọmụụ site n’ikwalite ọmụmụ ihe ka ọ dị mma.
Ụdị ọmụmụihe a anaghị aka oke n’ebe onye si maọbụ ebe onye bi.
E nweghi obere oge eji amụ ihe; mgbe ọ bụla ị mepere ọwa okwu a itinye uche gi.
Ụdị ọmụmụ a na-ejiko ndị ọmụụ na ndị nwe asụsụ ọkpụ a ka ha na-akparịta ụbụbọ.
Ha na-eweta ezi ọnụdụ ọmụmụ ihe n’etiti ndị ọmụụ.
Usoro nkuzi a na-ewube ogbe ọmụmụ pụrụ iche ebe ndị ọmụụ na-anọ ama onwe ha ma rụkọ ọrụ ọnụ.
Ihe ọmụmụ a na-enye aka n’ebe ọ dị ukwuu site n’ime ndị ọmụụ ka ha mara ihe ekwe na-akụ n’iji mgbasaozi ọha nakwa nka teknọlọji e ji agbasa ozi n’ụwa taa.
Ọghọm dị n’iji mgbasaozi ọha kuzie ihe n’ ndụ ndị mmadụ
E nwere ụfọdụ ihe ọghọm a na-enweta site n’iji mgbasa ozi ọha wee kuzie ma mụọ ihe, ọ kachasị mgbe a na-amụ asụsụ obodo Naịjirịa. Ọghọm ndị agụnyere:
Mmegharị anya: ụdị mmegharị anya ndị a gụnyere inweta ozi nke onwe, inyochawa ọkwa ndị na-abata n’ọwa okwu mgbe a na-amụ ihe n’ikuku, mgbasa ozi ịkwalite ahịa na ihe ụ́ rà ndị ọzọ.
Ihe mmara ahụ: mgbe ụfọdụ, ndị ọmụụ na-ahapụ ọnọdụ ọmụmụ ihe site na mgbasa ozi ọha ma dabere n’ụdị mgbasa ozi ọha ndị ọzọ na-abụghị maka mmụta asụsụ obodo.
E nweghi ezi mmụta banyere etu a ga-esi jiri usoro teknọlọjị ọgbara ọhụrụ ndị a kuzie ma mụọ ihe na e nweghi ihe ndọlazụ nye ndị nkuzi na ndị ọmụụ.
Ụfọdụ ndị ọmụụ na-ahụta mgbasa ozi ọha dịka ebe a na-anọkọ wee na-ekpori ndụ n’ikuku karịa ebe ọmụmụ ihe.
Ụdị nkuzi na ọmụmụ ihe a na-ebute ezi ịkpa oke keọhabụ nke mere na ndị ji ya arụ ọrụ anaghị enwe ohere isonye na ndụ nke a hụrụ anya. Ndụ nke a hụrụ anya n’ebe a bụ mgbe ndị ọmụụ zukoro na klaasị mana amụ ihe. Ụdị ọmụmụ ihe a nọ ọnụdụ onye na nke ya.
Alfaki, I.M., na Alharthy, K. (2014). Towards a digital world: Using social network to promote learner’s language. American International Journal of Contemporary Research, 4 (10), 105-114.
Kalasi, R. (2014). The impact of social networking on nwe age teaching and learning:An overview. Journal of Education and Social Policy, 1(1), 23-28.
Kaplan, A. M., na Haenlein, M. (2010). Users of the world unite: The challenges and opportunities of social media. Business Horizon, 55 (1), 61.
Moody, M. (2010). Teaching twitter and beyond: Tips for incorporating social media in traditional courses. Journal of Magazine & Nwe Media Research, 11 (2), 1-9.
Omachonu, G.S. (2011). Language and linguistics. Na G.S. Omachonu (Ọhz.). NSUK Texts in General Linguistics, (Ihu 1-12). Enugu: Rossen Publication and Services.
Paulsen, M., na Tække, J. (2013). Social media and teaching. Nke dị n’ọwa okwu ududo https://pure.au.dk>files>social-media. E setere ya na Oktoba 4, 2017.
Thurairaj, S., na Roy, S.S. (2012). Teachers emotions in FLT material design. International Journal of Social Sciences and Humanities, 2 (3), 232-236.
Thurairaj, S., Hoon, E. P., Roy, S.S., na Fong, P.K. (2015). Reflections of students’ language usage in social networking sites: Making or marring academic English. Nke dị n’ọwa okwu ududo, www.ejel.org. E setere ya na Oktoba 4, 2018.
Wright, N. (2010). Twittering in teacher education: Reflecting on practicum experiences. I Open Learning, 25 (3), 259-265.